काठमाडौँ, २३ जेठ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से) आज १३.९१ अंकले वृद्धि भएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागले बोनस र हकप्रद शेयरको आधार मूल्यमा पूँजीगत लाभ कर लगाउन निर्देशन दिएपछि हिजोदेखि शेयर…
सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्सको तीन शाखा नेपालगञ्ज, दाङ र बुटवलमा
काठमाडौँ, २० जेठ । सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले बाँके जिल्लाको नेपालगञ्जमा जेठ १८ गते, दाङ जिल्लाको तुलसीपुरमा जेठ १९ गते र रुपन्देही जिल्लाको बुटवलमा जेठ २० गते छुट्टाछुट्टै तीन नयाँ…
क्यास्ट्रोल लुब्रिकेन्टको नयाँ लुब्रिकेन्ट ‘क्यास्ट्रोल भेक्टन’ बजारमा
काठमाडौँ, १८ जेठ । बस, ट्रक, ट्रिपर तथा अन्य हेभी इक्विपमेन्टका लागि उपयुक्त इन्जिन आयलको रुपमा क्यास्ट्रोल भेक्टन नेपाली बजारमा भित्रिएको छ । क्यास्ट्रोल लुब्रिकेन्टको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता नेपाल…
रैराङ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको सेयर रजिष्ट्रेशन कार्य भिवोर क्यापिटललाई हस्तान्तरण
काठमाडौँ, १८ जेठ । रैराङ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको सेयर रजिष्ट्रेशन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरु भिवोर क्यापिटल लिमिटेडले गर्ने भएको छ । उक्त कार्यको लागि रैराङ हाइड्रोपार डेभलपमेन्ट कम्पनी र भिवोर क्यापिटल…
लगानीको वातावरण अनुकूल हुँदै, अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव
काठमाडौँ, १३ जेठ । नेपालको संविधानअनुसार तीनतहका निर्वाचनपछि मुलुक राजनीतिक स्थायित्वतर्फ उन्मुख भएसँगै लगानीको वातावरण पनि क्रमशः अनुकूल बन्दै गएको छ । आपूर्ति प्रणालीमा आएको सुधार, ऊर्जाको उपलब्धता, व्यापार क्षेत्रको…
काठमाडौँ, २४ वैशाख । बीकेटी टायरको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता डेल्टा डिष्ट्रिब्युटर्सले डिलर मिट कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । धुलिखेल लज रिसोर्टमा आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा बीकेटीको देशभरका डिलर प्रतिनिधिहरुले…
सुरुङ्गा, झापा, २३ वैशाख । उच्च कुलघरानका मानिसले सोखका लागि पाल्दै आएको खरायो आयआर्जनको गतिलो माध्यम बन्न सक्छ भन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ । तर झापाको अर्जुनधारा–२ झेलेनीका कवीन्द्र भण्डारीले खरायोलाई…
रामपुर, पाल्पा, २० वैशाख । पाल्पामा असिनापानीले करौडौँको तरकारी बालीमा नोक्सानी पुरयाएको छ । तीन दिनअघि आएको ठूलो असिनापानीले कृषकले लगाएको मकैबाली, तरकारी, सुन्तला, काफल, लिची नष्ट पारेको हो ।…
काठमाडौँ, १९ वैशाख । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजल र मट्टितेलको मूल्यवृद्वि गरेको छ । आज राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी निगमले पेट्रोलमा दुई र डिजेल र मट्टितेलमा तीन/तीन…
काठमाडौँ, १९ वैशाख । सरकारी मूल्यअनुसार सालको गोलिया काठप्रति घनफिट रु ८०० छ, तर सोही काठ चिरानपछि बजारमा झण्डै रु ६ हजारका दरले बिक्री हुन्छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले काठ दाउराको…
शेयर बजार – आठ अंकले घट्यो
काठमाडौँ, १६ वैशाख । गत सातादेखि नै निरन्तर ओरालो लाग्दै आएको शेयर बजार आज पनि आठ अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेन्जकाअनुसार नेप्से परिसूचक ८.२१ बिन्दुले ओरालो लागेर एक…
एक चक्की सिटामोलको रु सात, किन्न बाध्य दुर्गमका बिराम
बझाङ, १६ वैशाख । औषधि अभावमा दुर्गमका बिरामी समस्यामा परेका छन् । स्वास्थ्य चौकीले सिटामोलसमेत उपलब्ध गराउन नस्कँदा दहबगड, काँडा, भामचौर, गडराय, धमेनालगायतका दजनौँ स्वास्थ्य चौकीमा उपचार लिन आउने बिरामी…
काठमाडौँ, १४ वैशाख । अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा केही अवरोध आएका कारण राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सको यात्रु संख्या घटेको छ । लामो समयको अन्तरालपछि अघिल्लो वर्ष निगमको यात्रु संंख्या तथा व्यापार राम्रो…
काठमाडौँ, १३ वैशाख । झापाका २७ वर्षीय महेश यादव (नाम परिवर्तन) र इटहरीका ३१ वर्षीय हरि खड्का (परिवर्तित नाम) गत अघिल्लो वैशाख महिनामा कोरिया जान धादिङका रमेश दनुवार (नाम परिवर्तन)…
उन्नतीस अंकले घट्यो शेयर बजार
काठमाडौँ, १३ वैशाख । शेयर बजार दोहोरो अंकले ओरालो लागेको छ । लगातार घट्दै आएको बजार आज २९.२५ अंकले ओरालो लागेर नेप्से परिसूचक एक हजार ३५७ बिन्दुमा आइपुगेको हो ।…
बारामा रु दुई अर्ब मूल्य बराबरको गहुँ उत्पादन
कलैया, १२ वैशाख । यस वर्ष बारामा करीब रु दुई अर्ब मूल्य बराबरको गहुँ उत्पादन भएको छ । खाद्यान्न बालीमा दोस्रो स्थानमा रहेका गहुँबाली बारामा आव ०७४/७५ मा कूल २९…
काँकडभिट्टा, १२ वैशाख । नेपाल, भारत, बंगलादेश र भुटानबीच चारदेशीय सीधा बस यातायात सेवा सञ्चालनका लागि बंगलादेशको राजधानी ढाकाबाट छुटेका दुई यात्रुबाहक बस आज नेपाल प्रवेश गरेको छ । बंगलादेशको…
काठमाडौँ, ११ वैशाख । शेयर बजारमा आज नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार १५.९९ बिन्दुले ओरालो लागेर नेप्से परिसूचक एक हजार ३९४ बिन्दुमा पुगेको…
बनेपामा कृषि प्रवर्द्धन व्यापार मेला
बनेपा, ११ वैशाख । काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपास्थित नयाँ तरकारी बजारमा यही वैशाख १५ गतेबाट चार दिने कृषि प्रवर्द्धन मेला हुने भएको छ । जिल्लामा उत्पादित कृषिजन्य वस्तुलाई सहजै उपभोक्तामाझ पु¥याउने उद्देश्यका…
काठमाडौँ, १० वैशाख । शेयर बजार आज दोहोरो अंकले ओरालो लागेको छ । आइतबार ५० अंकले बढेको बजार आज भने २७.६४ बिन्दुले ओरालो लागेर नेप्से परिसूचक एक हजार ४१० बिन्दुमा…
काठमाडौँ, ५ वैशाख । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा आज ३१.८३ वृद्धि भई कारोबारमा व्यापकता आएको छ । दोहोरो अंकको वृद्धिसहित रु एक अर्ब १२ करोड ६७ लाख बराबरको शेयर कारोबार…
इलाम, ४ वैशाख । इलाम सदरमुकाममा आयोजित तीनदिने इलाम महोत्सव सम्पन्न भएको छ । इलाम सदरमुकाम (खलंगा) स्थापना भएको २०० औँ वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित महोत्सव सोमबार सकिएको हो ।…
विराटनगर, ४ वैशाख । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ मोरङले विराटनगरमा तीन दिने रोजगार मेलाको आयोजना गर्ने भएको छ । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग सो महासंघका मोरङ अध्यक्ष…
काठमाडौँ, ३ वैशाख । हालसम्मकै उच्च संख्यामा पर्यटक भित्र्याएको वर्षका रुपमा विसं २०७४ दर्ज भएको छ । लामो समयदेखिको पर्यटक बढाउने विभिन्न प्रवर्द्धनात्मक अभियानका कारण २०७४ सालमा १० लाख पर्यटकले…
खोटाङ, ३ वैशाख । दिक्तेलस्थित एक पसलबाट बिक्री गरिएको चिनीमा युरिया मल मिसिएको भेटिएपछि प्रशासनले कारवाही शुरु गरेको छ । ग्राहकले खरिद गरेको चिनीको प्याकेटमा युरिया मिसिएको भेटिएपछि पाण्डे भेराइटिजको…
रत्ननगर, चितवन, ३ वैशाख । नयाँ वर्ष लागेसँगै जिल्लाको पर्यटन व्यवसायमा शुभ संकेत देखिएको छ । यस पटक नयाँ वर्षमा विगतभन्दा दोब्बर बढी पर्यटक सौराहा भित्रिएका छन् । “नयाँ वर्षमा…
काठमाडौँ, २ वैशाख । नेपालमा पनि इन्टरनेटमार्फत शेयर खरिद बिक्री गर्न आदेश दिन सक्ने प्रणालीको अभ्यास शुरु भएको छ । क्रिस्टल कञ्चनजंगा सेक्युरिटी प्रालिमा आज आयोजित समारोहमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका…
काठमाडौँ, २ वैशाख । नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय सर्वसाधारणलाई अवलोकनका लागि खुला भएको नौ वर्षमा २७ लाख ३१ हजार ४८५ जनाले अवलोकन गरिसकेका छन् । विसं २०६५ जेठ १५ मा गणतन्त्र…
जितपुर, कपिलवस्तु, २ वैशाख । कपिलवस्तु जिल्ला पछिल्लो समय माछामा आत्मनिर्भर हुन लागेको छ । अन्य बालीभन्दा राम्रो आयआर्जन हुने र माग पनि बढी भएकाले यहाँ माछापालन गर्ने कृषकको संख्या…
काठमाडौँ, ३० चैत । नेपाल टेलिकमले नयाँ वर्षको सन्दर्भमा आफ्ना उपभोक्ताको थप सुविधाका लागि ‘नयाँ वर्ष अफर २०७५’ उपलब्ध गराउने भएको छ । उक्त अफर २०७५ वैशाख १ देखि लागू…
मुगु, २९ चैत । आगामी वैशाख १ गते उद्घाटन हुने रारा कणाली पर्यटन वर्षको कार्यक्रममा सहभागी हुने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई गाउँमै बासको व्यवस्था गरिएको छ । रारा तालको नजिक…
आठराई, तेह्रथुम, २८, चैत । फिदिम नगरपालिका–३ लालीखर्कका महिला नेपाली हाते कागज बनाएर आम्दानी गर्दै आएका छन् । स्थानीय स्तरमा उत्पादित अर्गेली (लोक्ता) बाट कागज बनाएर यहाँका महिला आत्मनिर्भर बनेका…
भक्तपुर, २७ चैत । एक सातायता परेको असिना पानीका कारण जिल्लामा रु पाँच करोड बराबरको काँचो इँटा नष्ट भएको छ । जिल्लाका ६२ वटा इँटा भट्टामा रहेको काँचो इँटा असिना…
काठमाडौँ, २५ चैत । सुनचाँदी कारोबारबाट मुलुकको राजश्वमा वार्षिक आठ अर्ब योगदान हुने गरेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले पाँचौँ वार्षिक साधारण सभाको पूर्वसन्ध्यामा आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार…
गाईघाट, उदयपुर, २५ चैत । पहाडी गाउँ रौताका केही महिलाले वर्षेनी सिस्नु बिक्री गरेर लाखौँ रुपैयाँ आम्दानी गर्ने गरेका छन् । यस पटक पनि पुसदेखि हालसम्ममा रौता मलबाँसेकी ६३ वर्षीया…
सनराइज बैंकको भिसा कार्ड मार्फत भुक्तानी गर्दा गोरखा डिपार्टमेन्ट स्टोरमा १० प्रतिशत सम्म नगद छुट योजना
काठमाडौँ, २२ चैत्र । सनराइज बैंक र गोरखा डिपार्टमेन्ट स्टोर बिच नेपाल अधिराज्य भित्र संचालनमा रहेका गोरखा डिपार्टमेन्ट स्टोरहरुमा कुनै पनि सामान खरिदमा १० प्रतिशत सम्म नगद छुट सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा…
सनराइज बैंकको भिसा कार्ड प्रयोग गरी QFX मा हरेक दुई टिकटको खरिदमा एक निःशुल्क
काठमाडौँ, २१ चैत । सनराइज बैंक लिमिटेडले आफ्ना ग्राहकवर्गहरुलाई विभिन्न सुविधा दिने क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय कार्ड प्रदायक कम्पनी भिसासँग सहकार्य गरी, Team Quest Pvt. Ltd. अन्तर्गतका सम्पूर्णसनराइज बैंकको भिसा कार्ड प्रयोग…
नुवाकोट, २१ चैत । नुवाकोटमा यस वर्ष रु एक अर्ब ११ करोड मूल्य बराबरको आलु उत्पादन भएको छ । बर्खे र हिउँदे दुई याममा उत्पादित ७४ हजार २०४ मेट्रिक टन…
स्पर्स लघुवित्तको २ करोड ४० लाख कित्ता साधारण शेयर निष्काशनका लागि सानिमा क्यापिटल बिक्री प्रबन्धक नियुक्त
काठमाडौँ, १४ चैत । स्पर्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेडले २,४०,००,००० रुपैंया वरावरको २,४०,००० कित्ता साधारण शेयर (कर्मचारीहरु समेत) सर्वसाधारणमा निष्काशन गर्नको लागि सानिमा क्यापिटल लिमिटेडलाई निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको रुपमा…
शेयर बजारमा सुधार: ३९ अंकले बढ्यो नेप्से
काठमाडौँ, १३ चैत । सोमबार ५२ अंकले ओरालो लागेको शेयर बजार आज थामिएर ३९.१६ बिन्दुले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका अनुसार ‘क’ वर्गका कम्पनीका शेयर मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक…
शेयर बजार ५२ अंकले ओरालो लाग्यो
काठमाडौँ, १२ चैत । धितोपत्र बजार आज करिब ५२ अंकले ओरालो लागेको छ । बजार खुलेलगत्तै तीन प्रतिशतको दरले बजार ओरालो लागेपछि नेपाल स्टक एक्स्चेन्जले ‘सर्किट ब्रेक’ नै लगाउनु परेको थियो…
काठमाडौँ, ८ चैत । लगातार ओरालो लाग्दै आएको शेयर बजार आज पनि दोहोरो अंकले ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज नेप्से परिसूचक १०.६३ बिन्दुले ओरालो लागेर एक…
नक्कली स्टिकर छाप्ने भारतीय कम्पनी छानविनको दायरामा
वीरगञ्ज ६ चैत । मदिराको बिर्काेमा टाँस्ने राजश्वको नक्कली स्टिकर छाप्ने भारत कलकत्ताको एक कम्पनीलाई छानविनको दायरामा ल्याउने प्रयास भइरहेको आन्तरिक राजश्व कार्यालय वीरगञ्ज पर्साले जनाएको छ । नक्कली स्टिकर…
उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीलाई कडा कारवाहीको माग
काठमाडौँ, १ चैत । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले वस्तु तथा सेवाको कालोबजारी, एकाधिकार र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने व्यवसायीलाई कडा कारवाहीको माग गरेको छ । प्रत्येक वर्ष मार्च १५ का…
काठमाडौँ, २४ फागुन । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई उकास्दै नेपाली वस्तु तथा सेवालाई विश्व बजारमा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले आजदेखि यहाँ पाँच दिवसीय सातौँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला प्रारम्भ भएको छ । नेपालसहित भारत,…
काठमाडौँ, २२ फागुन । साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशनले आव २०७३/७४ को मुनाफाबाट आफ्ना साझेदारलाई २५ प्रतिशत बोनस शेयर र १० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । उपभोक्तालाई सर्वसुलभ रुपमा…
काठमाडौँ, २१ फागुन । लगातार ओरालो लाग्दै आएको शेयर बजार आज पनि दोहोरो अंकले घटेको छ । आइतबार ४१ अंकले घटेको बजार आज १६.६९ अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक…
मंगलबारे, इलाम २१ फागुन । जिल्लामा दुग्धजन्य उत्पादनमा वृद्धि भएको छ । माग बढेसँगै उत्पादन बढेको हो । जिल्लाका पूर्वी क्षेत्रमा रहेका व्यापारिक केन्द्रहरु फिक्कल, पशुपतिनगर, कन्याम, हर्कटेलगायत बजारमा मात्रै…
नेप्सेमा ४२ अंकको गिरावट
काठमाडौँ, २० फागुन । निरन्तर ओरालो लागेको नेप्से आज ४१.५६ अंकले झरेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सबै परिसूचक नकारात्मक रही एक हजार ३०४ अंकमा ओर्लिएको हो । यो एक…
काठमाडौँ, १९ फागुन । धितोपत्र बजारमा यससाता रु एक अर्ब ९६ करोड ३८ लाख ७१ हजार बराबरका ४५ लाख २६ हजार ५५० कित्ता सेयर खरिद बिक्री भएका छन् । नेपाल…
चौँरी गोठले करोडपति बने मनाङका कान्छा गुरुङ
मनाङ, १६ फागुन । नेपालका शहर होस् या ग्रामीण भेग सबैतिरका युवा विदेशिने लहर चले पनि मनाङका कान्छा गुरुङ भने चौँरी गोठमा रमाइरहेका छन् । मनाङको नेस्यङ गाउँपालिका–६, मनाङ गाउँका…
पाल्पा महोत्सवमा रु १२ करोड बराबरको कारोबार
रामपुर, पाल्पा, १४ फागुन । पाल्पा उद्योग वाणिज्य संघको मुख्य आयोजनमा शुरु भएको पाल्पा महोत्सव तथा व्यापार मेलामा रु १२ करोड बराबरको कारोबार भएको छ । तानसेनको टुँडीखेल मैदानमा गत…
अाजदेखि सि–आश्वा प्रणाली लागू हुने
काठमाडौँ, ११ फागुन । धितोपत्र सार्वजनिक निष्काशन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र सर्वसूलभ बनाउन सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लि.ले शुक्रबारदेखि केन्द्रीकृत आश्वा प्रणाली (सि–आश्वा) प्रणाली लागू गरिने जनाएको छ । फाराम बोकेर…
तेह्रथुम, १० फागुन । विदेशमा ज्यान जोखिममा राखेर काम गर्नुपर्दाको अनुभव त्यहाँ भोगेर आएकालाई मात्र थाहा हुन्छ । बाबु बाजेले गरेको खेतीपातीको कामको सट्टा छिटो र मनग्य कमाउने सपना बाकेर…
काठमाडौँ, १० फागुन । धितोपत्र बजारमा शुक्रबारदेखि रु दुई अर्ब ५१ करोड ६० लाख बराबरको साधारण शेयर (आइपिओ) निष्कासन हुने भएको छ । रसुवागढी र साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाले शुक्रबारदेखि एकै…
काठमाडौँ, ८ फागुन । विभिन्न छ बीमा कम्पनीले ३१ करोड ४३ लाख ३८ हजार ८३६ कित्ता हकप्रद शेयर निष्कासनको तयारी गरेका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दिइएको निवेदनका आधारमा ती…
मंगलबारे, इलाम, ७ फागुन जिल्लामा विगत केही महिनायता छुर्पीको मूल्यमा कमी आएपछि किसान मारमा परेका छन् । जापान, अमेरिकालगायत देशमा निर्यात हुने गरेको छुर्पीबाट मनग्य आम्दानी लिँदै आएका छुर्पी व्यवसायी…
चरिकोट, ४ फागुन । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाले स्थानीय जनता र अन्य सर्वसाधारणका लागि रु दुई अर्ब ६४ करोड बराबरको शेयर जारी गर्ने तयारी गरेको छ । दोलखाको बिगु गाउँपालिका–…
दर्वाङ्ग म्याग्दी जलविद्युत परियोजना २५ मे.वा.को वित्तीय व्यवस्थापन
काठमाडौँ, ४ फागुन । धौलागिरी कालिका हाईड्रो लिमिटेडले म्याग्दी जिल्लाको दर्वाङ्ग, निसकोट, वावियाचौर अवस्थित म्याग्दी खोलाको पानीबाट २५ मेगावाट क्षमताको “दर्वाङ्ग म्याग्दी जलविद्युत परियोजना” निर्माण गर्ने भएको छ । परियोजनामा…
भक्तपुर, ३ फागुन । मध्यपुरथिमि नगरपालिकाले वडा नं २ गठ्ठाघरस्थित पाँच कम्पनीमा आज एकै पटक शिलबन्दी गरेको छ । नगरपालिकाले गठ्ठाघरस्थित आइचर मोटर्स कम्पनी, एग्रोभेट खाद्यान्न भण्डार, ग्रिल कारखाना, गाडीको…
काठमाडौँ, ३ फागुन । नयाँ सरकारलाई धितोपत्र बजारले स्वागत गरेको छ । लामो समयदेखि ओरालो लाग्दै आएको बजार आज हालसम्मकै सबैभन्दा बढी अंकले उकालो लागेको हो । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका…
बाह्रौँ पाल्पा महोत्सव आजदेखि
रामपुर, पाल्पा, ३ फागुन । तानसेनमा आजदेखि ‘१२औँ पाल्पा महोत्सव तथा व्यापार मेला’ शुरु भएको छ । ‘पाल्पामा कृषि, पर्यटन, उद्योग र व्यापार, अवसर र सम्भावना छ अपार’ नाराका साथ…
भीमदत्तनगर, ३ फागुन । पछिल्ला वर्षहरुमा कञ्चनपुरमा व्यावसायिक माछापालनतर्फ किसानको आकर्षण बढ्दै गइरहेको छ । किसानमा माछापालनसँगै प्राविधिक ज्ञानको स्तर पनि बढिरहेको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका मत्स्य अधिकृत…
वीरगन्जमा हुन्डी कारोवारी पक्राउ
पर्सा, २८ माघ । सवारी साधनको पार्टपुर्जा बिक्रीको आडमा मुद्राको अवैध ओसारपसार (हुन्डी)को कारोबार गर्दै आएका चारजनालाई प्रहरीले आज पक्राउ गरेको छ । वीरगन्जको लिंकरोड स्थित न्यू दक्षिणकाली अटो मोबाइल्समा…
काठमाडौँ, २६ माघ । बुटवल पावर कम्पनीले आह्वान गरेको थप निष्काशन (एफपिओ)मा मागअनुसारको आवेदन नपरेपछि संस्थागत लगानीकर्ताले पनि शेयर खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सो कम्पनीको बिक्री प्रबन्धक…
बिल्डकन र उड अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी
काठमाडौँ, २६ माघ । नेपालमा हाल भइरहेको समग्र निर्माण क्षेत्रको विकासमा टेवा पुरयाउने उद्देश्यले चौथो नेपाल बिल्डकन र उड अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी, २०७४ आजदेखि शुरू भएको छ । मिडिया स्पेश सोलुसन्स…
सेवोनको नयाँ नियम: अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी एउटै हुनुहुन्न
काठमाडौँ, २६ माघ । सरकारले कुनै पनि संस्थाको अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारीमा एकै व्यक्ति रहन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेवोन)ले सूचीकृत संस्थाको संस्थागत…
काठमाडौँ, २६ माघ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल क्षेत्रीय कार्यालय बालाजुले ललितपुरका १० उद्योगलाई तीन दिनभित्र उपस्थित हुन पत्राचार गरेको छ । कार्यालयले आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागलाई…
काठमाडौँ, २५ माघ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लगानी गर्न नसक्ने अति विपन्न परिवारलाई श्रममा आधारित शेयर दिने भएको छ । प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेका माथिल्लो अरुण, दूधकोशी, उत्तरगंगा, सुनकोशीजस्ता आयोजनामा…
आस्वा र सिआस्वा फरक हुन् भ्रममा नपरौँः बोर्ड
काठमाडौँ, २३ माघ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र कारोबारलाई थप सहज बनाउन आगामी फागुन ११ गतेदेखि केन्द्रीय आस्वा प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । बोर्डले आज एक सूचनामार्फत आस्वा प्रणाली…
काठमाडौंँ, २३ माघ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा रु २७ अर्ब ७६ करोड बराबरको सार्वजनिक निष्काशनको अनुमति प्रदान गरेको छ । बोर्डले प्रकाशित गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार…
नेपाल टेलिकमको १४अौँ वार्षिकोत्सव
काठमाडौँ, २२ माघ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले प्रत्येक ग्रामीण विद्यालयमा कम्प्यूटर शिक्षा पुरयाउने उद्देश्यका साथ सरकारले जनतालाई प्रत्येक लाभ हुने गरी द्रुत गतिमा काम गर्न नेपाल टेलिकमका…
काठमाडौँ, २१ माघ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाले आयोजना प्रभावित र सर्वसाधारणका लागि रु दुई अर्ब ६३ करोड ८५ लाख बराबरको साधारण शेयर (आइपिओ) जारी गर्ने भएको छ । सरकारले राष्ट्रिय…
काठमाडौँ, २१ माघ । देशमा राजनीतिक स्थिरतासँगै आर्थिक समृद्धिको कुरा उठिरहेको बेला बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा व्यवसायीहरुले जोडदिएका छन् । उनीहरुको बैंकिंग एक्सपोबाट आर्थिक क्षेत्रमा…
रामपुर, पाल्पा, १९ माघ (रासस) ः आगामी फागुन १६ देखि २५ गतेसम्म यहाँ हुने भनिएको दोस्रो रामपुर महोत्सव तथा व्यापार मेला–२०७४ स्थगित गरिएको छ । रामपुर उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा…
काठमाडौँ, १८ माघ । नेपाल आयल निगमले आज राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेको छ । निगम सञ्चालक समितिको केही बेरअघि सम्पन्न बैठकले पेट्रोलमा रु एक…
ललितपुर, १८ माघ । साझा यातायातले २९ वटा बस थप गर्ने भएको छ । उपत्यकाभित्र चल्ने र बाहिरका लागि समेत गरेर २९ वटा नयाँ बस ल्याउन लागिएको कामु प्रमुख कार्यकारी…
इलाम, १६ माघ । बढ्दो विदेश पलायन र अन्य क्षेत्रमा आकर्षक रोजगारीका कारण पछिल्लो समय इलामका चिया बगानमा काम गर्ने मजदूरको अभाव हुन थालेको छ । चिया मजदूर अभावका कारण…
गाईघाट, उदयपुर, १६ माघ । कटारी नगरपालिका, कटारी बजारमा सञ्चालन हुँदैआएका करिब तीन दर्जन मेडिकल हल तथा क्लिनिकमध्ये झण्डै डेढ दर्जन गैरकानुनी रुपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । गत शुक्रबार…
भीमदत्तनगर, १६ माघ । नेपाल खाद्य संस्थान क्षेत्रीय कार्यालय धनगढीले प्रदेश नं ७ का पहाडी जिल्लाका लागि वार्षिक रु १५ करोडको खाद्यान्न खरिद गरेर बिक्री वितरण गर्दै आएको छ ।…
खडेरीले उत्पादन पचास प्रतिशत घट्ने
फलेवास, पर्वत, १६ माघ । झण्डै चार महिना लामो समयदेखिको खडेरीका कारण जिल्लामा हिउँदे खेती प्रभावित बनेको छ । गत असोजको दोस्रो सातादेखि वर्षा भएको छैन । वर्षा नहुँदा हिउँदे…
काठमाडौँ, १५ माघ । ‘नेपाली वस्तु प्रवद्र्धन, समृद्ध नेपाल निर्माण’ भन्ने मूलनाराका साथ सातौँ नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला भृकुटीमण्डपमा आयोजना हुने भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी फागुन २४…
बुवाको मुख हेर्ने दिन तथा तीज पर्वको अवसरमा नेपाल टेलिकमको विभिन्न अफर
काठमाडौँ, ४ भदौ । नेपाल टेलिकमले बुवाको मुख हेर्ने दिन तथा तीज पर्वको अवसरमा विभिन्न प्रकारका अफर उपलब्ध गराउने भएको छ । अफर अन्तर्गत जीएसएम प्रिपेड÷पोष्टपेड मोबाइलमा युट्युब डाटा प्याकेज…
काठमाडौँ, २९ साउन । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले कम्युटर बिलिङ प्रणालीमा नचलेका तथा यात्रुसँग मोलमोलाई गरेर पैसा लिने गरेका ११५ ट्याक्सी चालकलाई कारबाही गरेको छ । महाशाखाको टोलीले ट्याक्सी प्रयोगमा…
काठमाडौँ, २६ साउन । नेपाल हाइड्रो डेभलपरले शुक्रबारदेखि तीन लाख ९० हजार कित्ता साधारण सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीका अनुसार रु एक सय अंकित मूल्यका रु तीन करोड…
एक अर्ब ५२ करोड पूँजीका उद्योग स्थापना
चितवन, २६ साउन । जिल्लामा गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा एक हजार १२४ वटा साना उद्योग दर्ता भएका छन् । भरतपुर महानगरपालिका उद्योग विकास शाखा कार्यालयका अनुसार रु एक अर्ब ५२…
काठमाडौँ, २६ साउन । धितोपत्र बजारमा आज शेयर कारोबार ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्चेञ्ज लिमिटेडका अनुसार आज बजार ८.१९ बिन्दुले ओरालो लागेर एक हजार ६५३.९० बिन्दुमा पुगेको छ…
बेरोजगार युवालाई लक्षित गर्दै जागिर र अवसर मेला
काठमाडौँ, २६ साउन । बेरोजगार युवालाई रोजगारको अवसर जुटाउने उद्देश्यले ‘जव् एण्ड करिअर फेयर’ (जागिर र अवसर मेला) हँुदैछ । यही शुक्रबार र शनिबार दुई दिनसम्म चल्ने मेलामा रोजगारदाता र…
काठमाडौँ, २५ साउन । नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एशोसियशनले इन्धन ढुवानीका क्रममा हुने प्राविधिक नोक्सानीको क्षतिपूर्ति बढाउन माग गरेको छ । आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एशोसियशनका अध्यक्ष लीलेन्द्रप्रसाद प्रधानले…
काठमाडौँ, २५ साउन । सर्वसाधारण नेपाली नागरिकलाई टेलिफोन सेवा उपलब्ध गराइएको एक सय वर्ष पूरा (२०७४ जेठ १ गते) भएको उपलक्ष्यमा नेपाल टेलिकमले कम्पनीको सेवा, सुविधा सम्बन्धमा आमसञ्चार माध्यममा २०७३…
राष्ट्रिय व्यावसायिक पहलको सम्मेलन शुरु
काठमाडौँ, १९ साउन । राष्ट्रिय व्यावसायिक पहलको दोस्रो जिम्मेवार व्यावसायिक सम्मेलन आजबाट काठमाडौँमा शुरु भएको छ । व्यावसायिक जिम्मेदारीको भूमिका निर्वाह गरी सभ्य समाज निर्माणमा व्यवसायीले अपनाउनुपर्ने उपायबारे सम्मेलनमा छलफल…
व्यावसायिक कारोबार गर्नेमा वृद्धि
सप्तरी, १९ साउन । सप्तरी जिल्लालगायत पूर्वाञ्चलमा नापतौलसम्बन्धी इजाजतपत्र लिई व्यावसायिक एवं व्यापारिक कारोबार गर्नेको संख्यामा अत्यधिक वृद्धि भएको छ । गुणस्तर तथा नापतौल क्षेत्रीय कार्यालय, विराटनगरका अनुसार आव २०७३/०७४…
बजारमा पाइने अधिकांश सिमेन्टको ताैल कम भेटियो
काठमाडौँ १८ साउन । सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट उत्पादित सिमेन्ट उद्योगले तौल घटाइ उपभोक्तालाई ठगी गरेको पाइएको छ । गुणस्तर तथा नापतौल क्षेत्रीय कार्यालय बालाजु र आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित…
इलाम, १८ साउन । गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा इलाम भित्रिएका ६६ हजार पर्यटकमध्ये २४ हजारले पर्यटकीयस्थल कन्यामको भ्रमण गरेका छन् । यहाँ भित्रिने अधिकांश पर्यटकको रोजाइमा कन्याम पर्ने गरेको…
विदेशबाट आएको कल उठाउँदा बोनस प्राप्त गर्न सकिने
काठमाडौँ, १५ साउन । नेपाल टेलिकमले जीएसएम/सीडीएमए तथा एडीएसएल/एफटीटीएच सेवाका ग्राहकहरुका लागि प्रमोसनल अफर (Promotional Offer) उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यसैगरी विदेशबाट आएको कल उठाउँदा पनि अब बोनस प्राप्त…
हराउँदै गएको चर्खाबाट आयआर्जन गर्दै महिला
रत्ननगर (चितवन), १५ साउन । चितवन पदमपुरका ६० वर्षीया वृद्धा सुखमाया तामाङ हातमा ऊनीको धागो च्यापेर आउनुभयो । तौलँदा दुई किलो १०० ग्राम भयो । चाउरी परेको अनुहारमा चमक देखिन्थ्यो…
पाँचथर, १५ साउन । जिल्लाको हिलिहाङ गाउँपालिकाको एकै गाउँमा रु साढे दुई करोडको गोलभेँडा उत्पादन भएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गतको साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) कार्यक्रम सञ्चालन…
सेन्ट्रल फाइनान्सले ५० प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने
काठमाडौँ, ११ साउन । सेन्ट्रल फाइनान्स लिमिटेडले चुक्ता पूँजीको ५० प्रतिशत शेयर जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । सेन्ट्रल फाइनान्सको साउन १० गते मंगलबार बसेको विशेष साधारण सभाले उक्त निर्णय…
गोरखा, ९ साउन । सदरमुकामस्थित हरमटारीमा चारजना युवाले रु तीन करोड लगानीमा होटल सञ्चालनमा ल्याएका छन् । दुईवटा ठूला सभाहल, बाल उद्यान, मसाज सुविधासहितको ‘होटल गोरखा प्यालेस’ सञ्चालनमा आएको हो…
ओम डेभलपमेन्ट बैंक र एनआईबिएल क्यापिटल मार्केटबीच सम्झौता
काठमाडौँ, ९ साउन । ओम डेभलपमेन्ट बैंक र एनआईबिएल क्यापिटल मार्केटबीच हकप्रद शेयर निष्काशनसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा ओम डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विश्वमोहन अधिकारी र एनआईबिएल क्यापटल…
फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सको ११,६२६ कित्ता शेयर बिक्री
काठमाडौँ, ५ साउन । फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंकले हकप्रद शेयर बिक्री खुल्ला गरी आवेदन माग गरेकोमा आवेदन नपरेको ११ हजार ६ सय २६ कित्ता शेयर शिलबन्दी बोलपत्रद्वारा बिक्री गर्ने भएको…
काठमाडौँ, ४ साउन । नेसनल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले बिक्री–वितरणका लागि आयात गरेको वाइन, चुरोट, बियर, चकलेट, लिकर आदि सामान काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । लामो समयसम्म ती सामान बिक्री–वितरण…
हाइगरका परिवहन नेपाली बजारमा
काठमाडौँ, ३ साउन । चिनियाँ प्रसिद्ध कम्पनी हाइगरका मिनिबसको राजधानीका बजारमा क्रयविक्रय थालिएको छ । आक्र्स ग्रुप प्राइभेट लिमिटेडले आयात गरेका ती बस बिक्रीको शुभारम्भ आज यहाँ आयोजित एक समारोहमा…
दैनिक पाँच हजार लिटर दूध बिक्री
बागलुङ, ३ साउन । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा जिल्लामा २५ हजार ३०० मेट्रिक टन दूध उत्पादन भएको छ । पशु विकास अधिकृत निलकण्ठ शर्माका अनुसार गत आवको तुलनामा तीन दशमलव २०…
नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र व्यवसायीको चुक्ता पूँजी बढायो
काठमाडौँ, ३ साउन । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) को चुक्ता पूँजी वृद्धि गरेको छ । बोर्डले निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको न्यूनतम चुक्ता पूँजी ३ करोड रुपैयाबाट बढाएर…
सिभिल बैंकले १० बराबर ४ को अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने
काठमाडौँ, ३ साउन । सिभिल बैंकले १० बराबर ४ को अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको छ । बैंकले २ करोड ७ लाख ४० हजार ८…
काठमाडौँ, २ साउन । नेपाल औषधि लिमिटेडले आउँदो असोजबाट सिटामोल उत्पादन गर्ने भएको छ । गत वैशाखबाट जीवनजल उत्पादन गरी पुनः औषधि उत्पादन गर्न सुरु गरेको लिमिटेडले दोस्रो चरणमा सिटामोल…
काठमाडौँ, २ साउन । साउन महिना हरियाली भएझै धितोपत्र बजारमा समेत हरियाली छाएको छ । आर्थिक वर्षको सुरुवातीबाटै हरियो झण्डाले स्वागत गरेको बजारले आज पनि निरन्तरता पाएको छ । बजार…
नापतौल ठगी गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही
विराटनगर, २ साउन । नापतौलमा अनियमिमता गरी उपभोक्तालाई ठगी गर्ने पूर्वाञ्चलका दुई हजार ६७५ व्यवसायी एवम् व्यापारीलाई गुणस्तर तथा नापतौल क्षेत्रीय कार्यालयले कारबाही गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को…
नयाँ अार्थिक वर्षको पहिलो दिन शेयरबजारमा हरियो झण्डा
काठमाडौँ, १ साउन । धितोपत्र बजारले नयाँ आवलाई हरियो झण्डा देखाएर स्वागत गरेको छ । कारोबार रकम उल्लेख्य रुपमा बढी नभए पनि आव २०७४/७५ को पहिलो दिन बजार बढेको नेपाल स्टक…
इलाम, १ साउन । यहाँका ग्रामीण क्षेत्रका पर्यटकीय क्षेत्रमा ठूलो लगानीमा होटल तथा कटेज खुल्न थालेका छन् । नेपालकै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यमा पर्ने अन्तुमा पर्यटकलाई लक्षित गरेर स्थानीय युवाले कटेज…
महोत्तरी, १ साउन । साउन महिना शुरु भएलगत्तै स्थानीय बजारमा हरियो रङका चुरा र मेहन्दीको व्यापार बढेको छ । यहाँका महिलाले साउन महिनाभर प्रायःजसो हरियो चुरा र मेहन्दी लगाउने गर्छन् ।…
पथरी (मोरङ), १ साउन । चियाको व्यावसायिकखेती भन्नेबित्तिकै आमनेपालीले झापा र इलाम जिल्लालाई सम्झने गर्छन् । तर, सुगम जिल्ला मोरङको दुर्गम गाउँ सिंहदेवीमा २०५५ सालदेखि स्थानीयवासी नारायण राईले सुरु गर्नुभएको चिया…
हाम्रो विकास बैंकले चार लाख एकाउन्न हजार एकसय एकाइस कित्ता शेयर बिक्री गर्ने
काठमाडौँ, १ साउन । हाम्रो विकास बैंकले हकप्रद शेयरको लागि बिक्री खुल्ला गरी आवेदन माग गरेकोमा संस्थापकतर्फ ३ लाख ९१ हजार ६ सय ३६ दशमलब ७६ कित्ता र सर्वसाधारणतर्फ ५९…
सन्धिखर्क, ३१ असार । अर्घाखाँची जिल्ला दूधमा आत्मनिर्भर बनेको छ । यहाँका युवा व्यावसायिक रुपमा गाईभैंँसी पालनमा लागेपछि यो जिल्ला दूधमा आत्मनिर्भर बनेको हो । जिल्लामा सय भन्दा धेरै दुग्ध…
काठमाडौँ, २९ असार । विगत केही दिनदेखि उकालो लाग्दै आएको धितोपत्र बजार आज भने ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका अनुसार आज बजार करिब पाँच अङ्कले ओरालो लागेर एक…
काठमाडौँ, २९ असार । साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशनले आफ्ना शेयरधनीलाई २० प्रतिशत बोनस शेयर र पाँच प्रतिशत नगद लाभांश दिने भएको छ । कर्पाेरेशनले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा रु ६१ करोड…
भक्तपुर, २९ असार । मध्यपुर थिमि–१ लोहकिल्थली मनहरा पुलसँगै रहेको सिद्धार्थ पेट्रोल पम्पमा गत असार १३ गते आगलागी हुँदा दुईजना घाइते भए । ट्याङ्करबाट पेट्रोल खन्याउने क्रममा ट्याङ्करको नोजल र…
काठमाडौँ, २८ असार । रामेछापका ७५ वर्षीय दुर्गाप्रसाद घिमिरे थापाथलीबाट जाउलाखेल जाँदा साझा यातायातमा चढ्नुभयो । उहाँले बस भाडा दिँदै गर्दा साझा यातायातले भाडा नै लिएन । आफूजस्ता ज्येष्ठ नागरिकका…
सुरुङ्गा (झापा), २८ असार । झापा गाउँपालिका–६ का पुण्यप्रसाद पौडेल १६ वर्षदेखि भारतको दिघल बैंक बजारमा दूध बिक्री गर्दैआउनुभएको छ । उहाँले दैनिक १५० लिटर दूध बिक्री गर्नुहुन्छ । नेपालमा…
बेँसीसहर(लमजुङ), २८ असार । जङ्गलमा पाइने अल्लो आयआर्जनको भरपर्दो स्रोत बन्न थालेको छ । उच्च पहाडी क्षेत्रमा पाइने अल्लो लोकप्रिय बन्दै गएपछि व्यावसायिक उत्पादनतर्फ आर्कषण बढेको छ । गुरुङ समुदायले…
सप्तरी, २८ असार । जिल्लामा यस वर्ष माछापालनको लागि ५१ बिगाहा जमिनमा पोखरी खनिएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका कार्यालयका प्रमुख भगिरथ यादवका अनुसार प्रति कठ्ठा रु दश हजारका…
अपर खिम्ती जलविद्युतले २४ लाख ७५ हजार शेयर जारी गर्ने
काठमाडौँ, २८ असार । अपर खिमती जलविद्युत आयोजनाले रु.१००।– अंकित दरका २४ लाख ७५ हजार कित्ता शेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । अपर खिम्ती जलविद्युत आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई ९…
राजविराज र रुपनीका एकदर्जन औषधि पसल बन्द
राजविराज, २८ असार । औषधि व्यवस्था विभाग, विराटनगर कार्यालयले सप्तरीको राजविराज र रुपनीमा रहेका औषधि पसलमा मङ्गलबार अनुगमन गरेको छ । सो अनुगमनका क्रममा अधिकांश औषधि व्यवसायीले बिनादर्ता औषधि व्यवसाय…
काठमाडौँ, २७ असार । होटलमा आफ्ना ग्राहकलाई डलर सटहीमा समस्या व्यहोर्दै आएका होटल व्यवसायीलाई राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीतिले राहत प्रदान गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आइतबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक…
बागलुङ, २६ असार । यहाँको एक कृषि समूहले वार्षिक रु १५ लाख बराबरको तरकारी उत्पादन गर्दै आएको छ । गलकोट नगरपालिका–११ रिघाको मिलिजुली कृषि समूहले तरकारी खेतीमा व्यावसायिक सफलता पाएको…
श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनान्सले हकप्रद शेयर जारी गर्ने
काठमाडौँ, २६ असार । श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडको विशेष साधारण सभाले पूँजी वृद्धिको लागि चुक्ता पूँजीको ८३ प्रतिशतको अनुपातमा हकप्रद शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।…
जापानको फुकुओकामा सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर
फुकुओका (जापान), २६ असार । जापानको फुकुओकामा सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरले आफ्नो सेवा विस्तार गरेको छ । फुकुओका कार्यालयको उद्घाटन सिटी एक्सप्रेस ग्रुपका अध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठले गर्नु भएको छ ।…
कम्युनिटी डेभलपमेन्ट बैंक र एनआईबीएल क्यापिटल मार्केटबीच सम्झौता
काठमाडौँ, २३ असार । कम्युनिटी डेभलपमेन्ट बैंक र एनआईबीएल क्यापिटल मार्केटबीच हकप्रद शेयर निष्काशनका लागि सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनप्रसाद खनाल र एनआईबीएल क्यापिटल मार्केटका…
अठचालिस जिल्लामा दश हजार वाणिज्य फर्म दर्ता
काठमाडौँ, २२ असार । देशका ४८ जिल्लामा १० हजार वाणिज्य फर्म दर्ता भएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले काम गर्दै आएका ४८ जिल्लामा चालु आवको जेठ मसान्तसम्म १०…
नेपाल क्लियरिङ हाउसले विद्युतीय भुक्तानी शुल्क घटायो
काठमाडौँ, २१ असार । नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडले प्रदान गर्दै आएको अन्तरबैंक विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीबाट हुने कारोबारमा लगाउँदै आएको शुल्क २०७४ साउन १ गतेदेखि घटाउने भएको छ । क्लियरिङ हाउसले…
काठमाडौँ, २० असार । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)ले पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आइसागो प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ । निगमले उत्कृष्ट ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ (भूमि सेवा) बापत अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणपत्र प्राप्त…
दुनै (डोल्पा), १९ असार । यहाँको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकास्थित वडा नं २ रसीका बिमला कठायतका दम्पतीले प्रत्येक वर्ष यार्सागुम्बा सङ्कलनबाट रु तीन लाखसम्म कमाई गर्दै आएका छन् । श्रीमान् र आफू…
सिद्धार्थ बैंकले थप १० प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने
काठमाडौँ, १९ असार । सिद्धार्थ बैंकको विशेष साधारण सभाले शेयरधनीलाई ३० प्रतिशत हकप्रद शेयर र त्यसपछि कायम हुने चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशत अर्थात १० बराबर १ कित्ताको अनुपातमा हकप्रद शेयर…
धितोपत्र बोर्डले पोखरा फाइनान्सलाई एफपीओ जारी गर्न अनुमति दियो
काठमाडौँ, १८ असार । पोखरा फाइनान्स लिमिटेडलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले एफपीओ जारी गर्न २०७४/३/१५ गते अनुमति दिएको छ । धितोपत्र बोर्डले पोखरा फाइनान्सलाई प्रति कित्ता रु.२२०।– का दरले ९ लाख…
मेगा बैंकले ६५ प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने
काठमाडौँ, १६ असार । मेगा बैंक लिमिटेडले १० बराबर ६ दशमलब ५ को अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्काशनको लागि २०७४/३/१५ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको छ । बैंकले प्रति शेयर…
व्यवसायीको विरोधपछि धितोपत्र बजार प्रभावित
काठमाडौँ, १५ असार । धितोपत्र बजारमा कारोबार गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्ने सम्बन्धमा प्रस्ट व्यवस्था नभएको भन्दै नेपाल धितोपत्र दलाल व्यवसायी सङ्घले विरोध जनाएपछि आज सेयर कारोबार प्रभावित भयो ।…
ज्योति विकास बैंकले ३३ लाख ७७ हजार ५ सय कित्ता शेयर बोलकबोलद्वारा बिक्री गर्ने
काठमाडौँ, १५ असार । ज्योति विकास बैंकले हकप्रद शेयरको लागि बिक्री खुल्ला गरी आवेदन माग गरेकोमा संस्थापकतर्फ २८ लाख १२ हजार ३ सय ३६ दशमलब ६० कित्ता र सर्वसाधारणतर्फ ५…
रैराङ हाइड्रोपावरमा ४ गुण बढी शेयर आवेदन
काठमाडौँ, १५ असार । रैराङ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो जारी पूँजी ५६ करोड रुपैयाँको १० प्रतिशत अर्थात ५ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको ५ लाख ६० हजार कित्ता साधारण…
लक्ष्मी बैंकको ३८ प्रतिशत बोनस शेयर प्रस्ताव पारित
काठमाडौँ, १५ असार । लक्ष्मी बैंकको १६ औँ वार्षिक साधारण सभाले शेयरधनीलाई ३८ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्न राखेको प्रस्ताव पारित गरेको छ । साधारण सभाले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को…
नुवाकोट, १४ असार । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको ब्लकमा ट्राउट माछा कार्यक्रम छनोट भएर अनुदान सहयोग उपलब्ध गराएपछि यहाँका किसान यो पेसाप्रति आकर्षित भएका छन् । जापानी रेन्बो ट्राउट माछापालनमा…
काठमाडौँ, १३ असार । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दिइएको निवेदनको आधारमा निकट भविष्यमा विभिन्न १३ वटा जलविद्युत् कम्पनीका साधारण सेयरमा लगानीको अवसर आउने भएको छ । विभिन्न क्षेत्रका १९ कम्पनीले साधारण…
काठमाडौँ, १३ असार । पर्यटकलाई थप सुविधा दिनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले पर्यटकीय महत्व बोकेका सम्पदामा निःशुल्क इन्टरनेट राख्ने भएको छ । कामनपाका सहप्रवक्ता नवराज ढकालका अनुसार पर्यटकीय महत्व भएका सम्पदामा…
काठमाडौँ, १३ असार । मूल्य घटाएर इन्डक्सन चुलो बेचेपछि बिक्री बढेको छ । भारत सरकारले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीका बेला चीन सरकारले अनुदान स्वरुप दिएको इन्डक्सन चुलोको मूल्य बढी हुँदा बिक्री…
काठमाडौँ, ११ असार । धितोपत्र बजारमा आज सेयरको मूल्य सामान्य अङ्कले सुधार भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज नेप्से परिसूचक ८.२३ बिन्दुले बढेर एक हजार ५६७ बिन्दुमा पुग्यो…
जुम्ला, ११ असार । जुम्ला । मौसममा आधारित स्याउखेतीको बिमा गरेका जुम्लाका कृषक क्षतिपूर्ति पाएपछि दङ्ग छन् । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी र सक्षम कार्यक्रमद्वारा यहाँ आयोजित दाबी भुक्तानी कार्यक्रममा पीडित…
काठमाडौँ, ९ असार । चन्द्रागिरि केवलकार सञ्चालन गरिएको एघार महिनामै पर्यटकका लागि नयाँ आकर्षक गन्तव्य बनेको छ । छोटो समयमा नै पर्यटकीय गन्तव्य बन्न सकेको चन्द्रागिरिबाट काठमाडौँ उपत्यकाको सुन्दर दृश्यावलोकन…
भार्गव विकास बैंक र एनएमबी क्यापिटलबीच सम्झौता
काठमाडौँ, ९ असार । नेपालगञ्जमा प्रधान कार्यालय रहेको भार्गव विकास बैंक र एनएमबी क्यापिटल लिमिटेडबीच हकप्रद शेयर निष्काशन सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पुष्करराज जोशी…
सूर्यविनायक जगाती सडक अतिक्रमण हटाइँदै
भक्तपुर, ९ असार । वर्षौंदेखि व्यापारीले कब्जा गर्दा रोकिएको भक्तपुरको सूर्यविनायकचोकदेखि जगातीको चकुखोलासम्मको सडक अतिक्रमण हटाएर सडक फराकिलो गर्ने कार्य सुरु भएको छ । डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरले हरेक वर्ष…
काडमाडौँ, ८ असार । धितोपत्र बजारमा आज सेयरको मूल्य सामान्य बिन्दुले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्चेन्जका अनुसार नेप्से परिसूचक ४.८ बिन्दुले बढेर एक हजार ५५९ बिन्दुमा पुगेको छ ।…
बेँसीसहर(लमजुङ), ८ असार । निर्माण सुरु हुनलागेको सुपर न्यादी जलविद्युत् आयोजनामा सर्वसाधारणका लागि लगानी खुला गरिएको छ । भुलभुले र बाहुनडाँडामा रहेको ङादी खोलामा निर्माण गर्न लागिएको ४०.२७ मेगावाटको सो…
सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकले ८,५७,४३७ कित्ता शेयर बिक्री गर्ने
काठमाडौँ, ७ असार । सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकले हकप्रद शेयरका लागि बिक्री खुल्ला गरेकोमा संस्थापक समूहतर्फ ४,०५,८८८.४५ कित्ता र सर्वसाधारण समूह तर्फ ४,५१,५४८.५६ कित्ता हकप्रद शेयरको लागि आवेदन नपरेकोले लिलाम बढाबढ…
नेपाल राष्ट्र बैंकले दियो तीन कम्पनीलाई पेमेन्ट गेटवे लाइसेन्स
काठमाडौँ, ७ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइएमई पे, प्रभु टेक्नोलोजी र ईसेवालाई मोबाइल फोनबाट कारोबार गर्न भिल्ने गरी पेमेन्ट गेटवे लाइसेन्स दिएको छ । भुक्तानी तथा फछ्र्यौट विनियमावली २०७२…
हिमालयन पावर पार्टनरको शेयरमा ८ अर्ब २० करोड रुपैयाँको अवेदन
काठमाडौँ, ७ असार । हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेडको साधारण शेयरमा ८ अर्ब २० करोड ८३ लाख ७ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको छ । हिमालयन पावर पार्टनरले रु.१००।–…
नेपाल बंगलादेश बैंकको ९,८८,१२०.८० कित्ता हकप्रद शेयर लिलाम बढाबढ
काठमाडौँ, ६ असार । नेपाल बंगलादेश बैंकले हकप्रद शेयर बिक्री खुल्ला गरी आवेदन माग गरेकोमा संस्थापक शेयर १९,५११ कित्ता र सर्वसाधारण शेयर ९,६८,६०९.८० कित्ता गरी जम्मा ९,८८,१२०.८० कित्ता हकप्रद शेयरमा…
माउण्ट मकालु डेभलपमेन्ट बैंक र एनआईबीएल क्यापिटलबीच सम्झौता
काठमाडौँ, ६ असार । माउण्ट मकालु डेभलपमेन्ट बैंक र एनआईबीएल क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेडबीच हकप्रद शेयर निष्काशनका लागि सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा बैंकका प्रबन्ध संचालक कुमार खड्का र एनआईबीएल क्यापिटलका…
काठमाडौँ, ५ असार । नियमविपरीत सञ्चालित गुह्येश्वरीमा रहेको सिन्धु तातोपानी कोल्ड स्टोरलाई आज सिलबन्दी गरिएको छ । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको नियमित अनुगमनअन्तर्गत आज बिहान उक्त स्टोरबाट…
नेपाल बैंकको १,८९,६२९ कित्ता शेयर बिक्रीमा
काठमाडौँ, ५ असार । नेपाल बैंक लिमिटेडले हकप्रद शेयरका लागि आवेदन माग गरी बिक्री खुल्ला गरेकोमा आवेदन नपरेको १,८९,६२९ कित्ता हकप्रद शेयर लिलाम बढाबढ गरी बिक्री गर्ने भएको छ ।…
काठमाडौँ, ४ असार । केही दिन अघिदेखि घट्दो क्रममा रहेको सेयर बजार आज पनि दोहोरो अङ्कले ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्चेन्जका अनुसार आज शेयर बजार १३.६१ बिन्दुले घटेर…
भक्तपुर, ४ असार । यती कार्पेट कारखानामा पुनः आगलागी भएको छ । भक्तपुर नगरपालिका–२, इँट्टापाकेस्थित सो कारखानामा गए राति ११ बजे लागेको आगो आज बिहान ८ बजे नियन्त्रणमा आए पनि…
यती कार्पेट आगलागीमा रु एक अर्ब क्षति
भक्तपुर, ४ असार । भक्तपुर नगरपालिका–२ सल्लाघारीस्थित यती कार्पेट इन्डस्ट्रिजमा गए रातिदेखि लागेको भीषण आगलागीमा रु डेढ अर्बभन्दा बढीको सामग्री क्षति भएको छ । राति ११ः३० बजेदेखि सुरु भएको आगलागी…
पाँचथर, २ असार । पाँचथर र ताप्लेजुङ बासिन्दाका लागि निर्माणाधीन इवा खोला जलविद्युत् आयोजनाको सेयर खुला गरिएको छ ।नौ दशमलव नौ मेगावाटको सो आयोजनाबाट प्रभावितका लागि लागत पुँजीको १० प्रतिशत…
नेपाल ग्यासको बिक्री चितवन र नवलपरासीबाट पनि
चितवन, २ असार । उपत्यकामा राम्रो बजार पाएको नेपाल ग्यास उद्योग प्रालिले चितवन र नवलपरासीमा पनि बिक्री शुभारम्भ गरेको छ । उपभोक्ताको मागअनुसार चितवन र नवलपरासीमा एकसाथ बिक्री शुभारम्भ गरेको…
मुस्ताङ, १ असार । नेपाल र तिब्बतको सीमा क्षेत्र कोरला नाकामा बर्सेनि आयोजना हुने गरेको अन्तरदेशीय व्यापार मेला आजदेखि सुरु भएको छ । मेला प्रवेशका लागि यस वर्ष सीमा क्षेत्रका…
लमजुङ (बेसीसहर), १ असार । दोर्दी खोलाको किनारैमा जस्ताको छाना मात्र भएको सानो टहरा छ । टहराभित्र काठका मुढा लडिरहेका छन् । मुढालाई सुम्सुम्याउँदै कहिले यता कहिले उता पल्टाउने कृष्णबहादुर…
सिटिजन्स बैंकको ६ लाख १९ हजार ८ सय ३ कित्ता हकप्रद शेयर लिलाम बढाबढ
काठमाडौँ, ३१ जेठ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडले हकप्रद शेयर बिक्रीका लागि आवेदन माग गरेकोमा बिक्री नभई बाँकी रहेको संस्थापक शेयर १ लाख ९९ हजार ३ सय १३ कित्ता र…
एभरेष्ट बैंकले ३३ प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने
काठमाडौँ, ३१ जेठ । एभरेष्ट बैंकले ३३ प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने भएको छ । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी ४ अर्ब ६० करोड ६४ लाख २७ हजार रुपैयाँ रहेको छ…
उखुको अभावमा चिनी मिल बन्द
लहान, २९ जेठ । उखुको अभाव भएपछि सिरहाको चन्द्रअयोध्यापुरमा सञ्चालित हिमालय चिनी मिल बन्द भएको छ । आवश्यकताअनुसार उखु पाउन छाडेपछि जिल्लाको एकमात्र उक्त चिनी उद्योग बन्द भएको हो ।…
काठमाडौँ, २८ जेठ । उद्योग विभागले चार महिनामा अनलाइनको माध्यामबाट १४४ उद्योग दर्ता गरेको छ । माघ २ गतेदेखि अनलाइन प्रणाली सुरु गरेको विभागले चार महिनामा १४४ उद्योग दर्ता गरेको…
बेनी (म्याग्दी), २८ जेठ । तीन वर्षअघिसम्म आफूलाई आवश्यक पर्ने रु दुई/चार सयका लागि श्रीमान् वा माइतीको भर पर्नुपर्ने बेनी नगरपालिका–४ सिङ्गाकी सीता परियारलाई अहिले रु आठ–दश हजारका लागि कसैसँग…
टुरिजम् डेभलपमेन्ट बैंकको ७ लाख ४ हजार ७ सय ३८ कित्ता शेयर बिक्रीमा
काठमाडौँ, २८ जेठ । टुरिजम् डेभलपमेन्ट बैंकले ८४ लाख ९२ हजार ९ सय ७४ कित्ता शेयर २०७४ जेठ २२ गते बाँडफाँड गरेको छ । बैंकले २०७३ माघ ६ गतेसम्म कायम…
राप्तीभेरी विकास बैंकले ९.२५ प्रतिशतका दरले बोनस शेयर जारी गर्ने
बाँके, २८ जेठ । राप्तीभेरी विकास बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मुनाफा १ करोड ३२ लाख ९८ हजार ३ सय रुपैयाँ बराबरको हुने गरी चुक्ता पूँजीको ९.२५ प्रतिशतका दरले बोनस शेयर…
‘चितवन मिल्क’ पुनः सञ्चालन हुने
चितवन, २६ जेठ । घाटा भएपछि करिब दुई वर्षअघि बन्द भएको ‘चितवन मिल्क उद्योग’ आउँदो साउन १ गतेबाट पुनःसञ्चालनमा आउने भएको छ । भरतपुर महानगरपालिका– १ ठिमुरामा स्थापना गरिएको सो…
काठमाडौँ, २६ जेठ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल क्षेत्रीय कार्यालय बालाजुले नापतौल चेकजाँच नगरी सामान बिक्री गर्ने व्यापारीलाई कारबाहीको प्रक्रिया जारी राखेको छ । कार्यालयका प्रमुख शशीभूषणकुमार यादवले भन्नुभयो, “धेरै…
कृषि विकास बैंकको निःशुल्क आस्वा ११० शाखाबाट
काठमाडौँ, २६ जेठ । सेयर दरखास्त राख्नका लागि अति नै उपयोगी मानिएको आस्वा सेवा कृषि विकास बैंकले आफ्ना ग्राहक तथा निक्षेपकर्ताको हितलाई ध्यानमा राखी निःशुल्क रुपमा उपलव्ध गराउने भएको छ…
एनआईसी एसिया बैंकको हकप्रद शेयर लिलाम बढाबढ गरी बिक्री गर्ने
काठमाडौँ, २५ जेठ । एनआईसी एसिया बैंकले हकप्रद शेयरको लागि बिक्री खुल्ला गरी आवेदन माग गरेकोमा सर्वसाधारण तर्फको २ लाख ९८ हजार ५ सय ३६ कित्ता शेयर आवेदन नपरेकोले बोलकबोल…
भीमदत्तनगर, २५ जेठ । धान र गहुँखेतीमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेका इन्द्रबहादुर ऐरले पछिल्ला वर्षमा तरकारीखेतीलाई व्यावसायिक रुपमा अङ्गाल्नुभएको छ । कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका–१ का ऐर विगत चार वर्षदेखि १२…
र्दिया, २५ जेठ । बर्दियामा पछिल्लो पटक केराखेतीमा किसानको आकर्षण बढ्दै गएको छ । केराखेती युवाको रुचिको विषय बन्दै गएको छ । किसानले सहकारीमार्फत तथा व्यक्तिगत रुपमा केराखेती गर्दै आएका…
जनता बैंकमा निःशुल्क आस्बा
काठमाडौँ, २५ जेठ । जनता बैंक नेपाल लिमिटेडले निःशुल्क आस्बा सेवा शुरु गरेको छ । ४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको यस बैंकका ६७ वटा शाखा कार्यालय, ४…
रसुवा, २४ जेठ । चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीबाट विगतमा वितरित सेयरबाट फाइदा पुगेपछि मैलुङ जलविद्युत् आयोजनाको सेयर खरिदका लागि स्थानीय बासिन्दा उत्साहित भएका छन् । सेयरको महत्व र फाइदाको विषयमा जानकारी…
मेगा बैंकको शेयर बिक्री प्रबन्धकमा नबिल इन्भेष्टमेन्ट
काठमाडौँ, २४ जेठ । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेडलाई हकप्रद शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरेको छ । मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाह र…
भद्रपुर, २३ जेठ । बहुउपयोगी कागतीको व्यवसायिक खेतीले झापाका कृषक एवम् उपभोक्ता दुवैै लाभान्वित भएका छन् । जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा यसको व्यावसायिक खेती सुरु भएको छ । कागतीको नियमित सेवनले…
काठमाडौँ, २१ जेठ । मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार मानिने पर्यटन क्षेत्रबाट गत आर्थिक वर्ष करिब रु ४२ अर्ब आम्दानी भएको छ । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७३÷७४ अनुसार…
भार्गव विकास बैंकले ८५,२३१ कित्ता शेयर बिक्री गर्ने
काठमाडौँ, १९ जेठ । भार्गव विकास बैंकले हकप्रद शेयरको बिक्री खुल्ला गरी आवेदन माग गरेकोमा संस्थापक समूहतर्फ ३२,४६६ कित्ता र सर्वसाधारण समूहतर्फ ५२,७६५ कित्ता गरी जम्मा ८५,२३१ कित्ताको लागि आवेदन…
रामपुर (पाल्पा), १६ जेठ । कुनै समय घरआँगनका वरिपरि, करेसाबारीमा शौखका रुपमा लगाइने सूर्यमुखी फूलको व्यावसायिक रुपमा खेती गर्न थालिएको छ । मौरी चरनका लागि सूर्यमुखी फूल उपयोगी ठानिने र…
दूध बेचेर एक लाख आम्दानी
रामपुर (पाल्पा), १६ जेठ । मस्याम, डुम्रेकी सीता अस्लामी गाईपालन व्यवसाय थालेपछि पाल्पामै नमुना महिला व्यवसायीका रुपमा चिनिनुहुन्छ । विगत आठ वर्षदेखि व्यवसाय थाल्नुभएका उहाँले गाईपालनबाट मासिक रु एक लाखभन्दा…
पथरी (मोरङ), १६ जेठ । धनपालथापन गाँउपालिका– ६ दादरवेरीयाका दयाराम श्रेष्ठले वार्षिक रु दुई करोडको माछा बिक्री गर्दै आउनुभएको छ । करिब रु ६ करोडको लगानीमा तीन वर्ष अगाडि १७…
प्रोग्रेसिभ फाइनान्सको १ बराबर २.८१ कित्ता हकप्रद शेयर प्रस्ताव पारित
काठमाडौँ, ९ जेठ । प्रोग्रेसिभ फाइनान्स लिमिटेडको विशेष साधारण सभाले हकप्रद शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । उक्त सभाले फाइनान्सको चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्न १ बराबर २.८१ (१००…
स्वावलम्बन लघुवित्त र बुम रेमिटबीच सम्झौता
काठमाडौँ, ९ जेठ । स्वावलम्बन लघुवित्त विकास बैंक र बुम रेमिट्यान्सबीच रेमिट्यान्स सेवा संचालन सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा स्वावलम्बन लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नरेशमान प्रधान र बुम रेमिट्यान्सका…
प्राइम र एसियनबीच बैंकासुरेन्स सम्झौता
काठमाडौँ, ८ जेठ । प्राइम कमर्सियल बैंक र एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडबीच बैंकासुरेन्स सम्बन्धी सम्झौता भएको हो । सम्झौतापत्रमा प्राइम कमर्सियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणदास मानन्धर र एसियन…
वालिङ, ७ जेठ । स्याङ्जाको वालिङ– ११ छतिवनका खोमराज पौडेलले दूध बेचेर मासिक रु एकलाख भन्दा बढी आम्दानी गर्नुभएको छ । चारवर्ष विदेशी भूमिमा पसिना बगाउनुभएका पौडेलले आफ्नै ठाउँमा केही…
काठमाडौँ, ६ जेठ । प्रोग्रेसिभ फाइनान्स लिमिटेडको हालै सम्पन्न विशेष साधारण सभाले हकप्रद शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । उक्त सभाले फाइनान्सको चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्न १ बराबर…
सनराइज बैंकले १० कित्ता बराबर नयाँ ३ कित्ता हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने
काठमाडौँ, ३ जेठ । सनराइज बैंक लिमिटेडले १० कित्ता बराबर ३ कित्ताको अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । बैंकले रु.१००।– अंकित दरको १ करोड ६३ लाख ५९ हजार…
सेन्चुरी कमर्सियल बैंकको ४० प्रतिशत हकप्रद शेयर
काठमाडौँ, १ जेठ । सेन्चुरी कमर्सियल बैंकले ४० प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमिटेडलाई बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ । सो सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा बैंकका निमित्त प्रमुख…
बैंक अफ काठमाण्डूको एफपिओ मूल्य ३ सय १० रुपैयाँ निर्धारण
काठमाडौँ, १ जेठ । बैंक अफ काठमाण्डूले संस्थापक शेयरधनीहरूको लागि जारी गर्न लागेको एफपिओ (फर्दर पब्लिक अफरिङ) को दर एकसय रुपैयाँ अंकित मूल्य तथा दुईसय दश रुपैयाँ प्रिमियमसहित तीनसय दश…
काबेली विकास बैंकले २० प्रतिशत बोनस शेयर दिने
काठमाडौँ, १ जेठ । काबेली विकास बैंकको नवौँ वार्षिक साधारण सभाले शेयरधनीलाई आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मुनाफाबाट २० प्रतिशत बोनस शेयर दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ । बैंकको हाल चुक्ता…
एउटै याममा दुई लाख आम्दानी
रामपुर (पाल्पा), २९ वैशाख । रामपुर नगरपालिका–६ विजयपुरकी अगुवा कृषक निर्मला पोखरेल गोलभेँडा बिक्रीबाट एउटै याममा रु दुई लाख बराबरको आम्दानी गर्नुभएको छ । एक रोपनी जग्गामा लगाएको गोलभेँडाबाट उहाँले…
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको एफपिओ बाँडफाँड
काठमाडौँ, २८ वैशाख । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले थप निष्काशन (एफपिओ) शेयर बाँडफाँड गरेको छ । शेयर बाँडफाँड १ सय ४० कित्तासम्म आवेदन दिनेलाई गोलाप्रथाबाट बाँडफाँड गरिएको जनाइएको छ । गोला…
बैंक अफ काठमाण्डूले निःशुल्क आस्बा सेवा दिने
काठमाडौँ, २७ वैशाख । बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडले आस्बा सेवा निःशुल्क दिने भएको छ । बैंकले यसअघि आस्बा शुल्क बापत रु.१००।– लिँदै आएको थियो । बैंकले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट आस्बा…
एनएमबी बैंकको एफपिओ निष्काशन नागरिक लगानी कोषले गर्ने
काठमाडौँ, २७ वैशाख । एनएमबी बैंकले १ करोड १४ लाख १५ हजार १ सय ६३ कित्ता थप नयाँ साधारण शेयर (एफपिओ) निष्काशन गर्न नागरिक लगानी कोषलाई बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरेको…
राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले ११४.२२ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने
काठमाडौँ, २४ वैशाख । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडले तीन आर्थिक वर्षको साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०६०/६१, २६१/६२ र २०६२/६३ सम्मको ११४.२२ प्रतिशत बोनस…
कन्काई विकास बैंकले हकप्रद शेयर जारी गर्ने
काठमाडौँ, २३ वैशाख । कन्काई विकास बैंकले १ बराबर २ दशमलब १४ ले ३२ लाख १० हजार कित्ता हकप्रद शेयर जारी गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डमा २०७४ वैशाख १० गते स्वीकृतिको…
नेको इन्सुरेन्सको ९२,८९३.३२ कित्ता हकप्रद शेयर लिलाम बढाबढ
काठमाडौँ, २१ वैशाख । नेको इन्सुरेन्स लिमिटेडले हकप्रद शेयर निष्काशन बिक्री खुल्ला गरी आवेदन माग गरेको संस्थापक समूहतर्फ ६,१६३.७९ कित्ता र सर्वसाधारण समूहतर्फ ८६,७२९.५३ कित्ता गरी जम्मा ९२,८९३.३२ कित्ता शेयरको…
मिसन डेभलपमेन्ट बैंकले ४,१९,७३० कित्ता हकप्रद शेयर बिक्री गर्ने
काठमाडौँ, २० वैशाख । मिसन डेभलपमेन्ट बैंकले हकप्रद शेयरको बिक्री खुल्ला गरी आवेदन माग गरेकोमा संस्थापक तर्फको ३,२४,५५६ कित्ता र सर्वसाधारण तर्फको ९५,१७४ कित्ता समेत ४,१९,७३० कित्ता हकप्रद शेयर बाँकी…
सिभिल बैंकको हकप्रद शेयरको निष्काशन प्रबन्धकमा लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट
काठमाडौँ, २० वैशाख । सिभिल बैंक लिमिटेडले आफ्नो ३० प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेडलाई निष्काशन प्रबन्धक नियुक्त गरेको छ । बैंकले आगामी जेठ ४ गते बोलाएको…
काठमाडौँ, १९ वैशाख । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई धितोपत्र बजारले ‘हरियो झन्डा’ देखाएर स्वागत गरेको छ । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी मनोनयनका लागि तोकेको दिन आज धितोपत्र बजारमा करिब रु ९३ करोडको…
सनराइज बैंकले १० बराबर ३ को अनुपातमा हकप्रद शेयर जारी गर्ने
काठमाडौँ, १८ वैशाख । सनराइज बैंकलाई १० बराबर ३ को अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति दिएको छ । बैंकले १ करोड ६३ लाख ५९ हजार कित्ता…
सुन आयात गर्न पाउनुपर्ने व्यवसायीको माग
काठमाडौँ, १५ वैशाख । नेपाल रत्न तथा आभूषण सङ्घले वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक युगमा वाणिज्य बैंकहरुले मात्र सुन आयात गर्न पाउने व्यवस्थाले आफूहरुलाई मर्का परेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमामध्ये ५०…
लक्ष्मी क्यापिटल मार्केटले नेपालगञ्ज र बनेपामा शाखा विस्तार
काठमाडौँ, १४ वैशाख । लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेडले बाँकेको नेपालगञ्ज र काभ्रेपलान्चोकको बनेपामा शाखा विस्तार गरेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्देशनपछि ब्रोकर कम्पनीहरूले उपत्यका बाहिर विभिन्न स्थानबाट आफ्नो शाखा…
इलाम, १४ वैशाख । चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तभित्रमा ६२ हजार पर्यटक जिल्ला भित्रिएका छन् । इलामको कोल्बुङस्थित पर्यटन सूचना केन्द्र जोरकलशका अनुसार २०७३/७४ मा गत आवको भन्दा चार गुणा…
काठमाडौँ, १३ वैशाख । राज्यले बहुमूल्य रत्न, पत्थर निकासी बन्द गर्दा वार्षिक रु ५० करोड घाटा हुने गरेको छ । नेपाल हस्तकला महासङ्घले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘नेपाली रत्न, पत्थरको…
नेपाल बंगलादेश बैंकको तेस्रो त्रैमासिकमा ८२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा
काठमाडौँ, १३ वैशाख । नेपाल बंगलादेश बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को तेस्रो त्रैमासिकमा ३८ अर्ब ५३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन र ३७ अर्ब २४ करोड ८९ लाख…
छ्याङ्दी हाइड्रोपावरले ५ लाख ४० हजार कित्ता साधारण शेयर निष्काशन गर्ने
काठमाडौँ, १३ वैशाख । छ्याङ्दी हाइड्रोपावर लिमिटेडलाई ५ लाख ४० हजार कित्ता साधारण शेयर निष्काशन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति दिएको छ । धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई…
गुहेश्वरी मर्चेन्टले ४० प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने
काठमाडौँ, १३ वैशाख । गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स लिमिटेडले ४० प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । फाइनान्सको हाल चुक्ता पूँजी ४९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ छ ।…
पोखरा, १२ वैशाख । हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङमा व्यावसायिक स्याउखेतीतर्फ कृषकको आकर्षण बढ्दै गएको छ । उच्च हिमाली भूभाग भएको जिल्लामा अन्य खेती नहुने भएकाले लेकाली तथा हिउँदे फलफूलखेतीलाई प्राथमिकता दिन…
नेपाल टेलिकमद्वारा आफ्ना सेवाहरूको प्रगति विवरण प्रस्तुत
काठमाडौँ, १२ वैशाख । नेपाल टेलिकमले आज एक पत्रकार सम्मेलन गरी आफूले प्रदान गर्दै आइरहेका सेवाहरूको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेको छ । अब एउटै काउन्टरबाट एउटै सिष्टम प्रयोग गरी सिडिएमए,…
कैलाश विकास बैंकको ७३,५५४ कित्ता हकप्रद शेयर बिक्रीमा
काठमाडौँ, १२ वैशाख । कैलाश विकास बैंकले हकप्रद शेयरको बिक्री खुल्ला गरेकोमा संस्थापक शेयर १०,९८१ कित्ता र सर्वसाधारण शेयर ६२,५७३ कित्ता गरी जम्मा ७३,५५४ कित्ता लिलाम बिक्री गर्ने भएको छ…
नेपालमा पहिलो पटक ‘बैंकिङ एक्स्पो’ आयोजना हुँदै
काठमाडौँ, १२ वैशाख । काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा पहिलो पटक बैंकिङ एक्स्पो हुने भएको छ । आगामी वैशाख १५, १६ र १७ गते हुने एक्स्पोमा बैंक तथा वित्तीय सेवासम्बन्धी जानकारी गराइने छ…
देवः विकास बैंकले शिलबन्दी बोलपत्रद्वारा ६,१७,६१५.३९ कित्ता हकप्रद शेयर बिक्री गर्ने
काठमाडौँ, १२ वैशाख । देवः विकास बैंकले हकप्रद शेयर बिक्री खुल्ला गरी आवेदन मात्र गरेकोमा संस्थापक शेयरतर्फ ३,८३,२९७.३८ कित्ता र सर्वसाधारण शेयरतर्फ २,३४,३१८.०१ कित्तासमेत जम्मा ६,१७,६१५.३९ कित्ता शेयरका लागि आवेदन…
मञ्जुश्री फाइनान्सको हकप्रद शेयर पुनः बिक्री
काठमाडौँ, ११ वैशाख । मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेडले हकप्रद शेयर निष्काशनको बिक्री खुल्ला गरी आवेदन माग गरेकोमा संस्थापकतर्फको शेयर पूर्ण रूपमा आवेदन नगरी बाँकी रहेको ५ लाख ३८ हजार ७ सय…
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको एफपिओ चाँडै बाँडफाँड गर्न सेबोनको निर्देशन
काठमाडौँ, १० वैशाख । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेडलाई चाँडै एफपिओ बाँडफाँड गर्न निर्देशन दिएको छ । सेबोनले हालको बजारमा तरलता अवस्थालाई दृष्टिगत गरी शेयर…
जनता बैंकको संस्थापक समूहको बिक्री नभएको २१,७२६ कित्ता शेयर पुनः बिक्रीमा
काठमाडौँ, ७ वैशाख । जनता बैंक नेपाल लिमिटेडको संस्थापक समूहको बिक्री हुन बाँकी ३,९६,५२६ कित्ता शेयर बोलकबोलद्वारा निष्काशन गरिएकोमा बिक्री नभई बाँकी रहेको २१,७२६ कित्ता संस्थापक शेयर पुनः लिलाम बढाबढ…
राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले बोनस शेयर दिने
काठमाडौँ, ६ वैशाख । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०६०/६१, २०६१/६२ र २०६२/६३ को खुद मुनाफाबाट आफ्ना शेयरधनीलाई क्रमशः ३७, ५१ र २७ प्रतिशतका दरले बोनस शेयर दिने भएको…
सहयोगी विकास बैंकले ३५ प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न स्वीकृति पायो
काठमाडौँ, ६ वैशाख । सहयोगी विकास बैंकलाई १० बराबर ३ दशमलब ५ को अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति दिएको छ । बैंकलाई रु.१००।– अंकित दरको ११…
ज्योति विकास बैंकले १ बराबर १ को अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने
काठमाडौँ, ६ वैशाख । ज्योति विकास बैंकले १ बराबर १ को अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति दिएको छ । बैंकलाई १ करोड १० लाख ४३ हजार…
धितोपत्र बोर्डले १० करोड इकाईको लक्ष्मी इक्विटी फण्ड निष्काशन गर्न स्वीकृति दियो
काठमाडौँ, ५ वैशाख । नेपाल धितोपत्र बोर्डले १० करोड इकाईको १ अर्ब रुपैयाँ बराबर लक्ष्मी इक्विटी फण्ड निष्काशन गर्न स्वीकृति दिएको छ । फण्ड मेनेजर लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेड रहेको…
पोखरा, ३ वैशाख । हिमाल पारीको जिल्ला मुस्ताङमा अवस्थित प्रसिद्ध मुक्तिनाथ मन्दिरमा जाने आन्तरिक तथा भारतीय पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ । नेपालका चारधाममध्ये एक मुक्तिनाथको दर्शनपछि मनोकामना पूरा हुने…
एनआईसी एसिया क्यापिटलको सिइओमा रामचन्द्र खनाल
काठमाडौँ, २ वैशाख । एनआईसी एसिया क्यापिटल लिमिटेडले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा रामचन्द्र खनाललाई नियुक्त गरेको छ । यसअघि खनाल एनआईसी एसिया बैंकमा वरिष्ठ प्रबन्धक पदमा कार्यरत रहँदै आउनु भएको थियो…
सिभिल बैंकले ३० प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने
काठमाडौँ, ३१ चैत । सिभिल बैंकले ३० प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने भएको छ । बैंक संचालक समितिको मिति २०७३ फागुन २० गते बसेको बैठकले २० प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्काशन…
स्वदेशी लघुवित्तको प्राथमिक शेयर निष्काशन झण्डै ३ अर्ब रुपैयाँको आवेदन
काठमाडौँ, ३१ चैत । स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले रु.१००।– अंकित मूल्यको २ लाख ७३ हजार कित्ता बराबर २ करोड ७३ लाख रुपैयाँको प्राथमिक शेयर निष्काशनको आवेदन खुल्ला गरेकोमा यही…
तेह्रौँ अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला वैशाखमा
काठमाडौँ, ३० चैत । तेह्रौँ अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला वैशाख ७ देखि ११ गतेसम्म काठमाडौँस्थित भृकुटीमण्डपको प्रदर्शनी हलमा हुने भएको छ । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घको आयोजनामा ‘तेह्रौँ…
पोखरा, ३० चैत । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका नौवटा तालमध्येको ठूलो फेवाको किनारास्थित कोमागाने पार्कमा नववर्ष महोत्सव सुरु भएको छ । प्राकृतिक एवम् मानवीय अतिक्रमणको चपेटामा परेको फेवातालसहित मुलुकको मौलिक संस्कृति…
ढोडेनी (बागलुङ), ३० चैत । बागलुङ नगरपालिका–२ ढोडेनीका अगुवा कृषक त्रिलोचन सापकोटाले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर तरकारी खेती गर्नुभएको छ । तरकारीलगायत बालीलाई रोग किराबाट जोगाउन, गुणस्तरीय तरकारी उत्पादन वृद्धि…
प्रोग्रेसिभ फाइनान्स र बुम रेमिटबीच सम्झौता
काठमाडौँ, ३० चैत । प्रोग्रेसिभ फाइनान्स लिमिटेड र बुम रेमिट्यान्स प्रा.लि. बीच रेमिट्यान्स भुक्तानी सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा प्रोग्रेसिभ फाइनान्सका वरिष्ठ प्रबन्धक उमा लामिछाने र बुम रेमिट्यान्सका प्रबन्ध…
सिटी एक्सप्रेस र स्मल वर्ल्ड बीच सम्झौता
काठमाडौँ, ३० चैत । सिटी एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफर र स्मल वर्ल्ड मनि ट्रान्सफर (एलसिसी ट्रान्स सेन्डिङ) बीच विप्रेषण रकम भुक्तानी सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौतापछि युरोप र अमेरिकाबाट नेपालीले…
स्टिल उद्योगमा आगलागी हुँदा करोडौँको धनमाल नष्ट
पर्सा, ३० चैत । वीरगन्जको आदर्शनगरस्थित स्टिल उद्योगमा आगलागी हुँदा करोडौँको क्षति पुगेको छ । वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाको वडा नं १० आदर्शनगरस्थित शिवम् स्टिल उद्योग प्रालिमा हिजो अपराह्न आगलागी हुँदा करोडौँको…
नयाँ वर्ष २०७४ को अवसरमा नेपाल टेलिकमद्वारा विभिन्न सेवाहरुमा सहुलियत अफर
काठमाडौँ, २९ चैत । नेपाल टेलिकमले नव वर्ष २०७४ को अवसरमा आफ्ना उपभोक्ताहरुलाई विभिन्न किसिमका सेवाहरुमा सहुलियत प्रदान गर्ने भएको छ । कम्पनीको नववर्ष प्रोमोसनल अफर अन्तर्गत रिचार्ज बोनस, डाटा…
दोलखा, २९ चैत । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालनसँगै किसान किबीखेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । किबीले बजार पाउन थालेपछि किसानको उत्साह बढेको हो । कृषि विकास कार्यालयले जिरी नगरपालिका, श्यामा…
पुरानो बोइङ बिक्री गर्दै निगम
काठमाडौँ, २९ चैत । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)ले पुरानो बोइङ बी सेभेन फाइभ सेभेन–दु हन्ड्रेड नाइन एन–एसिए जहाज बिक्री गर्नका लागि ‘ग्लोबल टेन्डर’ आह्वान गरेको छ…
काठमाडौँ, २९ चैत । नेपालमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउनका लागि ट्राभल्स नेपाल बस सर्भिस प्रालिले चर्पी र रेस्टुराँसहितको सुविधा सम्पन्न बस सञ्चालनमा ल्याएको छ । ‘उमङ्ग र अनुभूति’ भन्ने…
आस्वाको सेवा शुल्क बढीमा एकसय रुपैयाँ
काठमाडौँ, २९ चैत । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र (सार्वजनिक निष्काशन) सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ लाई संशोधन गरेको छ । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ११८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी…
धितोपत्र बोर्डद्वारा १० बराबर ३.५ को अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न तिनाउ विकास बैंकलाई अनुमति
काठमाडौँ, २९ चैत । नेपाल धितोपत्र बोर्डले तिनाउ विकास बैंकलाई १० बराबर ३ दशमलब ५ को अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न स्वीकृति दिएको छ । बोर्डले ११ लाख ९४ हजार…
सिद्धार्थ बैंक र लक्ष्मी क्यापिटलबीच हकप्रद शेयर निष्काशन सम्झौता
काठमाडौँ, २८ चैत । सिद्धार्थ बैंक र लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेडबीच हकप्रद शेयर निष्काशनका लागि सम्झौता भएको छ । बैंकले दश कित्ता शेयर बराबर तीनको अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न…
डडेल्धुरा, २८ चैत । डडेल्धुरा जिल्लामा मौरीपालन किसानले मनग्गे आम्दानी गर्न थालेका छन् । दुई वर्षको अवधिमा सात हजारको सङ्ख्यामा घार बिक्री गरिसकेको र खाली घारको दुई हजार ८०० देखि…
आइसिएफसि फाइनान्सको नयाँ शाखा स्याङ्जाको गल्याङ्गमा
काठमाडौँ, २८ चैत । आइसिएफसि फाइनान्स लिमिटेडले स्याङ्जाको गल्याङ्गमा बाह्रौँ शाखा संचालनमा ल्याएको छ । शाखाको उद्घाटन आइसिएफसि फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामबाबु पन्तले गर्नु भएको छ । आइसिएफसि फाइनान्सले…
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले ल्यायो ‘स्मार्ट जीवन बीमा’
काठमाडौँ, २८ चैत । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले दैनिक १० रुपैयाँमा १० लाख रुपैयाँसम्मको बीमा ‘स्मार्ट जीवन बीमा’ योजना ल्याएको छ । बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले नयाँ बीमा…
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको क्षेत्रीय कार्यालय पोखरामा
काठमाडौँ, २७ चैत । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले पोखारमा क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गरेको छ । बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले सो क्षेत्रीय कार्यालयको उद्घाटन गर्नु भएको छ । नेपाल…
निगमले दुई वाइडबडी विमान खरिद गर्ने
काठमाडौँ, २६ चैत । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले दुईवटा वाइडबडी ए ३३०–२०० विमान खरिद गर्ने भएको छ । उक्त विमान खरिदका लागि निगम र अमेरिकन कम्पनी एएआरबीच हिजो खरिद…
पोखरा, २५ चैत । कास्कीमा साढे तीन महिनाको अवधिमा ११ हजार ४४९ जनाले स्वास्थ्य बिमा दर्ता गराएका छन् । गत पुस १२ गतेदेखि सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समिति, कास्कीले बिमा…
चितवन, २५ चैत । नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा यात्रा गर्न जोखिम र असहज भएपछि हवाईमार्ग भएर जिल्ला भित्रिने पर्यटकलाई यहाँका होटल सञ्चालकले २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेका छन् । जिल्लामा भित्रिने पर्यटक…
काठमाडौँ, २५ चैत । मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्डको निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न नहुँदा सडक यातायात भरपर्दो र सुरक्षित नभएकाले दोस्रो पर्यटकीय गन्तव्यस्थल चितवनप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नकारात्मक असर परेकामा पर्यटन व्यवसायीले चिन्ता व्यक्त…
रत्ननगर (चितवन), २४ चैत । चितवनमा केराखेती फस्टाउँदै गएको छ । गत वर्ष जिल्लामा दुईसय बिगाहामा केराखेती विस्तार भएको थियो । चितवन केरा उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष विष्णुहरि पन्तका अनुसार अघिल्लो…
नेपाल बैंक लिमिटेडकोे स्मार्ट कार्ड
काठमाडौँ, २२ चैत । नेपाल बैंक लिमिटेडले आफ्ना ग्राहकहरुलाई आधुनिक एवं स्तरीय सेवा प्रदान गर्ने क्रममा हालै एनबिएल स्मार्ट कार्ड (NBL Smart Card) सञ्चालनमा ल्याएको छ । नेपालको पहिलो बैंक…
नियमावली संशोधनको निर्माण व्यवसायीद्वारा विरोध
भक्तपुर, २२ चैत । निर्माण व्यवसायी सङ्घ भक्तपुरले सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा गरेको पाँचौँ संशोधन सच्याउन माग गर्दै आज प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । सङ्घका…
धनगढी, २२ चैत । इँटाको माग घटेर खपत हुन नसकेपछि यस क्षेमा मूल्यमा कमी आएको छ । यससँगै इँटा व्यवसायी मारमा परेका छन् । दुई वर्षअघि प्रतिहजारको रु १३ हजार…
रामपुर (पाल्पा), २२ चैत । रामपुर नगरपालिका–६ तालपोखराका नारायणप्रसाद भण्डारी तरकारीबाट यथेष्ट आम्दानी गर्नुहुन्छ । उहाँ अहिले तरकारी बेचेर मासिक रु एक लाख ५० हजार बराबरको आम्दानी लिन सफल हुनुभएको…
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा ७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर सूचीकृत
काठमाडौँ, २२ चैत । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा हिजो सोमबार माछापुच्छ्रे बैंकको ८० लाख १८ हजार ९ सय कित्ता बोनस शेयर तथा १ करोड ९३ लाख २२ हजार ७ सय कित्ता…
रु सत्र करोड बराबरको आलु उत्पादन
रामपुर (पाल्पा), २१ चैत । पाल्पामा यस आर्थिक वर्षमा रु १७ करोड बराबरको आलु उत्पादन भएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लामा सात सय ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा उत्पादित…
आइएमईबाट रकम पठाउँदा उपहार
काठमाडौँ, २१ चैत । नयाँ वर्ष २०७४ को अवसरमा जापानबाट क्योदाई–आइएमईमार्फत नेपालमा पैसा पठाउँदा सेवाग्राहीका लागि उपहार दिने भएको छ । यसरी पैसा पठाउँदा हरेक दिन २ जना सेवाग्राहीले जापानी…
हिमालयन पावरले साधारण शेयर निष्काशन गर्ने
काठमाडौँ, २० चैत । हिालयन पावर पार्टनर लिमिटेडले रु.१००।– अंकित दरको २१ लाख ३० हजार ८ सय ३४ कित्ता साधारण शेयर (आइपिओ) निष्काशन गर्ने भएको छ । धितोपत्र निष्काशन तथा…
हिमालयको नयाँ एयरबस
काठमाडौँ, १८ चैत । नेपाल–चीन संयुक्त लगानीमा सञ्चालित हिमालय एयरलाइन्सले सेवा विस्तारका क्रममा आजदेखि तेस्रो नयाँ विमान ‘ए’ ३२० थपेको छ । व्यावसायिक उडान थालेको पहिलो वर्षमा नै उक्त कम्पनीले…
तेह्रथुम, १८ फागुन । श्रम गरे आफ्नै गाउँठाउँमा बसेरै मनग्य कमाइ गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बन्नुभएको छ, हमरजुङ– ७ का ४७ वर्षीय अमरकृष्ण बस्नेत । छवर्ष मलेसिया बस्दा उहाँले निकै…
तेह्रथुम, १७ चैत । ओख्रेमा ताक्लुङ सहकारी संस्था स्थापना भएपछि स्थानीय कृषकलाई राहत मिलेको छ । संस्थाले स्थानीयस्तरमा उत्पादित कृषिजन्य थोक सामग्री खरिद गरेपछि कृषकलाई सहज भएको हो । सहकारी…
रत्ननगर (चितवन), १७ चैत । नवलपरासी रजहरका यज्ञप्रसाद सुवेदी ‘लक्ष्मण’ चितवनको खैरहनीस्थित चैनपुरमा केराको थम्बा काटेर घरी निकाल्दै छन् । घरी बोकेर गाडीसम्म लैजाने काममा व्यस्त छिन् उनकी श्रीमती जानकी…
रेमिट टु नेपालको विप्रेषण कारोबार शुरु
काठमाडौँ, १७ चैत । ललितपुरको पुल्चोकमा मुख्य कार्यालय रहेको रेमिट टु नेपाल प्राइभेट लिमिटेडले विप्रेषण कारोबार शुरु गरेको छ । कम्पनीले छिटो, छरितो, सहुलियत शुल्कमा सुरक्षित तवरले विप्रेषण सेवा दिने…
इनरुवा, १७ चैत । सुनसरीमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था सकारात्मक रहेको जिल्लाको खाद्य सुरक्षा अवस्था विश्लेषण प्रतिवेदनले देखाएको छ । यहाँ वार्षिक करिब ६ अर्बको खाद्य वस्तु उत्पादन भइरहेको जनाइएको छ…
पर्सा, १६ चैत । चालु आवको आठ महिनामा वीरगन्ज नाका भएर भारतबाट रु ३९ अर्ब ३६ करोड ७५ लाख १३ हजार बराबरको इन्धन नेपाल भित्रिएको छ । सिमावर्ती भारतीय सहर…
नेपाल टेलिकमले GSM/CDMA प्रिपेडका ग्राहकहरुलाई Balance नहुँदा Call गर्न Loan रकम उपलब्ध गराउने
काठमाडौँ, १६ चैत । नेपाल टेलिकमले GSM तथा CDMA प्रिपेड सेवाका सेवाग्राहीहरुलाई Balance नहँुदा Call गर्न Loan रकम उपलब्ध गराउने भएको छ । यस सम्बन्धमा नेपाल टेलिकम र हङ्गकङ्गस्थित Tiaxa…
नेपाल राष्ट्र बैंकले क्यासवे मनि ट्रान्सफरलाई सेवा संचालन गर्न अनुमति दियो ।
काठमाडौँ, १५ चैत । नेपाल राष्ट्र बैंकले क्यासवे मनि ट्रान्सफर प्रा.लि., बत्तीसपुतली, काठमाडौँलाई विप्रेषण सेवा सम्बन्धी कारोवार गर्न अनुमति दिएको छ । क्यासवे मनि ट्रान्सफरले विप्रेषण सेवालाई अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग…
सिभिल क्यापिटल मार्केट सुन्धारास्थित सिटिसी मलमा सर्ने
काठमाडौँ, १५ चैत । काठमाडौँको कमलादीमा रहेको सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमिटेड २०७३ चैत १५ गतेदेखि काठमाडौँको सुन्धारास्थित सिटिसी मलमा स्थानान्तरण भएको छ । सिभिल क्यापिटल मार्केटले यही चैत १५ गतेदेखि…
काठमाडौँ, १४ चैत । हरिसिद्धि इँटा तथा टायल कारखाना लिमिटेड सेयर सङ्घर्ष समितिका सदस्यले १३ वर्षदेखि रोकिएको कम्पनीको साधारण सभा गराउन माग गरेका छन् । आज रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मलेन…
पथरी (मोरङ), १४ चैत । क्रिस्टल कञ्चनजङ्घा सेक्युरिटिज प्रालि (ब्रोकर नम्बर ५०) ले विराटनगरमा शाखा विस्तार गरेको छ । प्रालिको शाखा विस्तारसँगै अब विराटनगरबाटै सेयरको खरिद बिक्री आइतबारदेखि औपचारिक रुपमा…
धुलिखेल, १४ चैत । पनौती–१२ खोपासीका कृष्णदास उलकले च्याउखेतीबाटै मासिकरुपमा लाखौँ आम्दानी गरिरहेका छन् । त्रिपन्न वर्षीय उलकले १२ वर्ष अगाडिदेखि व्यावसायिक रुपमा च्याउखेती गर्दै आएका हुन् । अहिले उनी…
तेह्रथुम, १४ चैत । थोक्लुङ–१ का किसान रामप्रसाद तिम्सिनाले गत वर्ष अदुवाले राम्रो मूल्य पाएको देखेपछि यसैको खेती गर्ने सोच बनाए । उनले प्रतिकेजी रु ५० दरले बीउ किनेर पाँच…
बुटवल पावर कम्पनीले प्रति कित्ता ४७० रुपैयाँमा एफपीओ निष्काशन
काठमाडौँ, १४ चैत । बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडले रु.१००।– अंकित मूल्यमा प्रिमियम बापत रु.३७०।– थप गरी प्रति शेयर रु.४७०।– को ४० लाख ८१ हजार थप साधारण शेयर निष्काशन (फर्दर पब्लिक…
तिलोत्तमा (रुपन्देही), १३ चैत । स्रोत संरक्षण कृषि प्रविधि र उन्नत बीउ प्रयोग गर्दा यस वर्ष जिल्लामा गहुँको बीउ र माछाको उत्पदानमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । उत्पादनमा आएको वृद्धिसँगै…
काठमाडौँ, १३ चैत । सेयर बजार दोहोरो अङ्कले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्चेन्जका अनुसार आज बजार ५३ दशमलव ४६ बिन्दुले बढेर एक हजार ५३९ बिन्दुमा पुगेको हो । लगातार…
बर्डफ्लु देखिएपछि कास्की र सुनसरीमा उच्च सतर्कता
चितवन, १३ चैत । कास्की र सुनसरीमा कुखुरामा बर्डफ्लु देखापरेपछि देशको कुल उत्पादनको आधाभन्दा बढी कुखुराजन्य उत्पादन हुने चितवनमा उच्च सतर्कना अपनाइएको छ । यसका कारण अहिलेसम्म जिल्लामा बर्डफ्लु भित्रिन…
पोखरा, १२ चैत । पुरातात्विक, धार्मिक एवम् पर्यटकीय महत्व बोकेको पोखराको छोरेपाटनस्थित गुप्तेश्वर महादेव गुफाभित्र निर्मित यान्त्रिक गाईले साढे नौ वर्षका अवधिमा रु ५० लाखभन्दा बढी आम्दानी गरेको छ ।…
नेपाल हाइड्रो डेभलोपरले ३ लाख ९० हजार साधारण शेयरको निष्काशन गर्न धितोपत्र बोर्डसँग अनुमती माग
काठमाडौँ, १२ चैत । नेपाल हाइड्रो डेभलोपर लिमिटेडले ३ लाख ९० हजार कित्ता साधारण शेयर (आइपिओ) निष्काशनको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको छ । कम्पनीले दोलखा जिल्लाको चर्नावती खोलामा…
डडेल्धुरा, १० चैत । उग्रतारा सार्वजनिक यातायात समितिले डडेल्धुरा— काठमाडौँ वातावरण अनुकुलित आधुनिक सेवासहितको ‘एयर सस्पेन्सन’ एसी बस सञ्चालनमा ल्याएको छ । नयाँ प्रविधिसहित आरामदायी यात्राका लागि उग्रतारा यातायातले बिहीबारदेखि…
वर्षाले करोडौँको काँचो इँटा क्षति
लहान, ९ चैत । हावाहुरीसँगै अचानक भएको वर्षाका कारण सिरहाको विभिन्न इँटा उद्योगमा तयारी अवस्थामा राखिएको करोडौँ मूल्य बराबरको काँचो इँटामा क्षति पुगेको छ । करिब ५० वटाभन्दा बढी इँटा…
त्रिशूली, ९ चैत । नुवाकोटमा यस वर्ष रु एक अर्ब १० करोडको आलु उत्पादन भएको छ । बर्खे र हिउँदे याममा गरी ७२ हजार ७०० मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको…
चितवन, ९ चैत । सिम्रिक एयरले आजदेखि काठमाडौँ– भरतपुर–काठमाडौँका लागि उडान सुरु गरेको छ । बिहान ९ः५५ मा काठमाडौँबाट भरतपुरका लागि उडेको सिम्रिकको नाइन एन एजिआई विमान बिहान १०ः२० मा…
बर्दिवास, ८ चैत । महोत्तरीको उत्तरी क्षेत्रका किसान व्यावसायिक रुपमा केराखेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । बर्दिबास नगरपालिकाका पूmलबारीटोल, पशुपतिनगर, भङ्गाहा गाउँपालिकाका बिर्तापलार, रामनगर, हतिसर्वा र सिङ्ग्याहीका कम जग्गामा मनग्य आम्दानी…
बङ्गुरपालनबाट वार्षिक दश लाख आम्दानी
बाबियाचौर (म्याग्दी), ७ चैत । मालिका गाउँपालिका–५ दरवाङका खिमबहादुर खत्रीले बङ्गुरपालनबाट वार्षिक रु दश लाख आम्दानी गर्दैआउनुभएको छ । कतारमा तीन वर्ष काम गरेर फर्किनुभएका खत्रीले रु ५० हजार लागतमा…
फलेवास (पर्वत), ७ चैत । मकै र कोदो छाडेर अदुवाखेती लगाएका उत्तरी पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका कृषक अदुवा बिक्री नहुँदा निराश भएका छन् । यहाँका कृषकलाई अदुवा बिक्री गर्न बजार अभाव…
पशुपालनमा करिब रु चार अर्ब लगानी
बाबियाचौर (म्याग्दी), ६ चैत । म्याग्दीका किसानले व्यावसायिक पशुपालनका लागि रु तीन अर्बभन्दा बढी लगानी गरेका छन् । किसानले व्यावसायिक रुपमा गाईभैँसी र भेडाबाख्रापालन गर्न रु तीन अर्ब ६८ करोड…
गाईघाट (उदयपुर), ६ चैत । पछिल्लो समयमा ऊर्जा आपूर्ति सहज भएसँगै नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले आफ्नो उत्पादनमा वृद्धि गरेको छ । उद्योग व्यवस्थापनका अनुसार उद्योगले हाल साढे…
बाख्रा स्रोतकेन्द्रको विकास
मलेखु (धादिङ), ५ चैत । बजारमा खसीबोकाको मासुको माग बढ्दै गएको अवस्थामा चैनपुरवासी बाख्रा स्रोत केन्द्रको विकासमा अघि बढेका छन् । दुई वर्षअघि दुई माउ र छ पाठा बाख्रापालन गर्नुपर्छ…
बेँसीसहर (लमजुङ), ४ चैत । पछिल्लो समय जिल्लाका पर्यटकीय गाउँलाई म्युजिक भिडियोमा समावेश गरिन थालिएको छ । गाउँको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि म्युजिक भिडियोमा समावेश गर्न थालिएको घलेगाउँ ग्रामीण पर्यटन विकास…
बागलुङ, ४ चैत । मुस्ताङमा पर्यटकीय चहलपहल सुरु भएको छ । पर्यटकीय याम सुरु भएसँगै मुस्ताङ छिर्ने पर्यटकको सङ्ख्या दैनिक बढ्दो छ । फागुन–जेठ दोस्रो मुख्य पर्यटकीय याम हो ।…
काभ्रे, ४ चैत । उग्रचण्डी नाला–५ स्थित नारी जागरण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको एउटा कोठामा महिला लप्सीको गुदी मोल्नमा व्यस्त देखिन्छन् । उक्त गुदीबाट महिलाले विगत केही समयदेखि क्यान्डी…
विराटनगर, ४ चैत । मोरङको टङ्कीसिनुवारीस्थित ‘म्याजिक चप्पल’ कारखानामा आज बिहान ४ बजे आगलागी भएको छ । विराटनगर उपमहानगरपालिकासँग जोडिएको टङ्कीसिनुवारीस्थित सो उद्योगमा आगलागी नियन्त्रणका लागि दमकल, स्थानीय प्रहरी र…
चेम्बरद्वारा खुसी व्यक्त
काठमाडौँ, ३ चैत । व्यवस्थापिका–संसद्बाट कम्पनी ऐनको संशोधन विधेयक पारित भएकोमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले खुसी व्यक्त गरेका छन् । निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि कम्पनी ऐनमा समयानकूलक परिवर्तन गर्नुपर्ने गर्दै…
बाबियाचौर (म्याग्दी), ३ चैत । मङ्गला गाउँपालीका–१ कुहुँका गोविन्द केसीले मौरीपालनबाट वार्षिक रु सात लाख आम्दानी गर्नुभएको छ । चार वर्ष साउदी अरब र सात वर्षसम्म इराकमा श्रम गरेका ३९…
छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलाको उद्घाटन
काठमाडौँ, ३ चैत । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल लगानीका लागि उर्वर क्षेत्र रहेको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले भृकुटीमण्डपमा आयोजित छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलाको आज उद्घाटन गर्दै मुलुकमा राजनीतिक…
घुम्ती गोठबाट करोडौँ आम्दानी
बेँसीसहर (लमजुङ), ३ चैत । भेडाको ऊन तथा मासुबाट रु १० करोड बढी आम्दानी भएको छ । जिल्ला पशुसेवा कार्यालयका पशु विकास अधिकृत खिला शर्मा घिमिरेका अनुसार उत्तरी भेगका २१…
माछापालनले धानखेती भन्दा तेब्बर आम्दानी
पथरी (मोरङ), ३ चैत । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनुभएका मोरङको हसन्दह–२ का चारजना युवा मिलेर माछापालन गरेर खाद्य बाली (धान)को तुलनामा तेब्बरभन्दा बढी आम्दानी लिन थालेका छन् । विसं २०७० मा…
बाउन्न अर्ब लगानीमा होङ्सी शिवम् सिमेन्ट
नवलपरासी, २ चैत । चिनियाँ र नेपाली लगानीकर्ताले रु ५२ अर्ब लगानीमा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेका छन् । बेणीमनीपुरमा निर्माण हुँदै गरेको होङ्सी शिवम् सिमेन्ट उद्योग स्थापनाका लागि…
फलेवास (पर्वत), २ चैत । गर्मीयाम सुरु भएसँगै कालीगण्डकी नदीमा जलयात्रा (रयाफ्टिङ) सुरु भएको छ । जलयात्राको याम सुरु भएसँंगै कालीण्डकीमा पर्यटक आउने क्रम बढेको छ । जाडो यामको समाप्तिसँगै…
चिज उत्पादनमा कमी
सोलुखुम्बु, १ चैत । यहाँ आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको पहिलो रोजाइ चौँरीगाईको दूधबाट उत्पादित चिज हो । निकै स्वादिलो स्थानीय चिज पर्यटकमात्र होइन यहाँका बासिन्दाले पनि खोजी खोजी किन्छन्…
दुनै (डोल्पा), १ चैत । भारी हिमपातका कारण पाँच दिनदेखि अवरुद्ध जुफाल विमानस्थल आजदेखि पुनः सञ्चालन भएको छ । उक्त विमानस्थल भारी हिमपातका कारण दुई फिटसम्म हिउँ जमेर अवरुद्ध भएको…
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको नवौँ वार्षिक साधारण सम्पन्न
काठमाडौँ, ३० फागुन । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको नवौँ वार्षिक साधारणसभा २०७३ फागुन ३० गते काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ । उक्त साधारणसभाले आर्थिक वर्ष २०७२।७३ को मुनाफा रकम मध्येबाट स्वीकृत…
सोलुखुम्बु, ३० फागुन । सगरमाथा क्षेत्रमा पर्यटकको आगमन बढ्न थालेको छ । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथालगायत अन्य हिमाली मनोरम दृश्यको अवलोकन गर्न आउने पर्यटकको आगमन दिन प्रतिदिन बढ्न थालेको हो…
रामपुर (पाल्पा), २९ फागुन । जिल्लामा पछिल्लो समय घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता हुने क्रम बढेको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा आव २०७३/७४ को हालसम्ममा सात प्रकारका उद्योग…
इटहरी, २७ फागुन । सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका–१२ खनारस्थित पाथीभरा पोल्ट्री फर्ममा पालिएको लेयर्स जातका कुखुरामा बर्डफ्लूको सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि त्यस फर्ममा रहेका पैतालीस सय कुखुरा आज नष्ट गरिएको छ ।…
काठमाडौँ, २७ फागुन । नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्यवृद्धि गरेको छ । निगम प्रवक्ता सीताराम पोखरेलका अनुसार ग्यासमा रु २५ मूल्यवृद्धि गरिएको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेसनले…
काठमाडौँ, २७ फागुन । नेपाल टेलिकमले होली पर्वका अवसरमा आफ्ना उपभोक्ताहरुलाई विभिन्न किसिमका सेवाहरुमा सहुलियतपूर्ण अफर उपलब्ध गराएको छ । कम्पनीको चाडपर्व अफर अन्तर्गत GSM/CDMA पोष्टपेड तथा प्रिपेडका सेवाग्राहीलाई निम्नानुसारको…
अनलाइनबाटै शेयर कारोबारको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन
काठमाडौँ, २७ फागुन । नेपाल धितोपत्र बोर्डले अनलाइनबाट शेयरको कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन धितोपत्र दलालहरूलाई निर्देशन दिएको छ । धितोपत्र बोर्डले दलाल कम्पनीबाट लगानीकर्ताको ग्राहक पहिचान (केवाइसी) का आधारमा…
रु पचास लाखको सिमी निकासी
बाबियाचौर ९म्याग्दी०, २६ फागुन । म्याग्दीको एउटै गाउँका कृषकले सिमी बिक्री गरेर रु ५० लाख गाउँमा भित्र्याएका छन् । म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने दोवा गाउँबाट रु ५० लाख बराबरको सिमी…
सल्यान, २६ फागुन । सल्यानमा चालु आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा झन्डै रु ३० करोडको बराबरको सुन्तला उत्पादन भएको छ । सुन्तला सुदृढीकरण अभियान बगैँचा व्यवस्थापन, सुन्तलाको बोट तथा क्षेत्रफल वृद्धि,…
काठमाडौँ, २६ फागुन । खानेपानी संस्थानले २० लिटरको खानेपानीको जार दुई हप्ताभित्र बजारमा ल्याउने भएको छ । काभ्रेपलाञ्चोकको पनौतीमा उत्पादन गरी प्रशोधन गरिएको पानीको जारको मूल्य रु ५२ कायम गरिएको…
खोप्लाङ (गोरखा), २५ फागुन । पुरुष कामदार सरह घरको गारो लगाउन पोख्त गोरखाको खोप्लाङ ४ की मनु तामाङलाई आजभोलि फुर्सद छैन । निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि अनुदान रकम लिएका गाउँलेहरुले…
अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका अवसरमा नेपाल टेलिकमको विभिन्न सहुलियत सेवाहरु
काठमाडौँ, २४ फागुन । नेपाल टेलिकमले अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका अवसरमा आफ्ना उपभोक्ताहरुलाई विभिन्न किसिमका सेवाहरुमा सहुलियत प्रदान गरेको छ । कम्पनीको प्रमोसनल अफर अन्तर्गत उपलब्ध गराइएको यो सहुलियत अफर २०७३…
काठमाडौँ, २४ फागुन । सनराइज बैंकले साविक मूल कम्पनी एनआइडिसी क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेडलाई प्राप्ति गरेपश्चात एन.सि.एम. मर्चेण्ट बैंकिङ लिमिटेडमा बैंकको तर्फबाट प्रतिनिधित्वका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्य, मुख्य प्रबन्धक/प्रमुख…
पोखरा, २३ फागुन । आजदेखि आठौँं हेम्जा आलु महोत्सव सुरु भएको छ । “सुन्दर ठाउँ हेम्जा जाउँ, आलुका स्वादिष्ट परिकार खाउँ ,आलु एक परिकार अनेक”भन्ने मूलनाराका साथ विष्णुपादुका क्लबको आयोजनामा…
घ्याल्चोक (गोरखा), २३ फागुन । गोरखाको घ्याल्चोक–५ ज्यामिरेघाटका किसान हरिप्रसाद रेग्मीले बारीमा बन्दा, काउली, फर्सी, काँक्रो लगायतका तरकारी खेती गर्दै आएको वर्षौैं भइसक्यो । तरकारी बेचेरै उहाँले घर खर्च मात्रै…
प्रथम नेपाल–भारत व्यापार मेला तथा पर्यटन महोत्सव
कञ्चनपुर, २३ फागुन । प्रथम नेपाल–भारत व्यापार मेला तथा पर्यटन महोत्सव भारतको उत्तराखण्डको प्रादेशिक राजधानी देहरादुनको परेड मैदानमा आइतबारदेखि सुरु भएको छ । कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा सुरु भएको…
पाल्पा महोत्सवमा आठ करोड बराबरको कारोबार
रामपुर (पाल्पा), २३ फागुन । पाल्पाको तानसेनमा सञ्चालन भएको पाल्पा महोत्सवमा रु आठ करोड बराबरको कारोबार भएको छ । गत फागुन १२ गतेदेखि २२ गतेसम्म सञ्चालन भएको महोत्सवमा दुई लाख…
पक्षीजन्य वस्तु वा पदार्थ ओसारपसारमा रोक
पोखरा, २२ फागुन । जिल्ला पशु सेवा कार्यालय कास्कीले जिल्लामा वर्डफ्लुको सङ्क्रमण रोक्न प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था अघि बढाएको छ । कार्यालयद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकाकार सम्मेलनमा जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका…
काठमाडौँ, २२ फागुन । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसनधान ब्युरोले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार छलेर भित्रिएको साढे तेत्तीस किलो सुन पक्राउ घटनामा संलग्न १२ जनालाई पक्राउ गरी सङ्गठित अपराधमा आज मुद्दा दायर…
भारतमा रहेका नेपाली व्यवसायी नेपालमा सय करोड लगानी गर्ने
काठमाडौँ, २२ फागुन । भारतमा रहेका नेपाली व्यवसायीले नेपालको आर्थिक विकासका लागि विभिन्न क्षेत्रमा रु १०० करोेड लगानी गर्ने भएका छन् । राजधानीमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा फेड्रेसन एभरेष्ट चेम्बर…
पूर्वाञ्चल महोत्सवमा रु तीन करोडको कारोबार
बनियानी (झापा), २२ फागुन । झापाको सदरमुकाम भद्रपुरमा आयोजना गरिएको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय औद्योगिक, व्यापार, कृषि तथा पर्यटन महोत्सवमा रु तीन करोड बराबरको कारोबार भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ…
ग्रिनहिल सिटीको सिइओमा पूर्व बैंकर सुमन न्यौपाने
काठमाडौँ, २२ फागुन । पूर्व बैंकर सुम न्यौपाने ग्रिनहिल सिटी प्राइभेट लिमिटेडको सिइओमा नियुक्त हुनु भएको छ । न्यौपानेले नेपाल अरब बैंक (हाल नबिल बैंक) बाट बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु…
भारतबाट अवैध रुपमा कुखुरा चल्ला आउने क्रम रोकिएन
रत्ननगर (चितवन), २१ फागुन । भारतबाट अवैध रुपमा कुखुराका चल्ला आउने क्रम रोकिन सकेको छैन । पछिल्लो आठ महिनामा झन्डै डेढ लाख कुखुराका चल्ला यसरी अवैध रुपमा चितवन भित्रिएको छ…
यो साता शेयरबजार १६ अङ्कले वृद्धि
काठमाडौँ, २१ फागुन । यस साताको नेप्से परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा १६ दशमलव ४ अङ्कले बढेर अन्तिम दिन एक हजार ३२९ दशमलव ४१ अङ्कमा पुगेको छ । गत साताको नेप्से…
लुक्ला–काठमाडौँ हवाई जहाजमा एकजना मात्र यात्रु
सोलुखुम्बु, २० फागुन । चौँरीखर्कस्थित एक विद्यालयमा अध्यापन गर्ने बाक्सिला खोटाङका विजय राई बिहीबार लुक्लाबाट काठमाडौँसम्म हवाईजहाजको यात्रु सिटमा एक्लै यात्रा गर्नुभयो । तीनजना चालक दलका सदस्य भए पनि सीता…
च्याउ खेतीमा कृषकको आकर्षण बढ्यो
रामपुर (पाल्पा), २० फागुन । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले अनुदानमा च्याउघर निर्माण सामग्री, प्यास्ट्रिक, पराल काट्ने चापकटर मेसिन कृषकलाई उपलब्ध गराएकाले अहिले च्याउ खेतीमा कृषकको आकर्षण बढ्न थालेको छ ।…
कालो दिवसका रुपमा आज कालीमाटी तरकारी बजार बन्द
काठमाडौँ, २० फागुन । कालीमाटीस्थित फलफूल तथा तरकारी बजार आज बन्द गरिएको छ । पाँच वर्षअघि त्यस क्षेत्रमा आजकै दिन आगलागी भई ६ जनाको मृत्यु भएका कारण सो घटनाको स्मरणमा…
गाईघाट (उदयपुर), १९ फागुन । केही दिनदेखि डिजेल तथा पेट्रोलको वितरण असहज बन्दै जान थालेपछि उदयपुरको सदरमुकाम गाईघाट बजारलगायतका क्षेत्रमा तेलको कालाबजारी बढ्दै जान थालेको छ । जिल्लाको सदरमुकाम गाईघाटलगायत…
फलेवास (पर्वत), १८ फागुन । जिल्लालाई तरकारी खेतीमा आत्मनिर्भर बनाउने अभियान सुरु भएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले तरकारी खेतीलाई वृहत्तर योजनाको रुपमा विकास गराउँदै आगामी केही वर्षभित्र जिल्लालाई…
अवैध डेन्टल क्लिनिक सञ्चालन गर्ने पक्राउ
दाङ, १७ फागुन । दाङमा अवैधरुपमा प्याथोलोजी र डेन्टल क्लिनिक सञ्चालन गर्ने दुईजना पक्राउ परेका छन् । लालमटिया–३, भालुवाङ बजारमा स्वर्गद्वारी डेन्टल क्लिनिक सञ्चालन गर्ने २६ वर्षीय समिर भण्डारी र…
पथरी (मोरङ), १६ फागुन । व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आएका मोरङको महादेवा–१ का यामलाल दासको परिवार सुकुम्बासीबाट मालिक बनेकोे छ । आजभन्दा करिब १० वर्षअघि रतुवा खोला छेउको ऐलानी जग्गामा…
बैंक ऋण रोकिएसँगै जग्गाको कारोबार प्रभावित
चितवन, १६ फागुन । बैंक एवम् वित्तीय संस्थाले ऋण नदिएपछि यहाँ निकै फस्टाएको जग्गाको व्यवसाय प्रभावित हुन थालेको छ । घर जग्गा र अन्य कुनै पनि शीर्षकमा बैंकले सहजै ऋण…
जुम्ला, १६ फागुन । यहाँको पटमारा गाविसका महिला उद्यमी यतिबेला फापर उत्पादनमा अकर्षित भएका छन् । यो बालीका लागि पटमारा–२ का महिलाले लघुउद्यम सुरु गरेका छन् । एउटै वडाका महिलाले…
माछा महोत्सव सुरु
पोखरा, १४ फागुन । ‘बेगनास जाऔँ, माछाका परिकारमा रमाऔँ’ भन्ने मूल नाराका साथ आजदेखि बेगनास तालको किनारामा तेस्रो माछा महोत्सव सुरु भएको छ । लेखनाथ होटल तथा रेस्टुरेन्ट एसोसिएसनद्वारा आयोजित…
काठमाडौँ, १४ फागुन । साताको नेप्से परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा ३१ दशमलव ८९ अङ्कले घटेको छ । गतसाता ९१ दशमलव ३५ अङ्कले बढेको थियो । यो साताको अन्तिम दिन परिसूचक…
मोरङ, १४ फागुन । मोरङ पथरी शनिश्चरेका महिला अहिले व्यावसायिक च्याउखेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । च्याउखेतीबाट राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि उनीहरु यसतर्फ आकर्षित भएका हुन् । समूह बनाएर नै उनीहरु…
तेत्तीस लाखको चिज बिक्री
बाबियाचौर(म्याग्दी), १३ फागुन । घार गाविस– ५ मा रहेको हिमालयन चिज उद्योगले एक वर्षको अवधिमा रु ३३ लाखको चिज बिक्री गरेको छ । हिमालयन चिज उत्पादन कृषि सहकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित…
सवारीसाधनको ५० प्रतिशत कर्जा सीमाप्रति नाडाको विरोध
काठमाडौँ, १३ फागुन । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३।७४ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा सवारीसाधन मूल्यको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स…
पाल्पा महोत्सव सुरु
पाल्पा, १२ फागुन । पाल्पा सदरमुकाम तानसेनमा ‘पाल्पा महोत्सव–२०७३’ आजदेखि सुरु भएको छ । पाल्पा उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा सञ्चालित महोत्सव फागुन २२ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । महोत्सवको उद्घाटन गर्दै…
शिवरात्री पर्वको अवसरमा नेपाल टेलिकमको अफर
काठमाडौँ, १२ फागुन । उपभोक्ताहरुलाई यथाशक्य सहुलियतपूर्ण दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने कम्पनीको नीति अनुसार नेपाल टेलिकमले नेपालीहरुको पवित्र चाड शिवरात्रीको अवसरमा Festival Offer ल्याएको छ । यस अफरमा Data Bundle…
नेराबैँकको नयाँ व्यवस्थाको कार्यान्वयन माग
काठमाडौँ, ११ फागुन । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले विद्यमान मौद्रिक नीतिमा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरेको छ । चेम्बरले आज विज्ञप्ति जारी…
खाद्य संस्थान धान खरिद गर्न असमर्थ
वीरगन्ज, ११ फागुन । व्यापारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा नेपाल खाद्य संस्थान वीरगन्ज शाखा यस वर्ष धान खरिद गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न असमर्थ रहेको छ । संस्थानले चालु आवमा ३५ हजार…
प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेडको हकप्रद शेयरलाई ग्रेड ४ प्लस
काठमाडौँ, ९ फागुन । प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेडले रु. १००।– अंकित दरका १९ लाख २५ हजार ७८ कित्ता बराबरको १९ करोड २५ लाख ७ हजार ८ सय रुपैयाँको हकप्रद शेयर निष्काशनलाई…
जाजरकोट, ९ फागुन । अवैध रूपमा बिक्रीका लागि लैजाँदै गरेको दुई हजार किलो जडीबुटीसहित प्रहरीले तीन व्यापारीलाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला वन कार्यालयको छुट पुँर्जीबिना चोरी निकासी हुन लागेको…
बागलुङ, ९ फागुन । जिल्लाको दमेक–८ की टुल्की थापा सापकोटाको दैनिकी हिजोआज मेलापात र घरधन्दामा मात्र सीमित छैन । छिमेकमा निमेक गरेर गुजारा धान्ने टुल्कीको परिचय अहिले उद्यमीका रुपमा गनिएको…
पत्रकार बुढाथोकीको ‘समकालीन नेपाली अर्थतन्त्र’ सार्वजनिक
काठमाडौँ, ९ फागुन । पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीले लेख्नुभएको पुस्तक ‘समकालीन नेपाली अर्थतन्त्र’को यहाँ हिजो सार्वजनिक गरिएको छ । आर्थिक पत्रकारितामा लामो समयदेखि क्रियाशील रहँदै आउनुभएका बुढाथोकीको यो दोस्रो पुस्तक हो । पुस्तकको…
काठमाडौँ, ८ फागुन । ‘दिगो पूर्वाधार समृद्धिको आधार’ भन्ने नारासहित आजदेखि यहाँ ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०१७’ सुरु भएको छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सिएनआई) मुख्य आयोजक तथा नेपाल सरकार र…
मैलुङ खोला जलविद्युतको आइपिओ आउँदै
काठमाडौँ, ८ फागुन । मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले साधारण शेयर (आइपिओ) निष्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीले चालु आर्थिक वर्ष २०७३।७४ मा ११ लाख ४ हजार ४ सय २९…
बझाङ, ७ फागुन । यहाँका व्यापारीले ढुङ्गाको ढक प्रयोग गरी सबैले देख्ने गरी उपभोक्तालाई ठगी गर्दै आएका छन् । स्थानीय व्यापारीले दाल, चामल, चिनी, तथा माछा मासु र तरकारी बिक्री…
आशा लघुवित्तको थप शाखा भरतपुर र रजहरमा
काठमाडौँ, ६ फागुन । आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले चितवनको भरतपुर र नवलपरासीको रजहरमा शाखा विस्तार गरेको छ । भरतपुर शाखाको उद्घाटन संस्थाका अध्यक्ष रामबहादुर पाण्डे र रजहर शाखाको उद्घाटन संचालक…
युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावरको आइपिओ फागुन १९ गतेदेखि
काठमाडौँ, ६ फागुन । युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावरले आफ्नो जारी पूँजीको १५ प्रतिशत बराबरको १७ लाख २५ हजार कित्ता साधारण शेयर सर्वसाधारणको लागि निष्काशन यही फागुन १९ गतेदेखि गर्ने भएको छ…
सानिमा क्यापिटलको प्रबन्धकत्वमा निष्काशन गरिएको सिनर्जी पावरको शेयर बाँडफाँड
काठमाडौँ, ५ फागुन । सानिमा क्यापिटल लिमिटेडको निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकत्वमा निष्काशन गरिएको सिनर्जी पावर डेभलपमेण्ट लिमिटेडको रु १००/— अंकित दरको २१,००,००० कित्ता साधारण शेयरहरुमध्ये सामूहिक लगानी कोषका लागि ५…
नेपाल व्यवस्थापन सङ्घको सभापतिमा भट्ट
काठमाडौँ, ५ फागुन । नेपाल व्यवस्थापन सङ्घको १८औँ प्रबन्ध समितिका पदाधिकारीको निर्वाचनबाट सुशील भट्ट सभापतिमा निर्वाचित हुनुभएको छ । राजधानीमा सम्पन्न निर्वाचनमा राजेन्द्र पण्डित प्रथम उपसभापति, धु्रव भट्टराई द्वितीय उपसभापति,…
उपत्यकामा साझाका रात्रिबस सेवा सुरु
काठमाडौँ, ४ फागुन । साझा यातायातले राति काम गर्ने र अस्पताल जानेलाई लक्षित गरी उपत्यकाका पाँच रुटमा परीक्षणका रुपमा रात्रिकालीन बस सेवा सञ्चालन गरेको छ । मङ्गलबार रातिदेखि अस्पताल क्षेत्रलाई…
म्याद नाघेका पोका दूध र दही बिक्री गर्ने डेरीमा सिलबन्दी
बाबियाचौर (म्याग्दी), २ फागुन । म्याद नाघेका पोका दूध र दही बिक्री गर्ने बेनीको एक डेरी पसलमा अनुगमन टोलीले सिलबन्दी गरेको छ । पोखरामा रहेको पन्थी डेरी उद्योगको बेनी अस्पताल…
रत्ननगर (चितवन), २ फागुन । चितवनको नारायणगढ र भरतपुर क्षेत्रमा रहेको बैंक, वित्तीय संस्था तथा सुनचाँदी व्यवसायको सुरक्षाका लागि हतियारसहितका सुरक्षाकर्मीलाई चौबिसैँ घन्टा परिचालन गरिएको छ । आजदेखि लागू हुने…
लिबाङ (रोल्पा), १ फागुन । काम कहिले पनि सानो वा ठूलो हुँदैन भन्ने मान्यता राख्ने रोल्पाका २७ वर्षीय जीवन वलीले स्नातक उत्तीर्ण गरेर कपाल काट्ने पेसा अङ्गाल्दै आउनुभएको छ ।…
लहान, २८ माघ । सरकारले गत वर्षदेखि सञ्चालन गरेको बाली तथा पशुपक्षी बिमाअन्तर्गत सिरहामा १७ हजार कुखुरा र ५०० पशुको बिमा गरिएको छ । बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत लहानस्थित लुम्बिनी जेनरल लाइफ…
काठमाडौँ, २८ माघ । निजी क्षेत्रको विमान सेवा हिमालय एअरलायन्सले आजदेखि काठमाडौँ–क्वालालम्पुर सिधा उडान सुरु गरेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आज बिहान आयोजित विशेष समारोहमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक…
नगरपालिकाको लगानीमा यातायात कम्पनी
काठमाडौँ, २७ माघ । काठमाडौँ उपत्यकाका यात्रुलाई सस्तो, सुलभ, स्तरीय र भरपर्दो नगर यातायात सेवा दिने गरी सरकारीस्तरबाट यातायात कम्पनी खुल्ने भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको…
काठमाडौँ, २७ माघ । चालु आव २०७३/७४ को पहिलो छ महिनाका अवधिमा निकासीमा सामान्य सुधार भए तापनि पैठारीमा देखिएको अत्यधिक वृद्धिका कारण व्यापार घाटामा ७१.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।…
बाबियाचौर (म्याग्दी), २७ माघ । यहाँ उत्पादन भएको टिमुर अस्ट्रेलिया निकासी को अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्न थालिएको छ । बेनी नगरपालिका–१० तोरीपानीका कृषकले उत्पादन गरेको टिमुर यस वर्ष अस्ट्रेलिया निकासी भएको…
काठमाडौँ, २७ माघ । युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेडले १७ लाख २५ हजार कित्ता साधारण सेयर जारी गर्ने भएको छ । धितोपत्र बोर्डले कम्पनीलाई साधारण सेयर जारी गर्ने अनुमति प्रदान गरेको…
सगुनले नेपालीलाई विश्व मिडिया सञ्जालमा लगानीको अवसर जुटाउने
काठमाडौँ, २७ माघ । सगुन मिडिया सञ्जाल अमेरिका स्थित नेपाली उद्यमीले अमेरिकामा सञ्चालन गरेको कम्पनीमा विदेशमा रहेका नेपालीहरुका लागि लगानीको अवसर जुटाउने भएको छ । यसले शुरुमा नेपालमा नेपालीहरुलाई अवसर…
पोखरा, २५ माघ । लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घ, कास्कीको आयोजनामा यही माघ २७ गतेदेखि फागुन ८ गतेसम्म सञ्चालन हुने १३औंँ संस्करणको लेखनाथ महोत्सवको तयारी पूरा भएको छ । आज यहाँ…
रत्ननगर (चितवन), २५ माघ । ब्रोइलर कुखुराको चल्लाको मूल्य बढेको दुई दिन बित्न नपाउँदै जिल्लामा व्यवसायीले कुखुराको मासुको मूल्य समेत बढाएका छन् । नेपाल कुखुरा बजार व्यवस्थापन सङ्घले ब्रोइलर मासुको…
काभ्रे, २४ माघ । टुकुचा नाला– ७ घिमिरेगाउँकी २३ वर्षीया गीता घिमिरे विगत चार वर्षदेखि तरकारीखेती गर्दै आउनुभएको छ । अन्य पेसा भन्दा तरकारीखेतीबाट राम्रो आम्दानी भएको र यसबाटै आत्मनिर्भर…
नेपाल टेलिकमको तेह्रौँ वार्षिकोत्सव विविध कार्यक्रमका साथ सम्पन्न
नेपाल टेलिकमले आफ्नो स्थापनाको तेह्रौँ बार्षिकोत्सव आज (२०७३ माघ २२ गते) विविध कार्यक्रमका साथ सम्पन्न गरेको छ । वार्षिकोत्सवको अवसरमा कम्पनीले काठमाडौं र पोखरामा जीएसएम प्रिपेड सेवामा 4G सेवा प्रारम्भ…
नेप्सेले ‘अड लट’ कारोबार गर्ने
काठमाडौँ, २३ गते । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले नियमित कारोबार समयमै १० कित्ताभन्दा कम शेयरको कारोबार शुरु गरेको छ । दास्रो बजार कारोबारलाई सरल बनाउन नियमित कारोबार समयमै उक्त…
चितवन, २१ माघ । भरतपुर उपमहानगरपालिका वडा नं २ मिलनरोड, नारायणगढमा रहेको आधुनिक सुनचाँदी पसलमा गएराति अनौठो प्रकारले चोरी भएको छ । सो पसल विकास बर्माको हो । जिल्ला प्रहरी…
पथरी (मोरङ), २१ माघ । गाउँमै प्रशोधन केन्द्र स्थापना भएपछि यहाँका किसानले विगतमा भन्दा यसवर्ष राम्रो मूल्य पाएका छन् । प्रतिकिलो ११ रूपैयाँमा काँचो सुपारी बेच्दै आएका किसानले प्रशोधनपछि प्रतिकिलो…
नेपाल टेलिकमको तेह्राैँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रभातफेरी कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौँ, २१ माघ । नेपाल टेलिकमले आफ्नो तेह्रौँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आज (२०७३ माघ २१ गते) प्रभातफेरी कार्यक्रम आयोजना गरयो । काठमाडौं उपत्यकामा आयोजित प्रभातफेरी कार्यक्रम बसन्तपुरबाट प्रारम्भ भएको थियो ।…
नेपाल टेलिकमले आफ्नो तेह्रौँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा अस्पतालहरुमा सहयोग सामग्री हस्तान्तरण
काठमाडौँ, २० माघ । नेपाल टेलिकमले आफ्नो तेह्रौँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आज (२०७३ माघ २० गते) विभिन्न अस्पतालहरुमा विभिन्न सहयोग सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ । कम्पनीले काभ्रेको साँगास्थित स्पाइनल इन्जुरी पुनस्र्थापना…
काभ्रे, २० माघ । बालुवापाटी गाविस– २ का भीमबहादुर घोरसाइने सधैँ आफ्नो मेहनतमा विश्वास गर्नुहुन्छ । प्रहरीको जागिर छाडेका घोरसाइनेले आलुखेतीबाट वार्षिक करिब रु १२ लाख आम्दानी गर्दै आउनुभएको छ…
इलाम, २० माघ । किसानले यस वर्ष एक हजार ९९५ मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन गरी रु ११ करोड ९७ लाखको सुन्तला बिक्री गरेका छन् । यहाँ उत्पादन भएको सुन्तला झापा,…
ग्यासको मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्न माग
काठमाडौँ, २० माघ । खाना पकाउने ग्यासमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्न राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालले सरकारसँग माग गरेको छ । नेपाल आयल निगमले बुधबार रातिदेखि लागू हुने गरी ग्यासमा…
सोलुखुम्बु, १६ माघ । पञ्चनका राजन राईले सोलुखोला दूधकोसी जलविद्युत् आयोजनाका लागि २०० कित्ता सेयर किन्न रु २० हजार सल्लेरीस्थित एनएमबी बैंकमा बुझाउनुभयो । शुक्रबार बैंकमा रकम जम्मा गर्दै गर्नुभएका…
नेपाल टेलिकमको तेह्रौँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा बाग्मती सफाइ अभियान
काठमाडौँ, १५ माघ । नेपाल टेलिकम आफ्नो तेह्रौँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आज (२०७३ माघ १५ गते) बाग्मती सफाइ महाअभियानमा सहभागी भएको छ । सो अवसरमा कम्पनीले सफाइ अभियानका लागि आवश्यक सफाइ…
जापानीले भक्तपुरमा खोलिदिए सीप विकास केन्द्र
महिलाहरु सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्दै काठमाडौँ, १३ माघ । इन्स्टिच्युट अफ कल्चरल अफेयर्स (आइसिए) नेपालले भक्तपुरको चाँगुनारायणमा १ करोड ३५ लाख रुपैया लगानी गरेर बालबालिका तथा महिला सिकाइ केन्द्रको स्थापना…
काठमाडौँ, १३ माघ । वि.सं. २०६० साल असार ५ गते स्थापना भई जलविद्युत आयोजनाको पहिचान, विकास, निर्माण र संचालन गर्ने उद्देश्य लिएर स्थापित अपि पावर कम्पनी लिमिटेडले दोश्रो आयोजनाको रुपमा…
हिमालयन पावर पार्टनरको साधारण शेयर निष्काशन
काठमाडौँ, ९ माघ । हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेडको रु. १००।– अंकित दरका १० लाख ६५ हजार ४ सय १७ कित्ता साधारण शेयर माघ १७ गतेदेखि निष्काशन गर्ने भएको छ ।…
माघ महिनाको पहिलो सातामा यस्तो देखियो शेयर बजार
काठमाडौँ, ७ माघ । नेपाली शेयर बजारले १९०० भन्दा बढी अंक पार गरेर केही महिनाको अन्तरमा शेयर बजार ओरालो लाग्ने क्रमले न्यूनतम बिन्दु १३०० को हारहारीमा पुगेर अहिले नेप्से क्रमशः…
धितोपत्र बोर्डले रिलायबललाई दियो अनुमति
काठमाडौँ, २५ पुस । काठमाडौँको सुन्धारा स्थित रजिस्टर्ड कार्यालय रहेको रिलायबल क्यापिटल लिमिटेडलाई धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) को रुपमा कार्य गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त भएको छ | रिलायबल…
जाजरकोट, २० पुस । यस वर्ष जिल्लामा रु नौ करोड बराबरको सुन्तला उत्पादन भएको छ । गत वर्षभन्दा पाँच प्रतिशतले उत्पादनमा वृद्धि भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका वरिष्ठ कृषि विकास…
तीन करोड भन्दा बढी कित्ता सेयर सूचिकृत
काठमाडौँ, १९ पुस । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सोमबार विभिन्न पाँचै कम्पनीको ३ करोड १ लाख २४ हजार ४ सय २१ कित्ता सेयर सूचीकृत भएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको १…
रत्ननगर (चितवन), १० पुस । चितवनको नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा बिहान ११ देखि ३ बजेसम्म अन्य सवारी साधन चल्नमा रोक लगाइएपनि पर्यटक बस भने नरोकिने भएको छ । चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी…
पथरी (मोरङ), १० पुस । मोरङको कदमाहाका गणेश रायको परिचय फेरिएको एक वर्ष भयो । कदमाहाकै अभय ऋषिदेवको पनि दैनिकि बदलिएको एक वर्ष पुग्यो । अहिले ऋषिदेव र रायको दैनिकी…
काठमाडौँ, ७ पुस । सार्वजनिक यातायात कम सञ्चालन भएर यात्रुलाई आवतजावतमा समस्या भएका बेला पनि साझा यातायातका ४० वटा बसले भने उपत्यकामा नियमित सेवा दिइरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा भएको…
रामपुर (पाल्पा), ७ पुस । व्यावसायिक पशुपालनमा पुरुषसँगै महिला पनि आकर्षित हुँदै गएका छन् । व्यापार व्यवसाय, उद्योग, कलकारखाना, पसल, पशु तथा कृषि फार्मलगायत क्षेत्रमा पुरुषको वर्चस्व रहेकामा जिल्लाका महिला…
अरुण कावेली पावरको शेयर बाँडफाँड
काठमाडौँ, ७ पुस । अरुण कावेली पावर लिमिटेडले सर्बसाधारणको लागि निष्काशन तथा बिक्री खुल्ला गरिएको रु. १००। अंकित दरका ३० लाख कित्ता सेयर बाँडफाँड भएको छ । १ लाख ६५…
परामर्श सेवा लिन नेपाल टेलिकमले विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता गर्यो
काठमाडौँ, ७ पुस । नेपाल टेलिकममा रणनीतिक साझेदार नियुक्ति, कार्यान्वयन लगायत आवश्यक कार्यहरुमा परामर्श दिनका लागि परामर्शदातासँग सम्झौता सम्पन्न भएको छ । बोलपत्रमार्फत छनोट भएको परामर्शदाता Analysys Mason Limited UK…
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले ५० प्रतिशत दरले नगद लाभांश वितरण गर्ने
काठमाडौँ, ५ पुस । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को ३५ औं साधारण सभाले आर्थिक वर्ष २०७२।७३ को खुद मुनाफा ४८ करोड ९६ लाख रुपैयाँबाट ५० प्रतिशतका दरले नगद लाभांश वितरण गर्ने…
छ बुँदे माग राख्दै चिनी मिलमा आन्दोलन
गौशाला, ३ पुस । उँखु उत्पादन सङ्घ महोत्तरीले विभिन्न छ बुँदे माग राख्दै जिल्लाको एभरेष्ट सुगर मिल रामनगरमा शनिबारदेखि आन्दोलन सुरु गरेका छन् । करिब एक सयको सङ्ख्यामा किसानले चिनी…
विराटनगर, १ पुस । नेपालको पूर्वी क्षेत्रबाट गत आवमा भारतलगायत तेस्रो मुलुकसँग रु एक खर्ब ७५ अर्ब ७९ करोड ४१ लाख ४३ हजारको व्यापार गर्दा रु एक खर्बभन्दा बढी व्यापार…
पर्यटक प्रवर्द्धनका लागि ‘चितवन हात्ती महोत्सव’
चितवन (रत्ननगर), १ पुस । चितवनको सौराहामा पर्यटन प्रवर्द्धनको लक्ष्यसहित यही पुसमा ‘चितवन हात्ती महोत्सव’ हुने भएको छ । नेपालमा पहिलोपटक जनावरका गतिविधि समेटेर गरिने महोत्सवमा यसपटक थप आकर्षणसहित जनावरमैत्री…
वीरगन्ज, १ पुस । भारत सरकारले पाँच सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाएपछि खुद्रा व्यापारी नआउँदा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भन्सार राजस्वमा परेको छ । भारतीय रुपैयाँको अभावका कारण तेस्रो मुलुकबाट…
ललितपुर, ३० मङ्सिर । व्यावसायिक रुपमा खेती बढ्दै गएपछि नेपाल केही वर्षमा नै आलुमा आत्मनिर्भर बन्ने देखिएको छ । अहिले वार्षिक करिब १० प्रतिशत मात्रै आलु आयात भइरहेको नेपाल कृषि…
काठमाडौँ, ३० मङ्सिर । लगातार घट्दै आएको धितोपत्र बजार आज भने दोहोरो अङ्कले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका अनुसार बजार १३.९८ प्रतिशतले बढेको हो । कुल १३८ कम्पनीको छ…
आलुको उत्पादन घटेपछि किसान चिन्तित
काभ्रे, ३० मङ्सिर । आलुको उत्पादन घटेपछि नाला गाविसका किसान चिन्तित हुन थालेका छन् । यस वर्ष आलुको उत्पादन र मूल्यमा हस आएको छ । लगानी खर्चसमेत उठाउन नसकिने अवस्था…
चन्द्रौटा (कपिलवस्तु), ३० मङ्सिर । शिवराज नगरपालिका– १३, जवाभारीस्थित महालक्ष्मी सुगर मिलले उखुको क्रसिङ सुरु गरेको छ । मिलमा अहिले उखु धमाधम आयात हुन थालेको छ । दैनिक २५ हजार…
सोलुखुम्बु, ३० मङ्सिर । चौलाखर्क र गोली गाविसमा उत्पादन भएको अलैँची बिक्री हुन नसक्दा किसान मारमा परेका छन् । गत वर्ष किसानबाट खरिद गरेको अलैँची स्थानीय व्यापारीले अझै बिक्री गर्न…
जोमसोम–पोखरा जिप सेवा सुरु
मुस्ताङ, ३० मङ्सिर । पोखरा–बेनी–जोमसोम सडकमा सिधा जिप सेवा सुरु भएको छ । साढे नौ करोड रुपैयाँको लगानीमा स्थापित मुक्तिनाथ दर्शन यातायात प्रालिले बुधबारदेखि जोमसोमदेखि पोखरासम्म सिधा जिपसेवा सुरु गरेको…
सेयरबजार ६.६५ अंकले उकालो लाग्यो
काठमाडौँ, २९ मङ्सिर । निरन्तर अोरालो लागेको नेप्से परिसूचक अाज भने उकालो लागेको छ । कुल १३७ कम्पनीहरूको कारोवार भएको अाजको शेयरबजारमा ६.६५ अंकले बढेर १५१६.०८ विन्दुमा पुगेको छ । होटल र फाइनान्स समूहको सेयर…
रत्ननगर (चितवन), २९ मङ्सिर । पश्चिम चितवनको चारवटा सामुदायिक वनमा पर्यटकका लागि हात्ती सफारी सुरु भएको छ । चितवनको पश्चिम क्षेत्रमा पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्न देवनगर पोष्टबाट हात्ती सफारी सुरु…
सिन्धली महोत्सव पुस दोस्रो सातादेखि, भब्य तयारी
काठमाडौँ, २८ मङ्सिर । काठमाडौँ–सिन्धुली उद्योग बाणिज्य संघले आगामी पुसको दोस्रो साता सिन्धुली महोत्सव गर्ने भएको छ । संघले राजधानीमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी आगामी पुस ७ देखि १७ सम्म…
सेयरबजार अोरालो लाग्ने क्रम रोकिएन, १३.३७ अंकले घट्यो
काठमाडौँ, २७ मङ्सिर । नेप्से परिसूचक निरन्तर अोरालो लाग्ने क्रम रोकिएन, अाज साताको दोस्रो दिन पनि सेयरबजार फेरि अोरालो लागेको छ । कुल १३७ कम्पनीहरूको कारोवार भएको अाजको शेयरबजारमा १३.३७ अंकले घटेर १५०९.४३ विन्दुमा…
बन्द भएका निजी उद्योग खुल्ने
काठमाडौँ, २७ मङ्सिर । सरकारले विभिन्न कारणले बन्द भएका निजी क्षेत्रका उद्योग खोल्न सहजीकरण गर्ने भएको छ । उद्योग मन्त्रालयले २१ दिनभित्र सूचना प्रकाशन गरी मुलुकभर बन्द भएका त्यस्ता उद्योगको…
गाउँको पर्यटकीय विकास र युवा पलायन कम गर्न रिसोर्ट
पोखरा, २७ मङ्सिर । पर्यटकीय स्थल कास्कीको लुम्ले–३ स्थित सुन्दर गाउँ तान्चोकमा युवा पलायनलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले कल्सी इको लज रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याइएको छ । ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धन मञ्चका पूर्वअध्यक्षसमेत…
च्याउ बिक्रीबाट रु चार लाख बराबरको आम्दानी
रामपुर (पाल्पा), २७ मङ्सिर । रामपुरका च्याउ व्यवसायी कृषक बलबहादुर राना एक याममा च्याउ बेचेर रु चार लाख बराबरको आम्दानी गर्नुहुन्छ । विदेशबाट फर्केर उहाँले विगत पाँच वर्ष अगाडिदेखि व्यावसायिक…
धनगढी, २६ मङ्सिर । तरकारीका लागि बढी प्रयोगमा आउने लौका बढीमा पाँच, आठ वा दश किलोसम्म फल्नसक्छ भनेर सबैले अनुमान लगाउन सक्छन् । तर यहाँका एक किसानको बारीमा २५ किलोको…
सेयरबजार २१.८८ अंकले अोरालो लाग्यो
काठमाडौँ, २६ मङ्सिर । नेप्से परिसूचक निरन्तर अोरालो लाग्ने क्रम रोकिएन, अाज साताको पहिलो दिन सेयरबजार फेरि अोरालो लागेको छ । कुल १४१ कम्पनीहरूको कारोवार भएको अाजको शेयरबजारमा २१.८८ अंकले घटेर १५२२.८० विन्दुमा पुगेको…
कञ्चनपुर, २६ मङ्सिर । कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरपालिका– २ भासिका मोहनदत्त अवस्थीले बैंकबाट कर्जा लिई व्यावसायिक गाई फार्म सञ्चालन गर्नुभएको छ । बैंकबाट रु १४ लाख कर्जा र आफ्नो रु तीन लाख…
इटहरी, २५ मङ्सिर । पूर्वी नेपालका अदुवा किसान आफ्नो उत्पादनलाई भारतमा निकासी गर्न नसक्दा गम्भीर समस्यामा परेका छन् । पाँच वर्षपछिको सबैभन्दा कम मूल्यमा पनि अदुवा बिक्री हुन छाडेपछि पूर्वी…
सेयर बजारमा कालो धन नियन्त्रण हुने, अास्वा प्रणाली माघ १ गतेबाट
काठमाडौँ, २५ मङ्सिर । लगानीकर्तालाई विश्वस्त गराउन केही समय लाग्ने भए पनि धितोपत्र बजारलाई सुधार गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले अत्याधुनिक प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा नेपाल…
सेयर लगानीकर्ताहरूको मनोबल अझै बढेन, ९.२२ अंकले सेयरबजार अोरालो लाग्यो
काठमाडौँ, २३ मङ्सिर । नेप्से परिसूचक निरन्तर अोरालो लाग्ने क्रम रोकिएन, अाज साताको अन्तिम दिन सेयरबजार फेरि अोरालो लागेको छ । कुल १३४ कम्पनीहरूको कारोवार भएको अाजको शेयरबजारमा ९.२२ अंकले घटेर १५४४.६८ विन्दुमा पुगेको छ…
काठमाडौँ, २३ मङ्सिर । मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने नेपाली कामदारसँग विभिन्न नाममा बढी रकम उठाउने कार्यमा संलग्न वान स्टप सेन्टर(ओएससी), आइएससीलगायत संस्थाको काम कारबाही तत्काल रोक्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशन…
लहान, २३ मङ्सिर । सप्तरीको गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रको अस्तित्व सङ्कटमा परेको छ । असुरक्षा, औद्योगिक वातारण तथा लगानी पुँजीको अभाव देखाउँदै लामो समयदेखि बन्द भएका उद्योग पुनः सञ्चालनमा आउने…
नवलपरासी औद्यौगिक व्यापार मेला आजदेखि सुनवलमा सुरु
नवलपरासी, २३ मङ्सिर । आजदेखि सुनवलमा सुरु भएको पश्चिमाञ्चलस्तरीय नवलपरासी औद्यौगिक व्यापार मेलाको उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले उद्घाटन गर्नुभएको छ । ‘शान्ति समृद्ध उद्योग र व्यापार राष्ट्र निर्माणको बलियो आधार’ नाराका…
सेयरबजार फेरि अोरालो लाग्यो, कारोवार रकम पनि घट्यो
काठमाडौँ, २२ मङ्सिर । साताको तेस्रो दिन नेप्से परिसूचकमा झिनो सुधार अाएको थियो, तर अाज चौथो दिन फेरि अोरालो लागेको छ । कुल १३७ कम्पनीहरूको कारोवार भएको अाजको शेयरबजारमा ०.६१ अंकले घटेर…
काँकडभिट्टा (झापा), २२ मङ्सिर । नेपालले काँकडभिट्टा– फूलवारी–बङ्गलाबन्ध पारवहन मार्गबाट विगत १९ वर्षको अवधिमा गरिएको व्यापारमा आयातको तुलनामा निर्यात बढी गरेको पाइएको छ । बङ्गलादेशसँग सिधै व्यापार गर्नका लागि नेपालले…
बेनी (म्याग्दी), २२ मङ्सिर । म्याग्दीको सुन्तलाको पोखरा र काठमाडाँैमा माग अत्यधिक बढेको छ । जिल्ला बाहिरबाट माग आउन थालेपछि यहाँका किसानलाई बिक्र ी गर्न भ्याइनभ्याई छ । अन्यत्र जिल्लाबाट…
आफ्नै व्यवसायबाट आत्मनिर्भर बन्दै महिला
ललितपुर, २२ मङ्सिर । आफ्ना उमेरका साथीहरु धमाधम विदेश पलायन भइरहँदा पाटनकी मनिषा ताम्राकार भने सफल उद्यमी बनेर नाम र प्रतिष्ठा कमाउन चाहन्छिन् । करिब ५ वर्षपहिले पारिवारिक व्यवसायका रुपमा…
निरन्तर घटिरहेको सेयरबजारमा केही सुधार, कारोबार रकम भने बढ्न सकेन
काठमाडौँ, २१ मङ्सिर । धितोपत्र बजारमा नेप्से परिसूचक आज उकालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका अनुसार आज बजार ९.९१ प्रतिशतले उकालो लागेको छ । कुल १३६ कम्पनीको नौ लाख…
नगरमा प्रदूषण बढेपछि च्याउ किसान ग्रामीण क्षेत्रमा
ललितपुर, २१ मङ्सिर । नगर क्षेत्रमा प्रदूषणका कारण च्याउखेती फस्टाउन नसकेपछि जिल्लाका च्याउ किसान ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानान्तरण भइरहेका छन् । जिल्लाका चन्दनपुर, कतवान, भारदेउलगायत दक्षिणी भेगका गाविसमा किसान च्याउखेतीतर्फ आकर्षित…
पोखरी गाउँ अम्रिसो खेतीबाट समृद्ध बन्दै
कावासोती, २१ मङ्सिर । नवलपरासीको धौवादी गाविस– ३ पोखरी गाउँका बासिन्दा अम्रिसो खेती र महबाट समृद्ध बन्दै गएका छन् । जङ्गलमा रहेको अम्रिसोको मुना ल्याएर यहाँका किसानले बारीका कान्लैभरी अम्रिसो…
काठमाडौँ, २१ मङ्सिर । तपाइँलाई सुन्दा अचम्म लाग्ला, रु १० मा सर्ट बेचेर दैनिक रु एक हजार ५०० आम्दानी हुन्छ भन्दा । तर काठमाडौँको सामाखुशीमा रहेको सुखावती स्टोरले रु १०…
सेयरबजार अोरालो लागेर १५४४ विन्दुमा पुग्यो
काठमाडौँ, २० मङ्सिर । साताको दोस्रो दिन पनि नेप्से परिसूचक अोरालो लागेको छ । कुल १४० कम्पनीहरूको कारोवार भएको अाजको शेयरबजारमा २६.३५ अंकले घटेर १५४४.६० विन्दुमा पुगेको छ । उत्पादन समूहको सेयर उकालो लाग्यो भने यस बाहेक…
बाबियाचौर (म्याग्दी), २० मङ्सिर । म्याग्दीमा यातायात व्यवसायीबीच प्रतिस्पर्धा हुन थालेपछि यात्रुलाई सहज भएको छ नयाँ व्यवसायीले सेवा विस्तार गर्न थालेपछि एकाधिकार र आलोपालो प्रथा (सिन्डीकेट)को प्रभाव घट्नुका साथै यात्रुले…
पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरणमा सहजता र सुधार
विराटनगर, १९ मङ्सिर । पूर्वाञ्चलमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरणमा समस्या नरहेको देखिएको छ । केही दिन अगाडि ट्यांकर चालकको आन्दोलन फिर्ता भएको र भारतबाट पेट्रोलियम वितरणको आयातमा पनि समस्या नरहेको…
काठमाडौँ, १९ मङ्सिर । राजनीतिक अस्थिरताको असर सेयरबजारमा पनि परेको छ, अाज साताको पहिलो दिन नेप्से परिसूचक अोरालो लागेको छ । कुल १३७ कम्पनीहरूको कारोवार भएको अाजको शेयरबजारमा २९.५४ अंकले घटेर…
पाल्पा, १९ मङ्सिर । विदेशमा श्रमको मूल्य नपाउँदाको पीडा कस्तो होला ? ऋण खोजेर कतार पुग्नुभएका पाल्पा चाँपपानी गाविस– ५, चुनडाँडाका कोशल गाहाले व्यहोर्नु परेको घटना हो । कतारमा पैसा…
पोखरा, १९ मङ्सिर । दृढ इच्छा शक्ति र लगनशील भएर माटोसँग खेल्न सक्ने हो भने पैसा कमाउन बिदेसिनु पर्दैन भन्ने पोखरा–२३ खच्र्याङका कृषक टीकाराम भण्डारीले उदाहरण बन्नु भएको छ ।…
यो साता सेयरबजार १४०० विन्दुबाट १६०० मा पुग्यो
काठमाडौँ, १७ मङ्सिर । यस साता नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा १५२ कम्पनीहरुको कारोबार भएको छ । जस अनुसार ३७४३६ कारोबारबाट पाँच अर्ब ८३ करोड २५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबरका ७४…
काठमाडौँ, १७ मङ्सिर । जापान सरकारले उपलब्ध गराएको सात हजार तीन सय क्विन्टल चामल विगत छ वर्षदेखि नेपाल खाद्य संस्थानका गोदाममा थन्किएको छ । जापानले खाद्यान्न सहयोगअन्तर्गत उपलब्ध गराएको उक्त…
सुन्तलाबाट मनग्य आम्दानी
रामपुर (पाल्पा), १७ मङ्सिर । गाउँको जग्गा छाडेर सहरतिर बसाइँ सराइ गर्ने तयारीमा रहनुभएका गल्धा गाविस– ६, बहपुरका ६० वर्षीय मानबहादुर ढेँगा मनग्य आम्दानी हुन थालेपछि गाउँमै बसेर सुन्तलाखेती गर्न…
मुझुङबाट रु एक करोडको तरकारी बाहिरियो
पाल्पा, १६ मङ्सिर । केही वर्षअघिसम्म बजारबाट तरकारी किनेर खाने मुझुङवासी अहिले तरकारीखेती गरेर मनग्य आम्दानी गर्न थालेका छन् । पहिला तरकारीका लागि बजारको भर पर्ने यहाँका किसान अहिले तरकारी…
उकालो लाग्न थालिसकेको बजारमा फेरि पूर्णविराम लाग्यो
काठमाडौँ, १६ मङ्सिर । विगत दुई दिनदेखि अस्वाभाविक रुपले बढेको सेयर बजार अाज भने घटेको छ । कुल १३८ कम्पनीहरूको कारोवार भएको अाजको शेयरबजारमा ७.८४ अंकले घटेर १६००.४९ विन्दुमा पुगेको छ । विकास बैंक,…
भीमदत्तनगर, १६ मङ्सिर । छब्बीस वर्षीय हरेन्द्र बोहरा काठमाडौँको शङ्करदेव क्याम्पसबाट स्नातकोत्तर पढाइ सकेर दुई वर्षअघि घर फर्किनुभयो । अन्ठाउन्न प्रतिशतभन्दा बढी अङ्क ल्याएर स्नातकोत्तर गरेका बोहरा कृषि पेसामा व्यावसायिक…
चितवन, १६ मङ्सिर । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटकको सङ्ख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । निकुञ्जका कार्यालयका अनुसार, गत आर्थिक बर्षको पहिलोे चार महिनाको तुलनामा यस वर्षको सोहि अबधिमा दोब्बरभन्दा बढीले…
सलकपुरको सुन्तलाको कोलकातामा स्टल
इलाम, १६ मङ्सिर । यसबर्ष डिसेम्बरको १ देखि ३ तारिखसम्म भारतको कोलकातामा हिमालयन ओरेन्ज टुरिजम काउन्सिलले आयोजना गरेको ‘तेस्रो हिमालयन ओरेन्ज टुरिजम फेस्टिबल’ मा इलामको सलकपुरको सुन्तला स्टल राखिएको छ…
शेयरबजार ५४.६५ अंकले बढ्यो, कारोवार रकम पनि उत्साहजनक
काठमाडौँ, १५ मङ्सिर । नेपाल स्टक एक्स्चेन्जले सेयर कारोबार अस्वाभाविक रुपमा बढेको छ । कुल १३५ कम्पनीहरूको कारोवार भएको अाजको शेयरबजारमा ५४.६५ अंकले बढेर १६०८.३३ विन्दुमा पुगेको छ । होटल समूह स्थीर रह्यो…
नुन अभाव हल्ला मात्र
पोखरा, १५ मङ्सिर । साल्टटे«डिङ कर्पोरेसनको पोखरास्थित गण्डकी अञ्चल कार्यालयले नुन अभाव नरहेको जनाएको छ । गोदाममा पर्याप्त मात्रामा नुन रहेकाले बजारमा अभाव भएको कुरा हल्ला मात्र भएको कार्यालयका लेखापाल…
बेनी (म्याग्दी), १५ मङ्सिर । म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजारको सुरक्षाका लागि सीसीटिभीमार्फत निगरानी सुरु गरिएको छ । उद्योग वाणिज्य सङ्घ म्याग्दीको पहलमा रु १५ लाखको लागतमा बेनी बजारका विभिन्न स्थानमा…
राजविराज, १५ मङ्सिर । सप्तरी सदरमुकाम राजविराजमा बिहीबारदेखि सुरु भएको राजविराज महोत्सव आज सातौँ दिन पनि जारी छ । राजविराजस्थित राजरङ्गशालामा सुरु भएको उक्त महोत्सवमा कृषि प्रदर्शनी, अटोमोबाइल तथा आइटी,…
पोखरा, १५ मङ्सिर । माझठाना गाविस– ६ स्याङ्खुदीका सूर्यमोहन बास्तोलाले व्यावसायिक रुपमा मरिचखेती सुरु गर्नुभएको छ । घर छेउमै लगाइएका एक सय बिरुवामध्ये ५० वटाले फल दिन सुरु गरेका छन्…
काठमाडौँ, १४ मङ्सिर । लगातार घट्दै आएको सेयर बजार आज भने ४३.५२ अङ्कले बढेर लगानीकर्तालाई केही राहत मिलेको छ । लगातार घट्दै आएको र पटक पटक सर्किट ब्रेकसमेत लगाउनुपरेको बजार…
मत्स्यपालन नीति चाँडै आउने – मन्त्री चौधरी
काठमाडौँ, १३ मङ्सिर । चितवन, झुवानीका थारु महिलाको नृत्यसंगै भृकुटीमण्डपमा आयोजित माछा महोत्सव समापन गरिएको छ । महोत्सवमा सिपी, शङ्खे किरा (घुङ्गी) लगायत विभिन्नथरिका माछाको जिउँदो तथा तयारी परिकार बिक्रीमा…
पाल्पा, १३ मङ्सिर । सुन्तलाको उचित मूल्य नपाएपछि यहाँका किसान चिन्तित बनेका छन् । बजार मूल्य राम्रो नभएपछि उनीहरुले बोटबाट सुन्तला टिपेका छैनन् । साना सुन्तलाका दानाको थोक मूल्य प्रतिकिलो…
अोरालो लाग्ने क्रममा दुईपटक सर्किट ब्रेक लागिसकेको शेयरबजार पुन: सम्हालिँदै ४०.६८ अंकले उकालो लाग्यो
काठमाडौँ, १३ मङ्सिर । नेपाल स्टक एक्स्चेन्जले सेयर कारोबार अस्वाभाविक रुपमा घटेपछि आज पुनः सर्किट ब्रेक लगाएको छ । कारोबार सुरु भएको ४० मिनेटमा नै नेप्से परिसूचक ३ प्रतिशतभन्दा बढीले…
शेयर निष्काशनमा आस्बा प्रणाली माघ १ गतेबाट लागू हुने
काठमाडौँ, १३ मङ्सिर । नेपाल धितोपत्र बोर्डले शेयर निष्काशन प्रणालीलाई छिटो छरितो र पारदर्शी बनाउन आउँदो माघ १ गतेदेखि आस्बा (एप्लिकेसन सपोर्टेड बाई ब्लकेड एमाउण्ट) प्रणाली लागू गर्ने भएको छ…
पत्ताया सिटी (थाइल्यान्ड), १२ मङ्सिर । थाइल्यान्डमा झन्डै ९० प्रतिशत जनता बुद्धधर्म मान्छन् । यस मुलुकको प्रमुख आम्दानीको स्रोत पर्यटन व्यवसाय हो र यहाँ बर्सेनि दुई करोडभन्दा बढी विदेशी पर्यटक…
करोडौँको बेमौसमी आलु उत्पादन
भक्तपुर, १२ मङ्सिर । कोदो रोप्ने बारीमा बेमौसमी आलु फलाउँदै आएका भक्तपुर नगरकोट नगरपालिका सुडालका किसानले आलुको उचित मूल्य नपाएपछि मर्कामा परेका छन् । मकै र कोदो फल्ने बारीमा करोडाँैको…
नेप्सेले लगायो सर्किट ब्रेक, ६४.५५ अङ्कले घट्यो बजार
काठमाडौँ, १२ मङ्सिर । धितोपत्र बजारमा नेप्से परिसूचक अस्वाभाविक रुपमा घटेपछि नेपाल स्टक एक्चेन्जले सर्किट ब्रेक लगाउनु परेको थियो । कारोबार सुरु हुने बित्तिकै घट्न थालेको नेप्से परिसूचक एक हजार पाँच…
मेलम्ची, १२ मङ्सिर । धान उत्पादन राम्रो भएपछि यहाँका किसान उत्साहित भएका छन् । भूकम्प पछिकोे पुनः निर्माण भन्दा पाकेको धान धान भित्र्याउन लागेका कृषक सोचेजस्तो धान उत्पादन भएपछि खुसी…
पाल्पा, १२ मङ्सिर । अदुवाको मूल्य बर्सेनि ओरालो लाग्न थालेपछि यहाँका किसानको अदुवा खेतीप्रति आकर्षण घट्न थालेको छ । उचित मूल्य नपाउनु र अदुवा कुहिनुका साथै स्थानीय बजारमा खपत हुन…
दोहोरो कर असुली–ट्याक्टर व्यवसायी आन्दोलित
इटहरी, १२ मङ्सिर । मोरङ जिविसले खोलाजन्यवस्तु उत्खनन तथा निकासीमा दोहोरो मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गरिरहेका भन्दै सुनसरी र मोरङका ट्याक्टर व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । जिविसले दुई स्थानमा जाँच…
काठमाडौँ, १२ मङ्सिर । ‘साझा बसमा जो पनि चढ्दछ, किलिन्डरले दुई रुपियाँको टिकट काट्दछ.... हामी पनि हुइँकिउँ बुइनी साझा बसैमा !’ कलाकार हरिवंश आचार्यले मञ्चमा आफ्नो पुरानो गीत गाउँदा पुल्चोकस्थित…
यो साता नेप्से परिसूचक घटेर १५३४.०३ अंकमा पुग्यो
काठमाडौँ, १० मङ्सिर । यस साता नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा १५२ कम्पनीहरुको कारोबार भएको छ । जस अनुसार ३१३३६ कारोबारबाट पाँच अर्ब सात करोड सात लाख रुपैयाँ ६६ हजार बराबरका ७३…
सुरुङ्गा (झापा), ९ मङ्सिर । सरकारले बीउ उत्पादन राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरेर बीउ उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन खोजे पनि जिल्लाका कृषक आलुको बीउ खरिद गर्न भारत जान बाध्य छन् । अहिले…
स्कुसबाट बीस लाख आम्दानी
इलाम, ९ मङ्सिर । एउटै याममा स्कुस बेचेर सूर्योदय नगरपालिका– ९ गैरीगाउँका ४१ वर्षीय ताराकुमार तामाङले आम्दानी गर्नुभएको छ । यस वर्ष उहाँले एक हजार ४०० क्विन्टल स्कुस बिक्री गर्नुभएको…
नौ सय क्विन्टल जडीबुटी निकासी
बैतडी, ९ मङ्सिर । जिल्लाबाट आव २०७२/७३ मा ९७९ क्विन्टल जडीबुटी निकासी भएको छ । जिल्ला वन कार्यालयका अनुसार विभिन्न स्थानबाट सो परिमाणको जडीबुटी निकासी भएको हो । गत आवमा…
तीन उद्यमी सम्मानित
बाबियाचौर (म्याग्दी), ९ मङ्सिर । प्रथम उद्योग दिवसका अवसरमा बिहीबार यहाँका तीन उद्यमी सम्मानित भएका छन् । जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, उद्योग वाणिज्य सङ्घ र नेपाल घरेलु…
बागलुङ, ८ मङ्सिर । चाडवाड सकिएसँगै सुस्ताएको बजार केही दिनको लागि जुर्मुराएको छ । बिहीबारदेखि सुरु भएको निवृत्तिभरण क्याम्पका रकाण सदरमुकाममा चहलपहल बढेको छ । गाउँ–गाउँबाट दैनिक सयौं भूतपूर्व भारतीय…
शेयरबजार ४२ अंकले घटेर १५४० विन्दुमा पुग्यो
काठमाडाैं, ८ मङ्सिर । अाज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा ४२.४६ अंकले घटेर १५४०.०१ बिन्दुमा पुगेको छ । कुल ६६७५ कारोवारबाट १५ लाख ३८ हजार ७८८ कित्ता शेयर किनबेच भई १ अर्ब ७ करोड ४९ लाख ६३ हजार ३६६ रुपैयाको कारोवार…
सुदूरपश्चिममा धान उत्पादन आठ प्रतिशतले वृद्धि
भीमदत्तनगर, ८ मङ्सिर । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा सुदूरपश्चिमा आठ प्रतिशतले धान उत्पादनमा वृद्धि भएको छ । सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय कृषि विकास निर्देशनालय दिपायलका अनुसार समयमा धान रोपाइँ र वर्षा भएका…
भद्रपुर, ८ मङ्सिर । झापामा यस वर्ष धानको उत्पादन करिब १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका कृषि प्राविधिक शालिकराम भट्टराईका अनुसार रोग कीराको प्रकोपको कमी तथा…
उद्यमशीलता तथा वातावरणमैत्री सीप हस्तान्तरण
पोखरा, ८ मङ्सिर । पर्यटकीय नगरी पोखराको फेवातालको उपल्लो तटीय क्षेत्रस्थित ढिकुरपोखरी गाविसका महिलालाई दुईदिने उद्यमशीलता तथा वातावरणमैत्री सीप हस्तान्तरण गरिएको छ । रेडियो जननीको आयोजित एवम् जिविस कास्कीको आर्थिक…
राजविराज, ८ मङ्सिर । सप्तरीको सदरमुकाम राजविराजमा विहिबारदेखि यहाँ राजविराज महोत्सव हुने भएको छ । कात्तिक २६ देखि मङ्सिर ६ गतेसम्म हुने भनिएको महोत्सव केही दिनअगाडि प्राविधिक कारण देखाउँदै स्थगित…
शेयरबजार २३.८२ अंकले घटेर सबै समूह अोरालो लागी राताम्मै
काठमाडाैं, ७ मङ्सिर । अाज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा २३.८२ अंकले घटेर १५८२.४७ बिन्दुमा पुगेको छ । कुल ५९१८ कारोवारबाट १२ लाख ६९ हजार ६०० कित्ता शेयर किनबेच भई ८२ करोड ८२ लाख ५८ हजार ९६२ रुपैयाको कारोवार भएको छ ।…
डडेल्धुरा, ७ मङ्सिर । गहँुबाली लगाउने समय भए पनि जिल्लाका किसान अन्नबाली लगाउन छोडेर तरकारी खेतीतर्फ उन्मुख भएका छन् । अन्नबाली लगाउँदा खान नपुग्ने जमिनमा तरकारी लगाउँदा वर्ष दिनलाई पुग्ने…
बजार नपाउँदा किसान चिन्तित
बेँसीसहर (लमजुङ), ७ मङ्सिर । बजार अभावका कारण यहाँका बङ्गुरपालक किसान चिन्तित भएका छन् । सदरमुकामसहित जिल्लाका विभिन्न स्थानमा बङ्गुरका बच्चा तथा मासुको खपत हुन नसक्दा किसान मारका परेका हुन्…
भरतपुरमा सिटी बस भित्रियो
चितवन, ७ मङ्सिर । भरतपुर उपमहानगरपालिकाको सहरी क्षेत्रमा अत्याधुनिक सुविधासहितको सिटी बस भित्रिएका छन् । ‘ग्लोबल मेट्रो सिटी बस प्रालि’का नामबाट उपमहानगरपालिकाको सहरी क्षेत्रमा र गैँडाकोटको विजय चोकसम्म बस सञ्चालन…
शेयरबजारमा उच्च गिरावट, ५८ अंकको गिरावट
काठमाडाैं, ५ मङ्सिर । अाज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा ५८.४६ अंकले घटेर १५९९.६२ बिन्दुमा पुगेको छ । कुल ६७७६ कारोवारबाट १५ लाख ३२ हजार ५२८ कित्ता शेयर किनबेच भई १ अर्ब २४ करोड ५१ लाख ७३ हजार १५७ रुपैयाको कारोवार…
बेनी (म्याग्दी), ३ मङ्सिर । कुहुँ गाविस–५ पैयुँपाटाका दिलबहादुर किसान पुशपालन र कृषि पेसाबाट मासिक रु एक लाखसम्म कमाइ गर्न थालेका छन् । मलेसिया, कतार र दुबईमा एक दशकसम्म काम…
कम्पनीले वितरण गर्ने लाभांश ५ वर्षमा फिर्ता नलिए कोषमा जम्मा हुने
काठमाडौँ, ३ मङ्सिर । पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले वितरण गर्ने लाभांश ५ वर्षसम्म लिन नगएमा लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा जम्मा गरिने भएको छ । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले नेप्से मार्फत सबै सूचीकृत कम्पनीलाई…
पर्वत महोत्सवको तयारी सुरु
फलेवास (पर्वत), ३ मङ्सिर । पर्वत उद्योग वाणिज्य सङ्घले आगामी माघ १३ देखि २२ गतेसम्म आयोजना गर्ने पाँचाँै पर्वत महोत्सवको तयारी सुरु गरेको छ । करिब साढे २ महिना बाँकी…
करिडोर क्षेत्रका चामल उद्योग धराशायी
पथरी (मोरङ), २ मङ्सिर । मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोर क्षेत्रका चामल उद्योग धराशायी भएका छन् । नेपाली व्यापारीले भारतबाट चामल आयात गर्न थालेपछि यहाँका चामल उद्योग धराशायी भएका हुन् । चामल…
नेप्से दोहोरो अङ्क (४०.८२) ले ओरालो
काठमाडौँ, २ मङ्सिर । धितोपत्र बजारमा नेप्से परिसूचक आज दोहोरो अङ्कले ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका अनुसार नेप्से परिसूचक ४० दशमलव ३२ अङ्कले ओरालो लागेर एक हजार ६५८…
माछापालनबाट वार्षिक दश लाख आम्दानी
कञ्चनपुर, २ मङ्सिर । बेलौरी नगरपालिका–२ का वन्धुराम चौधरीले वार्षिक ५० क्विन्टल माछा बिक्री गर्दै आउनुभएको छ । दुई दशकदेखि माछापालन व्यवसायमा संलग्न चौधरीले सुरुमा रु एक लाख लगानी गरी…
पोखरा, २ मङ्सिर । मुलुकको मेचीदेखि महाकालीसम्मका सडकमा बस सञ्चालन गरेर यात्रुलाई सुविधा प्रदान गर्दै आएको पृथ्वीराजमार्ग बस व्यवसायी समितिमा हालसम्म व्यवसायीको रु पाँच अर्बभन्दा वढी लगानी भइसकेको छ ।…
शेयरबजार ३ अंकले घट्यो, कारोवार रकम भने १ अर्बभन्दा माथि
काठमाडाैं, १ मंसिर । अाज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा ३.०१ अंकले घटेर १६९८.९० बिन्दुमा पुगेको छ । कुल ४६९१ कारोवारबाट १० लाख ७२७ कित्ता शेयर किनबेच भई १ अर्ब १९ करोड ५४ लाख ७८ हजार ५२४ रुपैयाको कारोवार भएको…
नेपाली बजारमा LENTO
काठमाडाैँ, १ मंसिर । बतास अर्गनाईजेसनको भातृ संस्था त्रिथुङ्गा ट्रेडिङ्ग कन्सर्न प्रा. लि. ले आफ्नो ब्यापारलाई बिस्तार गर्ने क्रममा Lento Industries Pvt.ltd, India बाट उत्पादित LENTO ब्रान्डका Solar Inverter / Street…
बागलुङ, १ मङ्सिर । बागलुङदेखि काठमाडौँसम्म पर्यटक बस सञ्चालनमा आएको छ । यात्रुलाई स्तरीय सेवा दिन धवलागिरि अञ्चल यातायात बस व्यवसायी समितिले बस सेवा सुरु गरेको हो । प्रमुख जिल्ला…
बारामा एक अर्बको धान उत्पादन
कलैया, १ मङ्सिर । यस वर्ष जिल्लामा रु एक अर्ब २१ करोड ५६ लाख ५४ हजार बराबरको ५५ हजार दुई सय ५७ मेट्रिक टन भदैया धान उत्पादन भएको छ ।…
उकालो लाग्न थालिसकेको शेयरबजार ४.३७ अंकले फेरी अोरालो लाग्यो
काठमाडाैं, ३० कात्तिक । अाज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा ४.३७ अंकले घटेर १७०१.९१ बिन्दुमा पुगेको छ । कुल ४४९० कारोवारबाट ९ लाख ४६ हजार ४११ कित्ता शेयर किनबेच भई ८० करोड ९८ लाख ६१ हजार १८ रुपैयाको कारोवार…
पथरी (मोरङ), ३० कात्तिक । दिन प्रतिदिन नेपाली युवा विदेसिइरहेका छन्, आफ्नै देशमा रहेर परिश्रम गर्ने कमै हुन्छन् । त्यसमा पनि स्वदेशमा नै मूर्ति बनाएर जीविका चलाउने त नगन्य नै…
रत्ननगर (चितवन), ३० कात्तिक । भरतपुर आसपास क्षेत्रमा सिञ्चित जमिन घट्दै गएको पाइएको छ । बढ्दो सहरिकरण र जग्गा प्लटिङका कारण खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएको हो । नारायणी लिफ्ट तथा…
काठमाडाैं, २९ कात्तिक । अाज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा ६.२८ अंकले बढेर १७०६.२८ बिन्दुमा पुगेको छ । कुल ४१७८ कारोवारबाट ८ लाख ५६ हजार ६८८ कित्ता शेयर किनबेच भई ७८ करोड ९ लाख १ हजार ११६ रुपैयाको कारोवार भएको छ ।…
चार रुटमा गुड्दै छन् साझाका बस
काठमाडौँ, २९ कात्तिक । साझा यातायातले उपत्यकाभित्र चार वटा बाटो (रुट)मा नयाँ बस गुडाउने भएको छ । साझाले भारतबाट खरिद गरेर ल्याएका ३० वटा नयाँ बस सञ्चालनका लागि यातायात व्यवस्था…
सुन्तला उत्पादनमा कमी आएपछि किसान निराश
म्याग्दी, २९ कात्तिक । सुन्तला उत्पादनमा भारी मात्रामा कमी आएपछि म्याग्दीका किसान निराश भएका छन् । फल लाग्ने बेलामा पर्याप्त पानी नपरेका कारण सुन्तला उत्पादनमा कमी आएको कृषकको भनाइ छ…
अध्यक्ष ओलीद्वारा एनएमसी डेरीको उदघाटन
सुरुङ्गा (झापा), २८ कात्तिक । झापाको मेचीनगर–१३ स्थित जोरसिमल नजिकै झन्डै १३ करोड रुपैयाँको लागतमा एनएमसी डेरी उद्योग सञ्चालनमा आएको छ । नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड (एनएमसी) झापाको पूर्ण…
बन्दले छोएन सेयर बजारलाई, करिब तीन अङ्कले बढ्यो
काठमाडौँ, २८ कात्तिक । नेकपा (माओवादी) को बन्दको कारण सवारी साधन सामान्य रुपमा चले पनि धितोपत्र बजारमा भने त्यसले आज कुनै प्रभाव नपारेको पाइएको छ । नेपाल स्टक एक्चेन्जका अनुसार…
बेँसिसहर (लमजुङ), २६ कात्तिक । अन्नपूर्ण पद मार्गमा आउने पर्यटकको आगमनमा वृद्धि भएपछि जिल्लाका पर्यटन व्यवसायी उत्साही भएका छन् । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष पर्यटक आगमनमा वृद्धि भएको छ…
बनेपा, २६ कात्तिक । अलैँचीको मूल्यमा ४० प्रतिशत तथा उत्पादनमा २० प्रतिशतले कमी आएपछि काभ्रेपलाञ्चोकका किसान निराश भएका छन् । खडेरीका कारण उत्पादन घटेको र मूल्यमा समेत कमी आएपछि अलैँची…
डडेल्धुरा, २६ कात्तिक । जिल्लामा सुन्तला उत्पादनमा कमी आएको छ । बर्सेनि कृषकले सुन्तलाका बिरुवा लगाउँदै आएका भए पनि रोगका कारण बोट सुक्दै जाने, भएका बोटमा पनि सानो दाना फल्ने…
धनगढी, २६ कात्तिक । भारतबाट तीन दिनअघि आफ्नो घर डडेल्धुरा जान भनी फर्किएका करन अवस्थी भारु नचल्ने भएपछि यहाँ अलपत्र पर्नुभएको छ । भारतको हैदरावादमा काम गर्दै आएका डडेल्धुराको दामल…
भारतीय नोट नसाटिँदा समस्या
बैतडी, २६ कात्तिक । भारत सरकारले पाँचसय र एक हजारका भारतीय रुपैयाँका नोट नचल्ने निर्णय गरेपछि सुदूरपश्चिमका भारतसँग सीमा जोडिएका नागरिक समस्यामा परेका छन् । भारत सरकारको एक्कासि आएको निर्णयबाट…
श्रम व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड
बुटवल, २६ कात्तिक । यस क्षेत्रमा बढ्दो औद्योगिकीकरणमा कमी आउन नदिन श्रम व्यवस्थापनलाई विशेष ख्याल राख्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । रुपन्देही र आसपासमा बढ्दो औद्योगिकीकरणमा कमी आउन नदिन श्रमिकलाई…
काठमाडौँ, २५ कात्तिक । धितोपत्र बजारमा नेप्से परिसूचक सामान्य रुपमा वृद्धि भएको छ । लगातार ओरालो लाग्दै आएको बजारमा आज ० दशमलव ३१ अङ्कले वृद्धि भएर एक हजार ६९७ बिन्दुमा…
गाईघाट (उदयपुर), २५ कात्तिक । जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रका किसानले यस वर्ष दसैँ, तिहार र छठपर्वको अवसरमा केरा बिक्रीबाट मनग्य आम्दानी गरेका छन् । पूर्वी क्षेत्रका तपेश्वरी, सुन्दपुर, हँडिया र जोगीदहका…
पर्यटकको आगमनमा वृद्धि
रसुवा, २५ कात्तिक । जिल्लामा आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा क्रमशः वृद्धि हँुदै गएको छ । लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत युवराज रेग्मीका अनुसार चालु आवको हालसम्म दुई हजार ६८० पर्यटकले…
भारु प्रतिबन्धको मारमा बिरामी
भीमदत्तनगर, २४ कात्तिक । भारतले मङ्गलबारको मध्यरातदेखि लागू हुने गरी भारु ५०० र एक हजारका नोट बजारमा चलाउन रोक लगाएपछि आज बिहानैदेखि त्यसको असर सिमान्त सहर भीमदत्तनगर र पश्चिमी नाका…
भारु पाँचसय र हजारको रोकले सीमावर्ती बजारमा प्रभाव
विराटनगर, २४ कात्तिक । भारतले गएरातिदेखि आफ्ना पाँचसय÷हजारको नोटको चलनचल्तीमा रोक लगाएपछि दुबै मुलुकका सीमावर्ती बजारमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । सीमावर्ती भारतीय जोगबनी बजारमा पाँचसय÷हजार नोटको चलनचल्तीमा रोक…
शेयरबजार निरन्तर अोरालो तर्फ, १७०० विन्दुभन्दा तल
काठमाडाैं, २४ कात्तिक । अाज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा २७.६३ अंकले घटेर १६९६.८६ बिन्दुमा पुगेको छ । कुल ४५१७ कारोवारबाट १० लाख २२ हजार ६९२ कित्ता शेयर किनबेच भई ६८ करोड ७३ लाख ५० हजार ६१३ रुपैयाको कारोवार भएको छ…
लोक्ताबाट जापानी नोट बन्ने भएपछि स्थानीयवासी हर्षित
पाँचथर, २४ कात्तिक । पूर्वी पहाडी जिल्ला पाँचथरका गाउँगाउँमा खेर गइरहेको अर्गेलीको लोक्ता जापानी नोट र छाला बनाउन प्रयोग हुने भएपछि कृषक हर्षित भएका छन् । नब्बे रुपैयाँ प्रतिकेजीमा बिक्री…
भाटभटेनी कम्प्लेक्समा सिलबन्दी
भक्तपुर, २३ कात्तिक । नगरपालिकाको नियम र मापदण्ड विपरीत भवन निर्माण सुरु गरेको भन्दै मध्यपुरथिमि नगरपालिकाले निर्माणाधीन ‘भाटभटेनी हाइपर मार्केट प्रालि’मा आज सिलबन्दी गरेको छ । मध्यपुरथिमि नगरपालिका– ८ र…
सबै सूचक अोरालो लागेर राताम्मै बनेको नेप्से २४.६३ अंकले घट्यो
काठमाडाैं, २३ कात्तिक । अाज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा २४.६३ अंकले घटेर १७२४.४९ बिन्दुमा पुगेको छ । कुल ४५३१ कारोवारबाट १० लाख ३८ हजार ५४७ कित्ता शेयर किनबेच भई ७६ करोड ३७ लाख ९६ हजार ४४७ रुपैयाको कारोवार भएको छ ।…
पोखरा, २३ कात्तिक । नेपाल हवाई खेलकुद संस्था पोखराले आज प्याराग्लाइडिङका सबै उडान सेवा बन्द गरेको छ । गत शुक्रबार स्याङ्जाको स्वरेकमा प्याराग्लाइडिङ उडान प्रशिक्षणका क्रममा दुर्घटनामा परी शैलेश पहारीको…
काठमाडौँ, २३ कात्तिक । साझा प्रकाशनले एक दशकपछि लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी आगामी तीन महिनाभित्र सार्वजनिक गर्ने भएको छ । प्रकाशनले आव २०६२/६३ देखि २०७२/७३ सम्मको लेखापरीक्षण पूरा गरी तीन महिनाभित्र…
दस हजार मेट्रिक टन सुपारी गोदाममै
काँकडभिट्टा (झापा), २३ कात्तिक । दुई वर्षदेखि किसानले उत्पादन गरेको करिब दस हजार मेट्रिक टन सुपारी गोदाममै थन्किएको छ । जिल्लामा उत्पादित सुपारीको माग बङ्गलादेशमा भएपनि सरकारले निर्यात खुला नगरिदिँदा…
मेघौली विमानस्थल पुनः सञ्चालनमा
रत्ननगर (चितवन), २३ कात्तिक । लामो समयदेखि बन्द रहेको चितवनको दोस्रो विमानस्थल मेघौली विमानस्थल पुनः सञ्चालनमा आएको छ । विसं २०६७ देखि बन्द रहेको विमानस्थलमा अहिले पुनः विमान अवतरण हुन…
तेह्र बिन्दुले घट्यो सेयर बजार
काठमाडौँ, २२ कात्तिक । धितोपत्र बजारमा सेयरको मूल्य घट्ने क्रम जारी रहेको छ । दीपावली र छठपर्वपछि खुलेको बजारमा आज १३.०९ बिन्दुले नेप्से घटेर एक हजार ७४९ बिन्दुमा झरेको हो…
‘मेहनत गरे स्वदेशमै पनि कमाउन सकिन्छ’
पोखरा, २२ कात्तिक । मेहनत गरे स्वदेशमै पनि कमाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण कास्कीको लेखनाथ नगरपालिका–१७ खैरेनीका नीलकण्ठ पौडेलले गर्नु भएको गाईपालन व्यवसाय नै एक उदाहरण बनेको छ । उहाँले दूध…
मूल्य घट्दा किसानलाई चिन्ता
इलाम, १८ कात्तिक । चिराइतोको मूल्य घट्न थालेपछि किसान चिन्तित भएका छन् । आलु, मकै, गहुँ जस्ता खाद्यान्न बाली मासेर चिराइतो सुरु गरेका किसान बर्सेनि चिराइतोको मूल्य ओरालो लागेपछि चिन्तित…
चितवन, १८ कात्तिक । नेपालमा विगत एक दशकयता वैधानिक रुपमा बिक्री गर्नका लागि छिमेकी मुलुकबाट अण्डा आयात गरिएको छैन । देशको उत्पादनले माग धानिरहेको व्यवसायीले बताइरहेका छन् । सरकार औपचारिक…
पाल्पा, १८ कात्तिक । पाल्पाको प्रमुख नगदेबाली अदुवाले मूल्य नपाएपछि यहाँका किसान चिन्तित बनेका छन् । दसँै–तिहारका बेला अदुवाको राम्रो बजार मूल्यको खोजीमा रहेका किसानले अदुवाको मूल्य ओरालो लागेपछि झनै…
वैद्यखानाका औषधि आधुनिक शैलीमा उत्पादन गर्नुपर्ने
काठमाडौँ, १२ कात्तिक । सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिले उत्पादन गर्ने औषधिलाई आधुनिकतासँगै परिमार्जन गर्न नसक्दा बजारमा लोकप्रिय बनाउन सकिएको छैन । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा ८० प्रतिशत जनताले आयुर्वेद औषधिको…
काठमाडौँ, १२ कात्तिक । दशौँ गोदावरी फूल प्रतियोगितात्मक प्रदर्शनीमा रु २५ लाखको कारोबार भएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयको सहयोगमा फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालले यही १० गतेदखि जावलाखेलको फुटबल मैदानमा ‘रोपेर…
खिलुङ कालिका एग्रोफार्ममा दैनिक एक लाख अन्डा उत्पादन
वालिङ, १२ कात्तिक । स्याङ्जाको भिरकोट नगरपालिका–६ ठाडाखेतमा रहेको खिलुङ कालिका एग्रोफार्मले दैनिक एक लाख अन्डा उत्पादन गर्दै आएको छ । करिब एक वर्षअघि यहाँका सात युवकले करिब ५० करोड…
जोन डिलर कम्पनीका ट्र्याक्टर लहानबजारमा
लहान, १२ कात्तिक । किसानलाई लक्ष्य गरी जोन डिलर कम्पनीले ५०३६ डी मोडलका नयाँ ट्र्याक्टर लहानबजारमा ल्याएको छ । लहानबजारको मेनरोड छेउमा रहेको विवेक अटोमोबाइल्स प्रालिले उक्त ट्र्याक्टरको बिक्री वितरण…
टेलिकमको वाइमेक्स सेवा ७५ जिल्लामा विस्तार
काठमाडौँ, ११ कात्तिक । नेपाल टेलिकमले वाइमेक्स प्रविधिको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवाको पहुँच ७५ वटै जिल्लामा विस्तार गरेको छ । उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने क्रममा कम्पनीले यसअघि नै ७४…
काठमाडाैं, ११ कार्तिक । अाज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा ६.२५ अंकले बढेर १७५९.७१ बिन्दुमा पुगेको छ । कुल ४५३२ कारोवारबाट १० लाख १० हजार ७२३ कित्ता शेयर किनबेच भई ६९ करोड ६४ लाख २७ हजार ४६५ रुपैयाको कारोवार भएको छ ।…
रुपन्देहीको नहरपुरमा नेपाल टेलिकमको नयाँ एक्सचेन्ज सञ्चालनमा
रुपन्देही, ११ कात्तिक । रुपन्देही जिल्लाको नहरपुरमा नेपाल टेलिकमको नयाँ एक्सचेन्ज सञ्चालनमा आएको छ । हिजो (२०७३।०७।१० गते) आयोजित एक कार्यक्रमका बीच माननीय सूचना तथा सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्र कुमार कार्की (राम…
धर्मपथमा चार सय गाडी अट्ने स्वचालित कार पार्किङ बन्दै
काठमाडौँ, ११ कात्तिक । काठमाडौँको मुख्य व्यापारिक केन्द्र मानिने नयाँसडकमा एकै समयमा ४०० गाडी अट्ने स्वचालित कार पार्किङ बन्ने भएको छ । व्यापारिक केन्द्र नयाँसडक क्षेत्रको भीड तथा पार्किङको समस्यालाई…
सेमजोङ (धादिङ), ११ कात्तिक । सेमजोङका केही पढेलेखेका किशोरीबाहेक अन्यलाई महिनावारी हँुदा सेनेटरी प्याड प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी थिएन । अहिले समय बदलिएको छ । गाउँका धेरै महिला महिनावारी हुँदा…
ललितपुर, १० कात्तिक । दसौँ गोदावरी प्रतियोगात्मक प्रदर्शनी जावलाखेलमा आजदेखि सुरु भएको छ । फ्लोरिकल्चर एसोसियसन नेपालले आयोजना गरेको उक्त प्रदर्शनी चार दिनसम्म चल्नेछ । प्रदर्शनी करिब ३० हजारले अवलोकन…
नवलपरासी, १० कात्तिक । जिल्लाका उखु किसानले यस वर्ष उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल रु ५६१ निर्धारण हुनुपर्ने माग गरेका छन् । चिनी मिल सञ्चालन हुनु अगावै सरकारले मूल्य निर्धारण गरिदिनुपर्ने किसानको…
भक्तपुर, १० कात्तिक । भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले स्थापनाको ५० वर्ष पुगेको अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला आयोजना गर्ने भएको छ । आगामी मङ्सिर २४ गतेदेखि २९ गतेसम्म भक्तपुर नगरपालिका–१७ स्थित…
शेयरबजार २.४६ अंकले बढ्यो, बैंक र जलविद्युत समूह भने अोरालो लाग्यो
काठमाडाैं, १० कार्तिक । अाज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा २.४६ अंकले बढेर १७५३.४६ बिन्दुमा पुगेको छ । कुल ४५७० कारोवारबाट १० लाख ५४ हजार १६३ कित्ता शेयर किनबेच भई ८१ करोड ८२ लाख ७ हजार ३४९ रुपैयाको कारोवार भएको छ ।…
धादिङमा नयाँ पर्यटकीय पदमार्ग खुल्यो
गुम्दी, (धादिङ) १० कात्तिक । धादिङ जिल्लाको उत्तरी भेगमा पर्ने रुवी भ्याली क्षेत्रअन्तर्गत हिमालयन स्काइ ट्रेल (तीनसुरे पदमार्ग) सञ्चालनमा आएको छ । धादिङको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने समुद्री सतहदेखि एक हजार…
पोखरा, १० कात्तिक । पर्वतीय पर्यटनमा पछिल्लो समय प्याराग्लाइडिङ प्रति स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटककोे आकर्षण बढ्न थालेको छ । पर्वतीय पर्यटनको गन्तब्य बन्दै गएको नेपालमा भ्रमणमा आउने अधिकांश पर्यटक प्याराग्लाइडिङप्रति…
बनेपा, १० कात्तिक । धुलिखेलमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन बढ्न थालेको छ । क्षेत्रीय होटेल एसोसिएसन (हान)धुलिखेलका अध्यक्ष प्रेमकण्ठ मकाजु श्रेष्ठका अनुसार काठमाडौँ आएका आधिकांश बाह्य पर्यटक यहाँ आउने…
तिहारअघि शेयरबजार उकालो नलाग्ने संकेत, नेप्से १७.८९ अंकले घट्यो
काठमाडाैं, ९ कार्तिक । अाज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा १७.८९ अंकले घटेर १७५१.०० बिन्दुमा पुगेको छ । कुल ४५५३ कारोवारबाट ७ लाख ६४ हजार ९२४ कित्ता शेयर किनबेच भई ७१ करोड ३२ लाख ३२ हजार ५०६ रुपैयाको कारोवार भएको छ । साताको…
भक्तपुर, ९ कात्तिक । दोस्रो महान् चाड तिहार नजिकिएपछि भक्तपुरमा माटोका भाँडा बनाउँदै आएका कुमाले समुदायलाई यतिखेर भ्याइनभ्याई छ । मागअनुसारको पाला बनाउन भक्तपुरको बोलाछे, तालाको, च्यामासिंह, जगाते, सूर्यविनायक, कमलविनायक,…
पोखरा, ९ कात्तिक । कास्कीमा यस वर्ष धान उत्पादनमा पाँच प्रतिशतले वृद्धि हुने भएको छ । मौसम अनुकूल, धान रोप्ने बेलामा पर्याप्त रासायनिक मलको व्यवस्था र बाढी पहिरोले धानबालीलाई क्षति…
शेयरबजार अोरालो लाग्ने क्रम जारी, फाइनान्स बाहेक सबै सूचक रातो
काठमाडाैं, ८ कार्तिक । अाज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा १३.५० अंकले घटेर १७६८.८९ बिन्दुमा पुगेको छ । कुल ४७९७ कारोवारबाट १० लाख २३ हजार २८५ कित्ता शेयर किनबेच भई ९२ करोड ८९ लाख ६२ हजार ६१७ रुपैयाको कारोवार भएको छ ।…
म्याग्दीबाट एकै वर्षमा ४५ करोडको आलु निकासी
म्याग्दी, ८ कात्तिक । पहाडी जिल्ला म्याग्दीबाट एक वर्षमा रु ४५ करोडको आलु निकासी भएको छ । आव २०७२/७३ मा जिल्लामा उत्पादन भएको आलुमध्ये ११ हजार ७६१ मेट्रिक टन आलु…
भक्तपुर, ८ कात्तिक । बैदेशिक रोजगारबाट सन्तुष्ट नभएका नगरकोट नगरपालिका ताथली–२ बालाटोलका जयराम बाला नेपाल फर्केपछि गरेको फूलखेतीबाट मनग्य आम्दानी गर्न थाल्नुभएको छ । नजिकिँदै गरेको तिहारका लागि आवश्यक पर्ने…
नेपालगन्ज, ८ कात्तिक । विगत चार वर्षको अवधिमा यहाँका होटल व्यवसायमा लगानी बढेको छ । मध्यपश्चिमाञ्चलको व्यापारिक सहर नेपालगन्जको होटल तथा पर्यटन व्यवसायमा पछिल्लो आँकडाअनुसार रु पाँच अर्बभन्दा बढी लगानी…
काठमाडौँ, ८ कात्तिक । नजिकँदो तिहार पर्वका लागि यस वर्ष भारतबाट रु ६० लाख मूल्य बराबरको सयपत्री फूलको माला आयात गर्ने योजना छ । गत बर्ष तिहारमा रु. एक लाख…
पोखरा, ८ कात्तिक । ‘जाऔँ खाऔँ अनि रामबजारमै रमाऔँ’ भन्ने नाराका साथ आइतबारदेखि पोखराको रामबजारमा रामबजार महोत्सव सुरु भएको छ । कला र संस्कृतिको प्रवर्द्धन एवम् जगेर्ना गरी आन्तरिक एवम्…
काठमाडौँ, ७ कात्तिक । नेपाल टेलिकमले आगामी पुसदेखि ‘फोर जी’ सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट ‘फोर जी’ सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएपछि टेलिकमले १८ सय मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी…
साताको पहिलो दिन शेयरबजार १२ अंकले अोरालो लाग्यो
काठमाडाैं, ७ कार्तिक । अाज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा १२.०८ अंकले घटेर १७८२.३९ बिन्दुमा पुगेको छ । कुल ५१७५ कारोवारबाट १० लाख ८१ हजार ७ कित्ता शेयर किनबेच भई ९६ करोड ४५ लाख ९९ हजार ३९३ रुपैयाको कारोवार भएको छ । साताको…
जाजरकोट, ७ कात्तिक । जाजरकोट धेरै प्रकारका जडीबुटी पाइने जिल्लामा पर्दछ । विगत ५ वर्षमा विभिन्न ६१ प्रकारका जडीबुटी सङ्कलन तथा बिक्री–वितरणका लागि अनुमति दिइएको छ । जिल्ला वन कार्यालय…
पम्प सञ्चालक पक्राउ, म्याद थप
गौशाला, ५ कात्तिक । महोत्तरी प्रहरीले बुधबार जिल्लाको गौशाला नगरपालिका–७ स्थित एक पेट्रोल पम्प सञ्चालकलाई पेट्रोल पम्पमै पेट्रोल ट्याङ्कीमै मट्टितेल मिसाउँदै गरेको अवस्थामा पक्राउ गरेकोमा बिहिबार म्याद थप गरेको छ…
‘बिदेसिए भर छैन, गाई पाले दिनहुँ आम्दानी’
उर्लाबारी (मोरङ), ४ कात्तिक । करिब छ वर्षअघि यहाँका विज्ञान ढुङ्गानालाई परिवार, आफन्तलगायत धेरैले आफ्नो ‘करिअर’ निर्माणका लागि बिदेसिन सुझाएका थिए । उच्च शिक्षा हासिल गरेपछि विभिन्न व्यवसायमा हात हालेर…
निरन्तर अोरालो लागेको शेयरबजार अाज उकालो लागेकाे छ
काठमाडाैं, ४ कार्तिक । अाज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा ६.५८ अंकले बढेर १७९४.४७ बिन्दुमा पुगेको छ । कुल ३७९० कारोवारबाट ७ लाख ८७ हजार ८५३ कित्ता शेयर किनबेच भई ७० करोड ३३ लाख ९९ हजार ८४० रुपैयाको कारोवार भएको छ । चार…
अण्डामा आत्मनिर्भर घोषणाको तयारी
काठमाडौँ, ४ कात्तिक । पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मुलुक अण्डामा आत्मनिर्भर भएको घोषणाको तयारी गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समयमा देशका विभिन्न ६२ जिल्लामा एक अर्ब २० करोड अण्डा वार्षिक…
काठमाडौँ, ४ कात्तिक । अबको दुई हप्तापछि काठमाडौँ उपत्यकामा साझाका थप तीस बस सञ्चालनमा आउने भएका छन् । काठमाडौँ महानगरपालिकाको रु १० करोड लगानीमा साझाले पछिल्लो समय उपत्यकाका लागि थप…
गैरआवासीय नेपालीले शेयर बजारमा प्रत्यक्ष लगानी गर्न पाउने
काठमाडौं, ४ कार्तिक । गैरआवासीय नेपालीले नेपालको शेयर बजारमा प्रत्यक्ष लगानी गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले यसका लागि कार्यविधि बनाउन लागेको छ । गैरआवासीय नेपालीले दोश्रो बजारमा…
पोखरा, ३ कात्तिक । पोखरा उपमहानगरपालिका– १७ बिरौटाकी मन्जिता भण्डारीले भाडामा लिएको ६ रोपनी जग्गामा लगाएकोे फूलखेतीबाट मनग्य आम्दानी गर्दैआउनुभएको छ । असोज महिनाको दोस्रो सातायता उहाँले फूल बिक्रीबाट रु…
पोखरा, ३ कात्तिक । जाअौँ खाऔँं अनि रामबजारमै रमाऔँं’ नाराका साथ पोखराको रामबजारमा यही कात्तिक ७ देखि १३ गतेसम्म रामबजार महोत्सव हुने भएको छ । कला संस्कृतिको जगेर्ना तथा आन्तरिक…
मुगु ३ कात्तिक । रारा ताल हेर्न आउने आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि भएपछि यहाँका होटल भरिभराउ छन् । रारा घुम्न हवाई तथा स्थलमार्गबाट सहज भएपछि आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको…
शेयरबजार अोरालो लाग्ने क्रम जारी
काठमाडाैं, ३ कार्तिक । अाज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा ४.८४ अंकले घटेर १७८७.८९ बिन्दुमा पुगेको छ । कुल ३२९९ कारोवारबाट ८ लाख ५० हजार २३४ कित्ता शेयर किनबेच भई ५६ करोड ४६ लाख २ हजार ९७९ रुपैयाको कारोवार भएको छ ।…
रसुवा (धुन्चे), ३ कात्तिक । नेपाल भित्रिने चिनियाँ पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक प्रमेश विष्टका अनुसार गत चैत महिनायता २१ हजार १६ चिनियाँ पर्यटक…
भोजपुर, ३ कात्तिक । अलैँचीको किनबेच सुरु हुन लाग्दा भाउ नपाएर भोजपुरका किसान चिन्तित बनेका छन् । खोल्साको कालो सुन भनेर चिनिने अलैँची गत वर्ष प्रतिमन ८० देखि ८५ हजार…
शेयरबजार लगातार तेस्रो दिन पनि अोरालो लाग्यो
काठमाडाैं, २ कार्तिक । अाज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा ०.६३ अंकले घटेर १७९२.७३ बिन्दुमा पुगेको छ । कुल ३१९० कारोवारबाट ७ लाख ४०५ कित्ता शेयर किनबेच भई ५० करोड ८६ लाख ६७ हजार ०९१ रुपैयाको कारोवार भएको छ । दशैंपछि खुलेको…
काठमाडौँ, १ कात्तिक । मुख्य पर्यटकीय (याम) मौसममा पनि ठमेलका अधिकांश रेष्टुरेन्ट सुनसान बनेका छन् । विगतका वर्षमा ठमेलका सबै रेस्टुरेन्ट एन्ड बार भरिभराउ हुने गरेकामा योपटक पर्यटकको सङ्ख्या पातलिएका…
दशैंपछि खुलेको दोस्रो दिन पनि शेयरबजारमा सुधार अाउन सकेन
काठमाडाैं, १ कार्तिक । अाज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा १०.३८ अंकले घटेर १७९३.३६ बिन्दुमा पुगेको छ । कुल ३६५३ कारोवारबाट ७ लाख ८३ हजार ९९८ कित्ता शेयर किनबेच भई ६३ करोड ६७ लाख ८६ हजार ८२२ रुपैयाको कारोवार भएको छ ।…
कञ्चनपुर, १ कात्तिक । बाँस बेचेरै कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–२ वाणिमा रहेको जनहित महाकाली सामुदायिक वनका उपभोक्ता लखपति भएका छन् । सामुदायिक वनमा रोपिएको बाँस बेचेर सामुदायिक वनका उपभोक्ताले वार्षिक रुपमा…
पुलको कमाइ दसैँमा साढे १० लाख रुपैयाँ
फलेवास (पर्वत), १ कात्तिक । मुलुककै पहिलो व्यावसायिक यान्त्रिक पुल कुश्मा–बलेवा यान्त्रिक पुल लिमिटेडले यसबर्षको दसैँमा रु १० लाख ४१ हजार आम्दानी गरेको छ । केबुलकार मोडेलमा निर्माण गरिएको यान्त्रिक…
काठमाडौँ, ३० असोज । सरकारले खाद्यवस्तु उत्पादनमा जोड दिँदै आएपनि यसको आयात भने बढ्दो छ । यसवर्ष मात्र सबै प्रकारका गरी कूल रु एक खर्ब ३४ अर्बको खाद्य वस्तु आयात…
चितवन, ३० असोज । चाडपर्वको समयमा यात्रुलाई अप्ठेरोमा पारेर बढी भाडा असुल गर्ने १८४ गाडी चालकलाई यहाँ कारबाही गरिएको छ । तिनीहरुमध्ये १२२ जनाबाट असुल गरेको बढी भाडा प्रहरीले फिर्ता…
काठमाडाैं, ३० असोज । अाज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा १६.१४ अंकले घटेर १८०३.७४ बिन्दुमा पुगेको छ । कुल ३२५४ कारोवारबाट ७ लाख ६७ हजार ५४४ कित्ता शेयर किनबेच भई ६० करोड ८ लाख ६३ हजार ७१४ रुपैयाको कारोवार भएको छ । लामो…
रोपवेले कृषि उत्पादन ढुवानीमा सहज
रामपुर (पाल्पा), ३० असोज । लुम्बिनी अञ्चलमै पहिलो पटक पाल्पाको कोलडाँडामा रोपवे सञ्चालनमा आएपछि यहाँका बासिन्दालाई सामान ओसारपसारमा सहज भएको छ । जिल्लाको ग्रामीण विकट भेगका यहाँका नागरिकले वर्षौसम्म चार…
पथरी (मोरङ), ३० असोज । विराटनगर जुट मिलमा विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था प्रभावकारी नहुँदा विगत २५ महिनादेखि बन्द अवस्थामा छ । देशकै पहिलो जुट मिलमा ११ केभिएको लाइनको मात्र सुविधा भएकाले…
भूकम्पले दसैँमा पनि बिकेन कमेरो
भक्तपुर, २३ असोज । दसैँको आगमनसँगै मध्यपुरथिमिको कमेरोटारमा बिक्री गर्न भ्याइनभ्याइ हुने कमेरोको माटो यस वर्ष नबिक्दा यहाँका किसान मर्कामा परेका छन् । दसँैमा घर पोत्न प्रयोग हुने कमेरो (घरको…
खसीबोकाः पहिले किनिन्थ्यो, अहिले बेचिन्छ
मलेखु (धादिङ), २२ असोज । गत वर्षमा उत्तरी धादिङको मूलपानी गाविसवासी सात सयभन्दा बढी खसीबोका खरिद गर्थे । मोटो रकम दसैँको खसीबोका किन्दा बाहिर जान्थ्यो । पैसा मात्र बाहिर जाँदैन…
शेयरबजार १३.२८ अंकले उकालो लाग्यो
काठमाडाैं, २० असोज । अाज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा १३.२८ अंकले बढेर १८१९.८८ बिन्दुमा पुगेको छ । कुल ५०१४ कारोवारबाट १५ लाख ५६ हजार ३२७ कित्ता शेयर किनबेच भई १ अर्ब २ करोड ७७ लाख ११ हजार ३९२ रुपैयाको कारोवार भएको छ…
नेपाल टेलिकमले देशका ७५ वटै जिल्लामा GSM मोबाइलको 3G सेवा सञ्चालनमा ल्यायो
काठमाडौं, २० असोज । नेपाल टेलिकमले देशका ७५ वटै जिल्लामा GSM प्रविधिको 3G मोबाइल सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । डोल्पाको दुनै र हुम्लाको सिमिकोटमा समेत यो सेवा सञ्चालनमा आए पछि…
पोखरामा १६ हजार च्याङ्ग्रा भित्रिए
पोखरा, २० असोज । यस वर्षको दसैँका लागि पोखरामा १६ हजार च्याङ्ग्रा भित्रिएका छन् । विशेष गरी मुस्ताङबाट त्यहाँका स्थानीय कृषकका साथै अन्य ठाउँबाट गएका व्यवसायीले दसैँका लागि भेडा तथा…
पथरी (मोरङ), २० असोज । आफ्नै खेतमा आफैले उत्पादन गरेको उखुको जुस बेच्न थालेपछि बयरवन–९ का किसान ४७ वर्षीय चेतनाथ पौडेलका दिन फर्केका छन् । प्रत्येक दिन बिहानको खाना खाएर…
अनुगमनका क्रममा प्रकाश पोलिक्लिनिक पुनःसिलबन्दी
काठमाडौँ, १९ असोज । चाडबाड आएसँगै आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाएको छ । नियमित रुपमा गरेको बजार अनुगमनका क्रममा विभागले आज काठमाडौँ उपत्यकाको ११…
शेयरबजार ८.१० अंकले बढ्यो
काठमाडाैं, १९ असोज । अाज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा ८.१० अंकले बढेर १८०६.६० बिन्दुमा पुगेको छ । कुल ४३०३ कारोवारबाट १० लाख १८ हजार २४५ कित्ता शेयर किनबेच भई ९२ करोड ८४ लाख ८ हजार ७०५ रुपैयाको कारोवार भएको छ । अाज…
मापदण्ड विपरीत ल्याब सञ्चालनमा
तिलोत्तमा (रुपन्देही), १९ असोज । यस क्षेत्रका मेडिकल ल्याब मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएको पाइएको छ । कतिपय ल्याब जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यलयमा दर्ता समेत भएका छैन् । सरकारी मापदण्ड बमोजिम प्रत्येक…
चितवन, १९ असोज । नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डमा यसवर्षको वर्षातमा धेरै पहिरो खसेर स्थाल मार्गबत्राट यात्रा गर्न डराएका यात्रु हवाई मार्गतर्फ आकर्षित भएका छन् । हावाई मार्गका यात्रु बढेकाले काठमाडौँबाट भरतपुर…
भक्तपुर, १८ असोज । दसँैका लागि मुस्ताङबाट ल्याइएका भेंडाच्याङ्ग्रा नेपाल खाद्य संस्थानको भन्दा महँगोमा बिक्री हुन थालेको छ । यस वर्ष यहाँ ल्याइपुरयाइएको च्याङ्ग्रा प्रतिकिलो रु ७०० र भेंडा प्रतिकिलो…
सेयर बजार १६ अङ्कले बढ्यो
काठमाडौँ, १७ असोज । धितोपत्र बजारमा आज रु ७९ करोड ३ लाख ४३ हजार १७५ मूल्य बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । कुल १३६ कम्पनीको आठ लाख ९६ हजार ४१…
कारोबार सहज गरिदिन राष्ट्र बैंकलाई नेप्सेको आग्रह
काठमाडौँ, १७ असोज । प्रभु बैंकको सेयर कारोबारमा अप्ठ्यारो परेको भन्दै नेपाल स्टक एक्सचेन्जले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सहज तुल्याउन आग्रह गरेको छ । ग्रन्ड बैंकसँगको मर्जर प्रक्रिया पूरा गरी एकीकृत…
इटहरी, १७ असोज । सुनसरी जिल्लाको इटहरी उपमहानगरपालिका–४ मा गोप्य र अवैध रुपमा मेनपावर कम्पनी चलाउँदै आएको छ भन्ने सुराकीका आधारमा घर खानतलासी गर्दा विभिन्न व्यक्तिको १७ थान राहदानी फेला…
दसैँलाई २१ हजार भेडाच्याङ्ग्रा बाहिरिए
मुस्ताङ, १७ असोज । हिमाली जिल्ला मुस्ताङबाट यसवर्षको दसैँलाई आइतबारसम्म २१ हजार भेडाच्याङ्ग्रा बाहिरिएका छन् । जिविसले यहाँबाट बाहिरिने एउटा भेडाच्याङ्ग्राका लागि रु ६५ का दरले व्यवसायीबाट कर असुली गरेको…
काठमाडौँ, १७ असोज । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भएर सेयर बजार कारोबार गरिरहेका कम्पनीले तोकिएको समयमा वार्षिक सूचीकरण नवीकरण शुल्क नबुझाए कारबाहीमा पर्ने भएका छन्। नेप्सेका अनुसार असोज मशान्तभित्र सबै…
शेयरबजार दोहोरो अंक (१०.४०) ले बढ्यो
काठमाडाैं, १६ असोज । अाज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा १०.४० अंकले बढेर १७६३.७८ बिन्दुमा पुगेको छ । कुल ४३९९ कारोवारबाट १० लाख २४ हजार ११४ कित्ता शेयर किनबेच भई ८८ करोड ७० लाख ८७ हजार ६२३ रुपैयाको कारोवार भएको छ ।…
दुई सिमेन्ट उद्योगको इजाजतपत्र निलम्बन
खजुरा (बाँके), १६ असोज । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले गुणस्तहीन सिमेन्ट उत्पादन गरेको आरोपमा जिल्लाका बागेश्वरी र जय मङ्गलम सिमेन्ट उद्योगका इजाजतपत्र निलम्बन गरेको छ । विभागले उद्योगले उत्पादन…
इन्टरनेटको सहायताले हाँस र टर्की पालन गरी आम्दानी लिन सफल
पाल्पा, १६ असोज । पाल्पा जिल्लाको रुप्से गाविस–४, खसाडीका २२ वर्षीय ताराप्रसाद पाण्डेयले इन्टरनेटको सहायताले हाँस र टर्की पालन गरी आम्दानी लिन सफल भएका छन् । हाँस र टर्की पालनसम्बन्धी…
लमजुङ विद्युत विकास कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने
काठमाडौं, १५ असोज । लमजुङ विद्युत विकास कम्पनी लिमिटेडको संचालक समितिको निर्णय अनुसार प्रति कित्ता रु. १००/– दरको ७ लाख ६८ हजार ५ सय ३८ कित्ता शेयर (करिब १०० बराबर…
काठमाडौँ, १४ असोज । सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले राजस्व नतिर्ने तथा कर्मचारीलाई तलब भत्ता नदिने नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरका तात्कालीन सञ्चालकलाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ…
रौतहट, १४ असोज । एक समय सहर बजारमा रिक्साको बाहुल्य थियो । रिक्साको ओहोरदोहोरले नगरमा शोभा बढाएको थियो । तर अहिले रिक्सा एकाएक नगर तथा सहरबाट हराएका छन् । बिहानदेखि…
ताप्लेजुङ, १४ असोज । श्रम तथा रोजगारमन्त्री सूर्यमान गुरुङले वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा देखिएको ठगी, असुरक्षालाई न्यूनीकरण गर्ने विषय आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा परेको बताउनुभएको छ । पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा…
चार कम्पनीको २ करोड ९६ लाख शेयर नेप्सेमा सूचीकृत
काठमाडौं, १४ असोज । साताको अन्तिम दिन बिहीबार नेप्सेमा २ करोड ९६ लाख ६२ हजार ६१ कित्ता शेयर सूचीकृत भएको छ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडको १ करोड ६८ लाख…
शेयरबजार ४.२८ अंकले उकालो लाग्यो
काठमाडाैं, १३ असोज । अाज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा ४.२८ अंकले बढेर १७५३.३८ बिन्दुमा पुगेको छ । कुल ४७५१ कारोवारबाट ९ लाख २६ हजार ९४५ कित्ता शेयर किनबेच भई ८१ करोड २४ लाख ७४ हजार ३६३ रुपैयाको कारोवार भएको छ ।…
काठमाडौँ, १३ असोज । बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको बोटलर्स नेपाल (कोकाकोला) कम्पनी ३२ वर्षसम्म अनुमतिपत्र नलिई सञ्चालनमा रहेको फेला परेको छ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल क्षेत्रीय कार्यालयले बुधबार गरेको…
बैतडी, १३ असोज । गुरुखोला गाविस–८ सतबाँझका महिला व्यावसायिक तरकारीखेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । तरकारीबाट फाइदा हुने भएकाले उनीहरु महिला कृषक समूह गठन गरेर व्यावसायिक तरकारी खेतीमा लागेका छन् ।…
मुस्ताङ, १३ असोज । जिल्लामा यस वर्ष चार हजार ४०० मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भएको छ । गत वर्षभन्दा यस वर्ष ४०० मेट्रिक टन कम स्याउ फलेको छ । सबैभन्दा…
आसन्न चाडपर्वहरुलाई लक्षित गरी नेपाल टेलिकमले ल्यायो छुट तथा अफरहरु
काठमाडौं, १३ असोज । नेपाल टेलिकमले विगत वर्षहरुमा जस्तै यस वर्ष पनि आफ्ना सेवाहरुमा निम्नानुसार अफर दिनुका साथै छुट प्रदान गर्ने भएको छ । १. डाटा अफर जीएसएम तथा सीडीएमएका…
काठमाडौँ, १३ असोज । साझा यातायातले दसैँमा काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर जाने यात्रुको चापलाई दृष्टिगत गरी आउँदो आइतबारदेखि बागलुङ र गोरखाका लागि बससेवा सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । दश वर्षको अन्तरालपछि आगामी…
भक्तपुर, १३ असोज । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले ग्यास उद्योगीको लापर्वाहीले गर्दा सिलिन्डर पड्किएर दुर्घटना बढ्ने क्रम बढेको बताउनुभएको छ । रफत सञ्चार क्लबमा बुधबार आयोजना गरेको…
यति एयरलाइन्सबाट हवाई यात्रा गर्दा यात्रुले ग्यालेक्सी नोट सेभेन बोक्न निषेध
काठमाडौं, १३ असोज । यति एयरलाइन्सले विमानमा यात्रा गर्ने यात्रुलाई विमानमा रहँदा सामसुङ ग्यालेक्सी नोट सेभेन मोबाइल चालउन रोक लगाएको छ । एयरलाइन्सले यात्रुहरूलाई जहाज चढेदेखि नउत्रिएसम्म मोबाइल अनिवार्य रूपमा…
नेप्से परिसूचक ४.६२ अंकले घट्यो, नेपाल लाइफको ११ करोड रुपैयाभन्दा बढीको कारोवार
काठमाडाैं, १२ असोज । अाज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा ४.६२ अंकले घटेर १७४९.१० बिन्दुमा पुगेको छ । कुल ४२७० कारोवारबाट ११ लाख १० हजार ३४५ कित्ता शेयर किनबेच भई ७५ करोड ३४ लाख १५ हजार ५५४ रुपैयाको कारोवार भएको छ ।…
मध्यपहाडी मार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन टेलिकमलाई अख्तियारी
काठमाडौं, १२ असोज । मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत पूर्वको पाँचथर जिल्लाको चियो भञ्ज्याङदेखि पश्चिममा गोर्खा र धादिङको सिमाना आरुघाटसम्म अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने सम्बन्धमा नेपाल टेलिकम र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण बीच…
काठमाडौँ, १२ असोज । नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले आजदेखि पोखरा, भैरहवा र सिमरा उडान सुरु गरेको छ । दसैं, तिहारजस्ता पर्वमा यात्रुको सुविधालाई लक्षित गरी उडान भरिएको निगमका प्रवक्ता…
शेयरबजार स्थीर रहन सकेन, फेरि अोरालो लाग्यो, १ अर्ब रुपैयाको पनि कारोवार भएन
काठमाडाैं, ११ असोज । अाज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा ३.३८ अंकले घटेर १७५३.७२ बिन्दुमा पुगेको छ । कुल ५००७ कारोवारबाट ९ लाख ६६ हजार २२८ कित्ता शेयर किनबेच भई ७५ करोड ७२ लाख ९६ हजार ६६८ रुपैयाको कारोवार भएको छ । हिजो…
व्यापार प्रवर्द्धनका लागि बेवसाइट
काठमाडौँ, ११ असोज । वैदेशिक व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रले नयाँ सूचना ‘पोर्टल’ सुरु गरेको छ । विश्व बैंकको सहयोगमा केन्द्रले नेपालबाट अन्य मुलुकमा निकासी हुने…
पर्यटनमा विविधीकरण गर्नुपर्ने खाँचौ औँल्याउँछन् चितवनका व्यवसायी
रत्ननगर (चितवन), ११ असोज । नेपालकै तेस्रो पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा चितवनलाई हेरिन्छ । काठमाडौँ र पोखरा पछि पर्यटकीय गन्तव्य चितवन हो । चितवनको पनि सौराहा मुख्य गन्तव्य हो । यहाँ…
नेसनल ट्रेडिङबाट कम तेल वितरण
काठमाडौँ, ११ असोज । नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड टेकुमा रहेको पेट्रोल पम्पले पाँच लिटर तेल भर्दा ४० मिलिलिटर कम वितरण गर्ने गरेको भेटिएको छ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल क्षेत्रीय कार्यालयले…
शेयरबजार २६.४६ अंकले बढ्यो, एभरेष्ट बैंकको मात्रै २२ करोड रुपैयाभन्दा बढीको कारोवार
काठमाडाैं, १० असोज । अाज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा २६.४६ अंकले बढेर १७५७.१० बिन्दुमा पुगेको छ । कुल ५०९३ कारोवारबाट ११ लाख ४१ हजार ७६१ कित्ता शेयर किनबेच भई १ अर्ब ७ करोड ६१ लाख ३८ हजार ५७६ रुपैयाको कारोवार भएको छ…
पथरी (मोरङ), १० असोज । दसँै नजिकिँदै जाँदा किनमेल गर्ने क्रममा मोरङको मुख्य बजार विराटनगर बजार सुनसान र भारतको जोगवनी बजारमा नेपाली ग्राहकको भीडभाड भएपछि व्यवसायी पलायन हुने अवस्था सिर्जना…
साझाको प्रदर्शनीमा रु छ लाखका पुस्तक बिक्री
काठमाडौँ, ९ असोज । साझा प्रकाशनको जारी बृहत् पुस्तक प्रदर्शनीमा करिब रु छ लाखका पुस्तक बिक्री भएका छन् । यही असोज ३ गतेदेखि सुरु भएको प्रदर्शनीमा छ दिनमा नयाँ र…
शेयर बिक्री गर्नेहरूको चापले नेप्से ३६.२७ अंकले घट्यो
काठमाडाैं, ९ असोज । अाज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा ३६.२७ अंकले घटेर १७३०.६४ बिन्दुमा पुगेको छ । कुल ५७१३ कारोवारबाट ११ लाख ५३ हजार २६५ कित्ता शेयर किनबेच भई १ अर्ब ५ करोड ६२ लाख ९९ हजार २६४ रुपैयाको कारोवार भएको…
काठमाडौँ, ७ असोज । नेपालीको महान् चाड विजयादशमीका अवसरमा आकर्षक छुट र यथेष्ट सुविधा सहितको सामसुङ ग्यालेक्सी जे २ सिक्स सिटिसी मोबाइल एक्स्पो २०१६ सुरु भएको छ । उपप्रधान तथा…
बागलुङ, ७ असोज । बागलुङदेखि छिमेकीमुलुक भारतको नयाँ दिल्लीसम्म सिधा बससेवा सुरु भएको छ । ना ५ ख ४२४९ नम्बरको ‘डिलक्स’ बस पहिलोपटक यात्रु लिएर यहाँबाट नयाँ दिल्लीका लागि प्रस्थान…
गोरखा, ७ असोज । आँबुखैरेनी गोरखा सडकको बाह्रकिलोस्थित ओख्लेपाखा सामुदायिक वनको जग्गा अतिक्रमण गरी विस्तार गरेको बजार छोड्न तयार रहेको बताउँदै व्यापारीले आफूहरुलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्न सहयोग गर्न आग्रह गरेका…
पाकिस्तानी हस्तकला व्यापार मेला सुरु
काठमाडौँ, ६ असोज । सातौँ पाकिस्तानी हस्तकला व्यापार मेला आजदेखि काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरस्थित वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा सुरु भएको छ । रावलपिन्डी चेम्बर अफ कमर्शको आयोजनामा सुरु भएको व्यापार मेलामा वाणिज्य मन्त्रालयका…
काठमाडाैं, ६ असोज । अाज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा १२.२२ अंकले घटेर १७६६.९१ बिन्दुमा पुगेको छ । कुल ५२४० कारोवारबाट ९ लाख १५ हजार २३३ कित्ता शेयर किनबेच भई ९० करोड ११ लाख ५३ हजार ६३५ रुपैयाको कारोवार भएको छ । होटल,…
युनिलिभर नेपालको सञ्चालकमा शंकरलाल अग्रवाल नियुक्त
काठमाडौं, ६ असोज । युनिलिभर नेपाल लिमिटेडले साधारण शेयरधनीको तर्फबाट शंकरलाल अग्रवाललाई सञ्चालकमा नियुक्त गरेको छ । युनिलिभर नेपालले अग्रवाललाई बढिमा ४ वर्षको लागि नियुक्त गरेको हो ।
चिनियाँ स्याउ नेपाल भित्रिन थाल्यो
रसुवा, ६ असोज । बडा दसैँका लागि फलफूल आपूर्ति गर्न यहाँका व्यवसायीले चिनियाँ स्याउ रसुवागढीबाट आयात गर्न थालेका छन् । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी इन्चार्ज जयराम पुडाशैनीले मङ्गलबार साँझ अवरुद्ध स्याफ्रु…
काठमाडौँ, ६ असोज । चाडबाडलाई लक्षित गरी सरकारले सञ्चालन गरेको सुपथ मूल्य पसलमा नै कम तौलको सामान भेटिएको छ । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले आज गरेको अनुगमनका…
शेयरबजार निरन्तर अोरालो लाग्यो, १ अर्ब रुपैयाको पनि कारोवार भएन
काठमाडाैं, ५ असोज । अाज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा ७.३७ अंकले घटेर १७७९.१३ बिन्दुमा पुगेको छ । कुल ४९९६ कारोवारबाट २२ लाख १९ हजार ४०२ कित्ता शेयर किनबेच भई ९४ करोड ९६ लाख १२ हजार २६८ रुपैयाको कारोवार भएको छ । विकास बैंक…
काठमाडौँ, ५ असोज । निजी क्षेत्रको वायुसेवा प्रदायक कम्पनी हिमालय एयरलाइन्सले काठमाडौँ–श्रीलङ्का (कोलम्बो) सीधा उडान सुरु गर्ने भएको छ । आगामी असोज १५ अर्थात अक्टोवर १ देखि दोस्रो गन्तव्यका रुपमा…
दशैंमा साझाका नया बस राजधानीका सडकमा
काठमाडौं, ४ असोज । साझा यातायातले दशैंको अवसर पारेर थप ३० वटा बसबाट सेवा दिने भएको छ । साझा यातायातले खरिद गरेको ३० वटा बसमध्ये १७ वटा बस बीरगञ्ज भन्सार…
क्लच अटोको मेकानिक्स मिट सम्पन्न
काठमाडौं, ४ असोज । क्लच अटो लिमिटेड अर्थात सीए क्लचको मेकानिक्स मिट सम्पन्न भएको छ । उक्त मेकानिक्स मिटमा काठमाडौं उपत्यकाका मेकानिक्सहरुको सहभागिता रहेको थियो । उक्त अवसरमा क्लच अटो…
नेप्से परिसूचक घटेर १७८६.५० विन्दुमा पुग्यो
काठमाडाैं, ४ असोज । अाज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा १७.९८ अंकले घटेर १७८६.५० बिन्दुमा पुगेको छ । कुल ६९३९ कारोवारबाट १६ लाख १५ हजार ४१७ कित्ता शेयर किनबेच भई १ अर्ब ३४ करोड ५३ लाख ३४ हजार ४८६ रुपैयाको कारोवार भएको छ ।…
पोखरा, ४ असोज । सम्भावनाको खोजी गर्दै माटोसँग खेल्न जान्ने हो भने स्वदेशमै मनग्य आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेका छन् लेखनाथ नगरपालिका– १७ चैनपुरका किसान खगेन्द्र अधिकारी । पाउलोनियाको…
विदेशी सिमकार्ड अब नेपालमै किन्न पाइने
काठमाडौं, ४ असोज । अब विदेशमा काम गर्न जाने नेपाली कामदारले आफ्नो गन्तव्य मुलुकको एयरपोर्टबाटै घरमा आफ्नो मोबाईलबाट फोन गर्न सक्नेछन् । श्रम स्वीकृति र भिसा हुनेले नेपालबाटै आफू जाने…
काठमाडौं, ४ असोज । नागबेली झारबाट आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने धैरैलाई थाहा नहुन सक्छ । नागबेली झारबाट पनि आम्दानी हुने थाहा पाएपछि पर्वत जिल्लाको बनौं, क्याङ लेखकाँट गाविसका बासिन्दाले नागबेली…
लामो तथा मध्यम दूरीमा असोज ७ गतेदेखि दसैँको टिकट बुकिङ खुल्ला
काठमाडौँ, ३ असोज । उपत्यकाबाट लामो तथा मध्यम दूरीका सवारी साधनबाट दसैँमा घर फर्कन चाहनेहरुका लागि असोज ७ गते शुक्रबारदेखि टिकट बुकिङ खुल्ला गरिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागमा आइतबार…
पाँचथर, ३ असोज । पाँचथरको दुई वटा गाविसबाट धसिङ्ग्रेको कच्चा तेल उत्पादन गर्न सुरु भएको छ । विभिन्न औषधिजन्य वस्तुका रुपमा प्रयोग गर्न सकिने धसिङ्ग्रे उत्पादन जिल्लाको लुङरुपा र सिदिनगाविसबाट…
काठमाडाैं, २ असोज । अाज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा १०.६९ अंकले घटेर १८०४.४८ बिन्दुमा पुगेको छ । कुल ६७२७ कारोवारबाट २४ लाख ९१ हजार ६०४ कित्ता शेयर किनबेच भई २ अर्ब ४६ करोड १२ लाख ५३ हजार ३२२ रुपैयाको कारोवार भएको छ…
होटल व्यवसायमा ८७ करोड लगानी
बाबियाचौर(म्याग्दी), १ असोज । म्याग्दीमा दर्ता भएका होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा रु ८७ करोड लगानी भएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति कार्यालयका अनुसार म्याग्दीमा आर्थिक बर्ष २०७२/७३…
काठमाडौँ, १ असोज । आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहराले सरकारले व्यापारीलाई म्याद सकिएको तथा मिसावट भएका उपभोग्य सामग्री कुनै हालतमा बिक्री गर्न नदिइने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । ठूला चाडपर्वका अवसरमा सरकारले…
काठमाडौँ, ३१ भदौ । नजिकिएको चाडपर्वलाई ध्यानमा राखी नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनमा मूल्य घटाएको छ । दसैँतिहार लगायत पर्वमा खासगरी पहाडी भेगमा सस्तो यात्रा होस् भन्ने उद्देश्यले हवाई इन्धनको…
बाबियाचौर (म्याग्दी), ३१ भदौ । समयमै नवीकरण नगर्दा जिल्लाका ६५३ भन्दा बढी उद्योग र व्यावसायिक फार्म अवैध भएका छन् । नवीकरण गर्ने म्याद गुज्रिएका ६५३ वटा उद्योग र फार्मको जरिवाना…
‘सुपथ मूल्यका बिक्री कक्ष’ भोलिदेखि सञ्चालन हुने
काठमाडौँ, ३१ भदौ । भोलिदेखि उपत्यकामा चाडपर्वलाई लक्षित गरी ‘सुपथ मूल्यका बिक्री कक्ष’ सञ्चालन हुने भएको छ । नेपाल खाद्य संस्थान, नेसनल ट्रेडिङ र साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडले संयुक्त रुपमा बिक्री…
प्रहरीद्वारा अवैध इँटा नियन्त्रण अभियान सुरु
भक्तपुर, ३० भदौ । महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरले अवैधरुपमा बिक्री वितरण गरेको इँटा नियन्त्रण गर्ने अभियान सुरु गरेको छ । उपभोक्ताले रकम भुक्तानी गरेअनुसारको परिमाणमा इँटा नपाइने, कर छलेर इँटा…
काठमाडौँ, ३० भदौ । होटल सङ्घ नेपालले स्थापनाको ५०औँ वर्षमा प्रवेश गरेको उपलक्ष्यमा आगामी असोज १४ देखि १६ गते सम्म स्वर्ण महोत्सव मनाउने भएको छ । महोत्सवमा यस उद्योगसँग सम्बन्धित…
फ्यानको अध्यक्षमा कसजु निर्वाचित
काठमाडौं, ३० भदौ । फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपाल (फ्यान) को अध्यक्षमा कुमार कसजु श्रेष्ठ निर्वाचित हुनुभएको छ । फ्यानको २४ औं साधारण सभामा भएको निर्वाचनमा कसजुले संजिब कार्कीलाई ४ मतले पराजितगर्दै…
चौँसट्ठी हजार किलो जडीबुटी निकासी
इलाम, ३० भदौ । जिल्लाबाट आव २०७२/७३ मा ६४ हजार एक सय किलो जडीबुटी निर्यात भएको छ । कचुर, चिराइतो, मजिटो, जमानी मान्द्रो, अर्गेली, सतुवा, लौठसल्ला, बिखमालगायतका जडीबुटी काँकडभिट्टा हुँदै…
चितवन, ३० भदौ । फस्टाउँदै गएको यहाँको बङ्गुरपालन व्यवसाय भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण थला परेको छ । बङ्गुरपालक कृषक पलायन हुँदै गएका छन् । सरकारले अनुदान दिँदासमेत तुलनात्मक रुपमा व्यावसायिक…
नागबेली झारबाट मनग्य आम्दानी
फलेवास (पर्वत), ३० भदौ । वनमा खेर गइरहेको नागबेली झारबाट मनग्य आम्दानी हुन थालेपछि जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रका बासिन्दा नागबेली सङ्कलनमा व्यस्त छन् । जिल्लाका वनौँ, क्याङ, लेखफाँटलगायत गाविसका बासिन्दा नागबेली…
शेयरबजार ३.५२ अंकले घट्यो
काठमाडाैं, २९ भदाै । अाज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा ३.५२ अंकले घटेर १८१५.१७ बिन्दुमा पुगेको छ । कुल ७१३१ कारोवारबाट १६ लाख ६४ हजार १८३ कित्ता शेयर किनबेच भई १ अर्ब ३७ करोड ४२ लाख ४८ हजार २२४ रुपैयाको कारोवार भएको…
अप्पो स्मार्ट फोन नेपालमा पनि
काठमाडौं, २९ भदौ । विश्व बजारको चौथो स्थानमा रहेको अप्पो कम्पनीले नेपालमा ‘सेल्फी एक्स्पर्ट अप्पो एफ १ एस’ मोडलको स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको छ । चीनको प्रमुख ब्राण्ड अप्पोले नेपालमा सार्वजनिक…
बैतडी, २९ भदौ । जिल्लामा पछिल्लो समय कोदो खेती लोप हुँदै गएको छ । कोदोको महत्वका बारेमा थाहा नहुँदा कोदो खेतीप्रतिको आकर्षण घट्दै गएको हो । कोदोलाई औषधिका रुपमा समेत…
रामपुर (पाल्पा), २९ भदौ । जिल्लामा मह बिक्रीबाट आव २०७२/७३ मा रु एक करोड ६२ लाख आम्दानी भएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्राविधिक ज्ञानकुमार यादवका अनुसार गत आवमा…
पाँचथर, २९ भदौ । पाँचथरमा अर्गानिक चिया मात्रै उत्पादन गरिने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग बढेको र मूल्य पनि राम्रो भएकाले अर्गानिक चिया उत्पादन गरिने भएको हो । जिल्लामा…
दाल झान्दा प्रयोग हुने नेपाली कडिपत्ता भारतीय शहरमा
कञ्चनपुर, २९ भदौ । कञ्चनपुरको भिमदत्त नगरपालिकामा बसोबास गर्ने विपन्न परिवारले कडिपत्ताबाट मनग्गे लाभ लिन थालेका छन् । केही वर्ष अघिसम्म गाई, भैँसीलाई सोत्तरका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको भिमदत्त नगरपालिकाका…
खाद्य संस्थानले तीनहजार खसी बोका ल्याउने
काठमाडौँ, २८ भदौ । नेपाल खाद्य संस्थानले यस वर्षको दसैँका लागि करिब तीन हजार खसी बोका ल्याउने भएको छ । प्रत्येक वर्ष दसैँमा सर्वसाधारणलाई सहुलियत मूल्यमा मासु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले…
खाना पकाउने ग्यासमा व्यापक ठगी पाइयो
काठमाडौँ, २७ भदौ । खाना पकाउने एलपी ग्यासमा व्यापक ठगी हुने गरेको पाइएको छ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र क्षेत्रीय कार्यालय बालाजुले आज अनुगमन गर्दा धादिङमा रहेको ओम…
चार दिनदेखि अोरालो लागेकाे शेयरबजारमा सामान्य सुधार
काठमाडाैं, २७ भदाै । अाज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा १.८८ अंकले बढेर १८१८.६९ बिन्दुमा पुगेको छ । कुल ४६३५ कारोवारबाट २९ लाख २ हजार २५५ कित्ता शेयर किनबेच भई १ अर्ब १९ करोड ७८ लाख ४५ हजार ७२९ रुपैयाको कारोवार भएको…
काठमाडौँ, २७ भदौ । कृषि विकास मन्त्रालयले यस वर्ष देशभर ९७ प्रतिशत धानखेती भएको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्रकुमार कार्कीका अनुसार गत वर्ष ८७ प्रतिशत मात्र खेती भएकामा यस…
नवलपरासी, २७ भदौ । नवलपरासीका तीनवटा ठूला उद्योगले विद्युत् प्राधिकरणलाई दुई करोड भन्दा बढी विद्युत् महसुल बुझाएका छैनन् । सुनवलस्थित बुटवल सिमेन्ट उद्योग प्रालि, सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रालि र लक्ष्मी स्टिलले…
नेप्से परिसूचक ६.२४ अंकले घट्यो
काठमाडाैं, २६ भदाै । अाज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा ६.२४ अंकले घटेर १८१६.८१ बिन्दुमा पुगेको छ । कुल ५७६५ कारोवारबाट १८ लाख ५१ हजार १९१ कित्ता शेयर किनबेच भई १ अर्ब १७ करोड ७५ लाख ३७ हजार ८६१ रुपैयाको कारोवार भएको छ…
व्यापारीलाई कारबाही गरी करिब रु २१ करोड राजस्व असुली
वीरगन्ज, २४ भदौ । राजस्व अनुसन्धान मध्यमाञ्चल कार्यालय, पथलैयाले व्यापारीलाई कारबाही गरी जरिवानास्वरुप २० करोड ९७ लाख रुपैयाँ राजस्व असुल गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा यहाँका केही प्रतिष्ठित…
‘सुविसु क्यान कम टेक-२०१६’ सुरु
काठमाडौं, २३ भदौ । काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा अाज बिहीबारदेखि ‘सुबिसु क्यान कमटेक मेला २०१६’ सुरु भएको छ । कम्प्युटर एसोसियशन अफ नेपाल (क्यान) को आयोजनामा यो मेला सुरु भएको हो । यो…
कृषि उपज बजार ऐन ल्याउन माग
काठमाडौँ, २३ भदौ । नेपाल फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासङ्घले कृषि उपज बजार ऐन चाँडै ल्याउन माग गरेको छ । महासङ्घले यहाँ आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घका अध्यक्ष खोमप्रसाद…
काठमाडाैं, २३ भदाै । अाज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा १.७८ अंकले घटेर १८२३.०५ बिन्दुमा पुगेको छ । कुल ६५२४ कारोवारबाट २१ लाख ४३ हजार ५४६ कित्ता शेयर किनबेच भई १ अर्ब ५० करोड ३ लाख २६ हजार ४९६ रुपैयाको कारोवार भएको…
रौतहट, २३ भदौ । श्रीमान्को कमाइमा आश्रित यहाँका महिला यतिखेर इ–रिक्सा चलाएर आत्मनिर्भर बन्न थालेका छन् । श्रीमान्को कमाइमा भर पर्दै आएका चन्द्रपुर नगरपालिका क्षेत्रका कामकाजी महिलाका लागि यतिखेर इ–रिक्सा…
पर्यटकीय यामसँगै व्यवसायी उत्साहित
चितवन, २३ भदौ । भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण प्रभावित बनेको यहाँको पर्यटन व्यवसाय पर्यटकीय मौसम सुरु भएसँगै गरिएका अग्रिम बुकिङका कारण व्यवसायी उत्साहित भएका छन् । गत वर्ष वैशाखमा आएका…
सुनचाँदी व्यवसायीको महाधिवेशन स्थगित
काठमाडौँ, २३ भदौ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घको दोस्रो महाधिवेशन यही भदौ २४ गते हुने भनिएकोमा प्राविधिक कारणले स्थगित गरिएको छ । केही जिल्लामा अधिवेशन गरी प्रतिनिधि छनोट गर्ने काम…
झण्डै १० अंकले शेयरबजार अोरालो लाग्यो, बैंकहरूको मूल्य पनि घट्यो
काठमाडाैं, २२ भदाै । अाज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा ९.९७ अंकले घटेर १८२४.८३ बिन्दुमा पुगेको छ । कुल ७२२२ कारोवारबाट २९ लाख ३१ हजार ९८४ कित्ता शेयर किनबेच भई १ अर्ब ६५ करोड २१ लाख ९० हजार २९१ रुपैयाको कारोवार भएको…
काठमाडाँै, २२ भदौ । पोखरा र यस आसपासमा पर्यटकीय सम्पदाको प्रचारप्रसार तथा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले साङ्ग्रीला भिलेज रिसोर्टले यस वर्ष पनि आउँ है पोखरा अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ । पर्यटकीय…
नेपाली अदुवा गोदाम मै थन्कियो
पाँचथर, २१ भदौ । एक हप्ता अघिदेखि भारत निकासी बन्द भएको नेपाली अदुवा गोदाम मै थन्किँदा पूर्वी पहाडी जिल्लाका अदुवा किसान र व्यापारी समस्यामा परेका छन् । यति बेला माउ…
नेप्से परिसूचक ४.१० अंकले घट्यो
काठमाडाैं, २१ भदाै । अाज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा ४.१० अंकले घटेर १८३४.८० बिन्दुमा पुगेको छ । कुल ८२९२ कारोवारबाट २२ लाख ६० हजार ९४३ कित्ता शेयर किनबेच भई १ अर्ब ८१ करोड ४० लाख ११ हजार ४६४ रुपैयाको कारोवार भएको छ…
तनहुँ, २१ भदौ । तनहुँमा गत वर्षको तुलनामा यसवर्ष माछा उत्पादन वृद्धि भएको छ । गत आवमा २३ मेट्रिक टन माछा उत्पादन भएकामा यस आवमा ४० मेट्रिक टन माछा उत्पादन…
अठार सयलाई सीपमूलक तालिम, तीन सय ६१ नयाँ उद्योग दर्ता
लहान, २१ भदौ । सिरहामा सीपमूलक तालिम लिएर घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । विदेशमा गएर मेहनत गर्नुभन्दा स्वदेशमै सीप सिकेर राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ…
शेयरबजारमा १ अर्ब ९१ करोडभन्दा बढीको कारोवार
काठमाडाैं, २० भदाै । अाज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा १९.१३ अंकले बढेर १८३८.९६ बिन्दुमा पुगेको छ । कुल १०,७३८ कारोवारबाट २२ लाख ३७ हजार ८५० कित्ता शेयर किनबेच भई १ अर्ब ९१ करोड २७ लाख ८१ हजार २५९ रुपैयाको कारोवार भएको छ…
काभ्रेपलाञ्चोकमा ३ सय ५० प्रजातिका जडीबुटी भेटियो
बनेपा, २० भदौ । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वनमा भेटिएका ३५० प्रजातिका जडीबुटी भेटिएको छ। तीमध्ये १० प्रजातिका जडीबुटी मात्रै काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला वन कार्यालयले निकासीका लागि इजाजत दिइएकोे छ…
वाणिज्य बैंकहरूको कारोवार ह्वात्तै बढ्न गई नेप्से परिसूचक १८१९.८३ बिन्दुमा
काठमाडाैं, १९ भदाै । अाज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा १४.६५ अंकले बढेर १८१९.८३ बिन्दुमा पुगेको छ । कुल ९०८२ कारोवारबाट २१ लाख १५ हजार १७४ कित्ता शेयर किनबेच भई १ अर्ब ६४ करोड ९५ लाख ७ हजार ६२१ रुपैयाको कारोवार…
गोलभेँडा खेतीबाट रु दश लाखसम्म आम्दानी
पाँचथर, १९ भदौ । पाँचथरको उत्तरी भेगका किसानले गोलभेँडा खेतीबाट रु दश लाखसम्म आम्दानी गर्न थालेका छन् । जिल्लाको अमरपुर, पञ्चमी, नाँगी, थर्पु, भारपालगायत गाविसका कृषकले व्यावसायिक गोलभेँडा खेती गरेर…
अर्बौँको चकलेट र चुइगम आयात
काठमाडौँ, १८ भदौ । मुलुकभित्र थुप्रै चकलेट तथा चुइगम उद्योग सञ्चालनमा रहेपनि नेपाल अहिलेसम्म यसमा आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । भन्सार विभागका महानिर्देशक शिशिरकुमार ढुङ्गानाका अनुसार यसवर्ष रु छ अर्ब…
बागलुङमा फस्टाउँदै किवीखेती
बलेवा (बागलुङ), १८ भदौ । नेपालको पूर्वी पहाडमा गरिँदै आएको किवीखेतीको विस्तार पश्चिमी पहाडमा पनि हुन थालेको छ । पूर्वका विभिन्न जिल्लामा व्यावसायिक रुपमा किवीखेती गरिँदै आएकोमा केही वर्षयता पश्चिमी…
काठमाडौँ, १६ भदौ । नेपाल आयल निगमले नजिकिँदो चाडबाडलाई ध्यानमा राखी खाना पकाउने ग्यासको मूल्य घटाएको छ । चाडबाडको अवसर पारेर प्रतिसिलिन्डर मूल्य रु ५० घटाइएको निगमका प्रवक्ता भानुभक्त खनालले…
तीजको अवसर पारेर नेपाल टेलिकमले ल्यायो शुभरात्री प्याकेज
काठमाडौं, १६ भदौ । नेपाल टेलिकमले Festival Offer को रुपमा GSM Prepaid मोबाइल प्रयोगकर्ताहरुका लागि शुभ रात्री प्याकेज ल्याउने भएको छ । यो अफर राती ११ बजेदेखि विहान ५ बजेसम्म…
बैंक तथा फाइनान्स समूह उकालो लागी नेप्से ७.७३ अंकले बढ्यो
काठमाडाैं, १६ भदाै । अाज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा ७.३७ अंकले बढेर १८०५.१८ बिन्दुमा पुगेको छ । कुल ८०८० कारोवारबाट १७ लाख ९९ हजार ५११ कित्ता शेयर किनबेच भई १ अर्ब ३५ करोड ४३ लाख ७८ हजार १५७ रुपैयाको कारोवार भएको…
दूध बिक्रीबाट दुई करोड पचास लाख आम्दानी
रामपुर (पाल्पा), १६ भदौ । डुम्रे दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड मस्यामले आव २०७२/७३ मा दूध बिक्रीबाट रु दुई करोड ५३ लाख आम्दानी गरेको छ । यस वर्ष सो सहकारीले…
पाल्पा, १६ भदौ । परम्परागत खेती गर्न छाडेर व्यावसायिक तरकारी खेती गर्न थालेपछि यहाँका युवाले मनग्य आम्दानी लिन थालेका छन् । मुझुङ गाविसका ४० देखि ५० घरपरिबार मकै, भटमास, कोदो,…
जुम्ला, १६ भदौ । यस वर्ष किसानले मनग्य आम्दानी लिएका छन् । व्यापारीले प्रतिकिलो रु ६० मा स्याउ खरिद गरिरहेका छन् । पटमारा गाविसका किसान धमाधाम स्याउ भित्र्याउनमा व्यस्त छन्…
नेपालमा क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी स्थापना हुने
काठमाडौं, १६ भदौ । नेपालमा क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी स्थापना गर्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था केयर रेटिङले नेपालको विशाल ग्रुप र इमर्जिङ नेपाल लिमिटेडसँग सम्झौता गरेको छ । सम्झौतामा केयर रेटिङ भारतका…
नेप्से परिसूचक ९.३७ अंकले बढ्यो, होटल र जलविद्युत समूहको मूल्यमा गिरावट
काठमाडाैं, १५ भदाै । अाज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा ९.३७ अंकले बढेर १७९७.४५ बिन्दुमा पुगेको छ । कुल ६१९४ कारोवारबाट १७ लाख ५९ हजार ३७९ कित्ता शेयर किनबेच भई १ अर्ब २५ करोड ३७ लाख ९२ हजार ६३७ रुपैयाको कारोवार भएको…
बुवाको मुख हेर्ने दिनको अवसर पारेर नेपाल टेलिकमले ल्यायो डाटा प्याक अफर
काठमाडौं, १४ भदौ । नेपाल टेलिकमले GSM Prepaid मोबाइल प्रयोगकर्ताहरुका लागि बुवाको मुख हेर्ने दिनको अवसरमा शुभ विहानी–सन्ध्या डाटा प्याक अफर ल्याउने भएको छ । सो अफर विहान ५ बजेदेखि…
नेप्से परिसूचक निरन्तर उकालोतिर, जलविद्युत समूहको कारोवार बढ्यो
काठमाडाैं, १४ भदाै । अाज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा २१.५४ अंकले बढेर १७८८.०८ बिन्दुमा पुगेको छ । कुल ६७९६ कारोवारबाट १८ लाख ९७ हजार ०८२ कित्ता शेयर किनबेच भई १ अर्ब ४५ करोड १२ लाख ४४ हजार ८४५ रुपैयाको कारोवार भएको…
काठमाडौँ, १४ भदौ । नेपालमा उत्पादित विभिन्न किसिमका जडीबुटीबाट उत्पादन भएको तेलको विदेशमा अत्यधिक माग हुने गरेको छ । नेपालमा उत्पादित मेन्था, लेवन ग्रास, सिट्रोनेला, धसिङ्गरे, पामारोजा, टिमुर, क्यामोमाइललगायत वनस्पतिजन्य…
नाडाको ‘११ औँ अटो सो’ सुरु
काठमाडौँ, १४ भदौ । नेपालभर सबै ब्रान्डका मोटरगाडी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अटोमोबाइल्स एसोसियसन अफ नेपाल(नाडा)को ‘११ औँ अटो सो’ आजदेखि भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको छ । उक्त प्रदर्शनीको उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री…
शेयरबजार उकालोतिर, १ अर्ब ५० करोड रुपैयाभन्दा बढीको कारोवार
काठमाडाैं, १३ भदाै । अाज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा १८.३१ अंकले बढेर १७६६.५४ बिन्दुमा पुगेको छ । कुल ६६५७ कारोवारबाट २९ लाख ५७ हजार ६०८ कित्ता शेयर किनबेच भई १ अर्ब ५० करोड ८६ लाख ३३ हजार १९० रुपैयाको कारोवार भएको…
फलेवास (पर्वत), १३ भदौ । हजारौँ रुपैयाँ खर्चेर आयकर बुझाउन पोखरा जान बाध्य पर्वतका व्यवसायीको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै जिल्लामा नै आयकर बुझाउने सुविधाबाट दुई दिनमा यहाँ झन्डै एक हजार २७…
बैंक तथा बीमा कम्पनीहरूको कारोवारले नेप्से परिसूचक उकालोतिर
काठमाडाैं, १२ भदाै । अाज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा १७.६१ अंकले बढेर १७४८.२३ बिन्दुमा पुगेको छ । कुल ६२६० कारोवारबाट १३ लाख १५ हजार ६४७ कित्ता शेयर किनबेच भई १ अर्ब ३५ करोड ९१ लाख ७३ हजार २३४ रुपैयाको…
पर्यटक लोभ्याउन मदिरा होइन ‘टी पार्टी’
काठमाडौँ, ११ भदौ । स्वास्थ्यका लागि पेय पदार्थको रुपमा चियालाई लिइन्छ । तर पश्चिमा संस्कृतिको प्रभावले चियाको साटो मदिराजन्य पदार्थ र हल्का पेय पिउने बानी नेपाली समाजमा मौलाएको छ ।…
पशु बिमा तर्फ कृषकको आर्कषण बढ्दो
तनहुँ, ११ भदौ । पछिल्लो समय तनहुँमा पशु बिमा तर्फ पशुपालन कृषकको आर्कषण बढ्दै गएको छ । पशुपालक कृषकले पशु बिमा गरेपछि पशुको मृत्यु भएको अवस्थमा ८० प्रतिशतसम्म रकम पाउने…
धनगढी, ११ भदौ । असुरक्षाका कारण बडिमालिका यातायात व्यवसायी समितिले आफ्नो काउण्टरबाट प्रहरीको सुरक्षा घेरामा यात्रुलाई टिकट उपलब्ध गराउन थालेका छन् । कानुन बमोजिम निर्वाध रुपमा बससेवा सञ्चालन गर्न पाउने…
बढी भाडा लिँदा पनि सहन बाध्य
ललितपुर, ११ भदौ । ठेचोकी सम्झना महर्जनले तीन किमीभन्दा कम दूरीमा माइक्रोबस चढ्दा समेत रु १० तिर्ने गर्नुभएको छ । सरकारले पछिल्लो पटक लागू गरेको भाडा दर अनुसार सार्वजनिक सवारीमा…
नेप्से परिसूचक ४८.७६ अंकले बढ्यो, बीमा कम्पनीहरूको करोवार सबैभन्दा बढी
काठमाडाैं, ८ भदाै । अाज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा ४८.७६ अंकले बढेर १७३०.६२ बिन्दुमा पुगेको छ । कुल ५१५० कारोवारबाट ११ लाख १३ हजार १६५ कित्ता शेयर किनबेच भई १ अर्ब २ करोड ३२ लाख ६३ हजार ४१८ रुपैयाको कारोवार भएको…
काठमाडौँ, ८ भदौ । भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लाका पीडितलाई ट्याक्सी दर्ता नम्बर उपलब्ध गराउन दुई महिनापछि गोलाप्रथा हुने भएको छ । गत साउन २ देखि यही भदौ ५ गतेसम्म दर्ता…
शेयरबजार निरन्तर अोरालो लाग्ने क्रम जारी
काठमाडाैं, ७ भदाै । अाज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा १.२६ अंकले घटेर १६८१.८६ बिन्दुमा पुगेको छ । कुल ५२०२ कारोवारबाट १४ लाख ५२ हजार २५० कित्ता शेयर किनबेच भई ८८ करोड १९ लाख ६२ हजार ८१० रुपैयाको कारोवार भएको छ ।…
बजार अनुगमन व्यावहारिक बनाउन निजी क्षेत्रको आग्रह
काठमाडौँ, ७ भदौ । पछिल्लो समय सरकारले गरेको बजार अनुगमन कार्यलाई व्यवस्थित गर्न निजी क्षेत्रले आग्रह गरेको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आज यहाँ आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा नेपाल उद्योग…
काठ बिक्रीबाट अठार करोड पचास लाख आम्दानी
काठमाडौँ, ७ भदौ । वन पैदावार विकास समितिले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा काठ बिक्रीबाट रु १८ करोड ५१ लाख आम्दानी गरेको छ । समितिले सागरनाथ वन विकास परियोजना र रतुवामाई…
शेयरबजार निराशाजनक स्थितिमा, ३९.३१ अंकले घट्यो
काठमाडौँ, ६ भदौ । धितोपत्र बजारमा सेयरको मूल्य घट्ने क्रम आज पनि जारी रह्यो । नेपाल स्टक एक्सचेजन्जका अनुसार नेप्से परिसूचक ३९.३१ अङ्कले घटेर एक हजार ६८३ बिन्दुमा कायम छ…
मेडेपमार्फत दुई सय उद्यमी दक्ष
इलाम, ६ भदौ । आयआर्जनका माध्यमबाट गरिबी निवारणमा सहयोग पुरयाउने उद्देश्यले लघुउद्यम विकास कार्यक्रम (मेडेप)बाट यहाँ २०० जना उद्यमी तयार भएका छन् । उद्यमशीलता विकास तालिममार्फत ग्रामीण भेगका युवायुवतीलाई स्वरोजगार…
नेपाल टेलिकमले ७५ वटै जिल्लामा माइक्रोवेभ रेडियो लिंकको पहुँच विस्तार
काठमाडौं, ६ भदौ । नेपाल टेलिकमले यही भाद्र चार गते देखि ७५ वटै जिल्लामा माइक्रोवेभ रेडियो लिंक (Microwave Radio Link) को पहुँच पु¥याई सेवा उपलब्ध गराउन थालेको छ । त्यसअघि…
काठमाडौँ, ५ भदौ । ‘स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गरौँ, आत्मनिर्भर भई स्वाभिमानी बनौँ’ नाराका साथ दुई दिने उद्यमशील महिला, व्यापारिक तथा प्रदर्शनी मेला–२०७३ को आयोजना हुने भएको छ । क्रियाशील पत्रकार…
जग्गाको कारोबारले व्यापारमा नकारात्मक प्रभाव
चितवन, ५ भदौ । व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्नुपर्ने पुँजी जग्गाको कारोबारमा केन्द्रीत हुन थालेपछि व्यापार व्यवसायमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएको छ । नयाँ उद्योग चलाउने, व्यापार गर्ने व्यवसायी जग्गा प्लटिङमा…
नेप्से परिसूचक बाह्र अङ्कले घट्यो
काठमाडौँ, ५ भदौ । धितोपत्र बजारमा सेयरको कारोबारमा कमी आउने क्रम आज पनि जारी छ । अघिल्लो साता तीन दिन सार्वजनिक बिदाका कारण पूरा समय कारोबार हुन नसकेको बजारमा आज…
भद्रपुर, ४ भदौ । झापामा ब्रोइलर कुखुराको मासु बिक्रीबाट वार्षिक करिब रु ३३ करोड ९६ लाख आम्दानी भइरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागद्वारा आव २०७१/७२ मा…
मोबाइलबाटै सम्पूर्ण आर्थिक कारोवार गर्न मिल्ने
काठमाडौं, ३ भदौ । एनसेलले मोबाइल फाइनान्सियल सर्भिस सेवा सुरु गर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ग्राहकलाई फाइनान्सियल सर्भिस प्रदान गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्थासहितको नीति ल्याएको थियो । नेपाल…
अपरमादीले मङ्सिरदेखि विद्युत् उत्पादन गर्ने
पोखरा, २ भदौ । कास्कीको सिल्दुजुरे गाविस–९ बाहुनडाँडामा निर्माणाधीन अपरमादी जलविद्युत् आयोजनाको ९८ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । मादी खोलाबाट निकालिने २५ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाले आगामी मङ्सिरदेखि नियमित…
नेपाल वायुसेवा निगमको नाफा ११ अर्ब ७ करोड
काठमाडौं, २ भदौ । नेपाल वायुसेवा निगमले गत आ.व. २०७२/७३ मा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरेर ७ अर्ब ५७ करोड रुपैया मुनाफा गरेको छ भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्य वायुसेवा कम्पनीलाई उपलब्ध…
हेवा “ए” जलविद्युतले व्यावसायिक उत्पादन थाल्ने
काठमाडौं, २ भदौ । हेवा “ए” जलविद्युत आयोजनाले भदौ १५ गतेदेखि ड्राई परिक्षण गर्ने भएको छ । सानातिना काम गर्न मात्र बाँकी भएको र असोज १ गतेदेखि व्यावसायिक उत्पादन थाल्न…
काठमाडौँ, १ भदौ । धितोपत्र बजारमा लगातार ओरालो लाग्दै आएको सेयरको मूल्यमा आज केही बढोत्तरी भएको छ । नेपाल स्टक एक्चेन्जकाअनुसार नेप्से आज १७.४९ अङ्कले बढेर एक हजार ७३४.९४ विन्दुमा…
खाँचे (लमजुङ), १ भदौ । बाँझाखेत गाविस खाँचेका सोमबहादुर तामाङ करिब पाँच वर्ष विदेशमा बस्नुभयो । पहिलो पटक छुट्टीमा आएका सोमबहादुरले खासै कमाउन सकेनन् । ऋण गरेर दोस्रोपटक उहाँ विदेश…
काठमाडाैँ– दुबई सिधा उडान सुरु हुँदै
काठमाडौँ, १ भदौ । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)ले बन्द भएको करिब चार वर्षपछि काठमाडौँ–दुबई उडान पुनः बिहीबारदेखि नियमित गर्दैछ । काठमाडौँ– दुबई सीधा उडानका लागि सबै…
अम्रिसोबाट वर्षदिनमा तीन पटकसम्म आम्दानी
तानसेन, १ भदौ । पाल्पाका किसानहरूले अम्रिसोबाट वर्षदिनमा तीन पटकसम्म आम्दानी लिने गरेका छन् । यहाँका किसानहरूले वर्षामा अम्रिसोबाट विरुवा, हिउँदमा फूल र घाँस बेचेर राम्रो आम्दानी लिने गरेका छन्…
काठमाडाैं, ३२ साउन । अाज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा २२.६४ अंकले बढेर १७१७.४५ बिन्दुमा पुगेको छ । कुल ६०६८ कारोवारबाट २० लाख ३८ हजार ९१४ कित्ता शेयर किनबेच भई १ अर्ब ६ करोड ३१ लाख ७५ हजार २९४ रुपैयाको कारोवार भएको…